ATK's Explicit Blog | ဖို-မ ရေးရာများဖြစ်ပါတယ်၊ စိတ်မ၀င်စားရင် လှည့်ပြန်ပါတော့…
ဒါဖတ်ပြီးမှ မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းကြတော်မူ... သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ ပို့(စ်)များများစားစား သိပ်မရှိပါဘူး။ စုစုပေါင်းမှ ၄၇ ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ စုံအောင် ဖတ်ပြီးမှ မေးခွန်းတွေ မေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ရေးပြီးသား ပြောပြီးသားတွေ ပြန်ပြန်မေးနေတာကို မဖြေတဲ့အတွက် မျက်မာန်ရှတော်မမူကြပါနဲ့ခင်ဗျား။ တချို့ဟာတွေ (ဥပမာ - အဖြူဆင်းတာလိုဟာမျိုး) ကို ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ဖြေထားပြီးသား ဖြစ်တာမို့ ကွန်မန့်တွေကိုပါ စုံအောင် ဖတ်ပြီးမှ မေးမြန်းတော်မူကြစေချင်ပါတယ်။ ဖြေပြီးသားတွေကို ထပ်ဖြေတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် အဲလို မေးလာတဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုပါ moderate လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါခင်ဗျား။
“အတ္တကျော်”ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရောင်းကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့”၊ “မီးငယ်တို့ အသိကြွယ်ဖို့”၊ “ယောက်ျားသားချင်း ပွင့်ပွင့်လင်း”၊ “မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့”ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သည်စာအုပ်တွေမှာက “မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး”လို့ အခုခေတ်မှာ နာမည်လှလှပေးထားတဲ့ ဖို-မ ကိစ္စတွေကို အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အဲဒီ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းလာသူတွေလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။ ခမျာများမှာ ကျွန်တော် မရေးခင်တုန်းက ကြိတ်မြုံခံစားနေကြရပြီး ဘယ်သူ့ကို မေးရမှန်း မသိဖြစ်နေရာက ကျွန်တော်ပေါ်လာတော့မှ ဟင်းချနိုင်ကြပုံပါပဲ။
တချို့တွေရဲ့ အမေးတွေက စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖြေလို့ မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် အများသူငါ သိသင့်တယ်။ တချို့တွေရဲ့ အမေးတွေက ဖော်ပြလို့ ရတန်ကောင်းရဲ့လို့ ယူဆပြီး ကျွန်တော်က ချရေးလိုက်တယ်။ မဖော်ပြသင့်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့သူက ဆုံးဖြတ်လို့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အများသူငါ မသိရဘူး။
ဒါကြီးကို စိတ်ထဲမှာ မအီမလည် ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။ အခုတော့ ဘလော့(ဂ်)ကတစ်ဆင့် ပုထုဇဉ်လူအများ သိသင့်တာကို တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး သည်ဘလော့(ဂ်)ကို သတ်သတ် ထပ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
အပြေပြစ်ဆုံး၊ အဖွယ်ရာ အချေငံဆုံး စကားလုံးများနဲ့ ကြိုးစားတင်ဆက်သွားမှာပါ။ သိပ်နားရှက်စရာ ကောင်းနေပြီး သိပ်လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ ညှပ်ရေးသွားပါမယ်။
မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး (၀ါ) ဖို-မ ကိစ္စများကို စိတ်မ၀င်စားသူများ
ဒါမျိုးကို အကုသိုလ်အလုပ်လို့ ထင်မြင်ယူဆထားသူများ
သည်နေရာက အမြန်ဆုံး လှည့်ပြန်သွားကြဖို့ လေးလေးနက်နက် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကွန်မန့်တွေ ရေးကြမယ်ဆိုရင်လည်း အပြေပြစ်ဆုံး၊ အဖွယ်ရာ အချေငံဆုံး စကားလုံးများနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားရေးသား ပေးကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
ညာဘက်မှာ ပေးထားတဲ့ “မကြာခင်က တင်ထားတာ”ခေါင်းစဉ်အောက်က ခေါင်းစဉ်လေးတွေကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖတ်ချင်တာလေးတွေ ရွေးဖတ်သွားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း “အဖတ်များတာ” ခေါင်းစဉ်အောက်က ခေါင်းစဉ်လေးတွေက တစ်ဆင့်လည်း သွားနိုင်ကြပါတယ်။
ရှဲချင်ရင်ShareFacebookTwitterEmailLike this:Like Loading...	472 Comments
Sabei Lwin permalink	03/08/2010 18:40	Dear Saya,
We do appreciate your sharing.
Reply	lettwebaw permalink	05/08/2010 02:34	Thank you very much indeed for all the support and comments. Without them I would not have enough guts to keep up this blog.
အားပေးကြတာ၊ ကွန်မန့်ရေးကြတာများ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲသလို အားပေးမှုတွေသာ မရှိရင် သည်ဘလော့(ဂ်)လေးကို ကျွန်တော် ဆက်ထားရဲမှာ မဟုတ်တာ အင်မတန်မှ သေချာလှပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကဗျာ၊ အခု ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့(စ်)တွေကို မဲပေးရုံသာ မကဘဲ Facebook မှာလို like လို့လည်း ရနေတာ ကနေ့ တွေ့လိုက်မိတယ်။ ကြိုက်ရင် like ပေးသွားနိုင်ကြောင်းပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပိုအားရှိစေနိုင်တာမို့ပါ။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ comment တွေကို ကျွန်တော်က အတည်ပြုပေးမှ မြင်ရမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုးနတ်ရှင် (connection) ဗွေဖောက်နေတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော် ဇယားရှုပ်နေတဲ့အခါ၊ အင်တာနက်နဲ့ ဝေးရာ ရောက်နေတဲ့အခါများမှာဖြစ်စေ comment တင်ထားပေမယ့် တော်တော်နဲ့ အတည်ပြု မပေးနိုင်တာကို နားလည် သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တော် မူပေးကြဖို့လည်း တစ်လက်စတည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါရစေခင်ဗျား။
Reply	linn htet permalink	03/06/2011 13:17	၁ခုသိချင်တာရှိလိုပါ
lettwebaw permalink*	04/06/2011 19:45	ဟိုလိုကိုင်ကြည့်ရင်တော့ ဟိုလိုဟာများ ဖြစ်မလား မသိဘူးပေါ့နော်… ညီမလေး permalink	24/07/2011 22:34	ဆရာပြောတဲ့ “ဟိုလိုကိုင်ကြည့်ရင်တော့ ဟိုလိုဟာများ ဖြစ်မလား မသိဘူးပေါ့နော်… ” ဆိုတာဘာလဲဟင်..? ဘာကြီးကိုပြောတာလဲ…? ..စပ်စပ်စုစုလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ …မသိလို့မေးကြည့်တာပါ …အနာဂတ်အတွက် ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးတွေ မှတ်သားထားချင်လို့ပါ ….း) ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ….
lettwebaw permalink*	24/07/2011 23:31	အဲ… သိဘူးလေ… သူက “ဟိုလို”တွေ “ဟိုဟာတွေ”နဲ့ နားမလည်အောင် ရေးထားတာကိုး… အဲတော့လည်း သူကျေနပ်အောင် “ဟိုလို”ပြန်ဖြေလိုက်တာပါကွယ်… ဖြေသူကိုယ်တိုင်လည်း ဟိုလို ဖြစ်နေတယ်လေ… ကိုကြီး permalink	18/08/2011 22:45	ဆရာစာတွေဖတ်ဖြစ်တာကြာပါပြီ…. linn htet မေးထားတာလေး ကျွန်တော်သိချင်တာနဲ့တူမယ် ထင်လို့ပါ … ချစ်သူနဲ့အတူတူနေမှ ကိုယ်ဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါလား.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကိုင်ကြည့်ယုံပါဘဲ … ဘာများဖြစ်နိုင်လဲသိပါရစေ.. ဆရာရေးထားတာလေးဖတ်မိလို့ပါ *သုက်ပိုးဆိုတာ သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်..သုက်နဲ့ ထိတွေ့ထားတဲ့ လက်တောင်မှ ယောနိနားမှာ မထားကောင်းပါဘူး။ * ဆိုတာလေ … သူ့ကိုင်ကိုယ့်ကိုင်ဆိုတော့သုက်ပိုးများပါသွားနိုင်လားလို့ပါ … သူကအရမ်းစိုးရိမ်နေလို့မေးကြည့်တာပါ … ကျွန်တော်တို့တွေ့တာperiod ပြီးမှတွေ့ကြတာပါ … ဒါပေမယ့်သူ့ ယောနိမှာ စိုစွတ်နေတယ် အဲဒါ သားအိမ်က စိမ့်ထွက်ရည် များဖြစ်နေမလားလို့ပါ periodပြီးမှဆိုပေမယ့် … တကယ်လို့ဖတ်တာလိုနေသေးတယ်ဆိုလည်း ဘာတွေဖတ်သင့်တယ်ဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးပါ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … (သူက ရာသီလည်းမလာသေးဘူးတဲ့.. နောက်ပြီးအန်ချင်နေတယ်တဲ့လေ …)
thuya permalink	16/12/2011 14:25	g mail ကနေစာဖတ်လို့ မရဘူးလားဗျာ လုတ်ပေးပါဦး။
Mee Mee Gyee Lay permalink	03/09/2010 20:39	ဆရာရှင့်
ဆရာပေးထားတဲ့ နာမည်ကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ကဗျာဆန်ဆန်လေးပဲ ပေးပါလားဆရာရယ်။ သမီးအသက် အရမ်းမကြီးသေးပါဘူး။ ဆရာ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ သုံးတဲ့ စကားအရဆိုရင်တော့ ကလေးမကြီး အရွယ်ပါ… ၂၉ နှစ်ပါ ဆရာ။ ကိုယ်အရမ်းကြိုက် အရမ်းလေးစားရတဲ့ ဆရာနဲ့ ခုလိုမျိုး ဆွေးနွေးခွင့်ရတာ ဂုဏ်လည်း ယူတယ်၊ ပျော်လည်း ပျော်ပါတယ် ဆရာ။ ဆရာ့ကို ချက်ချင်းကြီး စာပြန်ပေးမယ်လို့ လုံးဝ ထင်မထားပါဘူး။ ဆရာရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်တိုင်း ဘယ် အကြောင်းအရာလေးက ဘယ်လို ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ရေးထားတာ ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ ဖိုဒါတစ်ခုနဲ့ အပြည့်ပဲဆရာ။ မပို့ဖြစ်ဘူး။ မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့ စာအုပ် နောက်ဆက်တွဲ ထွက်မလား မေးထားတာ ဆရာ မဖြေသေးဘူးနော်။ ဆရာစာတွေ သည့်ထက် အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေလို့။ အေတီကေကို အရမ်းလေးစားတဲ့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ၊ ဆရာ မသိတဲ့ လူတွေထဲမှာ သမီးလိုမျိုး လူတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိမလဲ မသိဘူးနော်။
Reply	lettwebaw permalink	03/09/2010 21:42	ကျွန်တော် ပေးတဲ့ နာမည် မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာ အဆန်လွန်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
ဖှို(လ်)ဒါတစ်ခုနဲ့ အပြည့်ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို zip file လုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ပို့ပေးပါလား။
“မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့” နောက်တစ်အုပ်က ထုတ်မယ်ဆိုရင် ထုတ်လို့ရနေပါပြီ။ ကျွန်တော့် ထုတ်ဝေသူ (ကျွန်တော့် အိမ်က မမ) ကလည်း ထုတ်ချင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က တစ်အုပ်နဲ့ တစ်အုပ် သိပ်ကပ်နေမှာ စိုးလို့ နည်းနည်းလေး ဆိုင်းထားတာပါ။ ၂၀၁၁ ထဲမှာတော့ ထွက်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျား။
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲသလို အားပေးတဲ့သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အခုလောက်အထိ မိုက်နေမိတာပါ။ Reply	koaung permalink	04/09/2010 20:14	thank
Reply	ko pe permalink	07/09/2010 17:56	ဖေါက်ထွက်လိုင်း
Reply	Khin Ma Ma permalink	16/09/2010 23:55	အားပေးနေပါတယ်ဆရာ။
Reply	သီဟ permalink	04/10/2010 04:21	ဆရာခင်ဗျား ကျနော် ဆရာ့ရဲ့ Email သိချင်ပါတယ်။ ကျနော့်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို မေးချင်လို့ပါ။ အပြင်မှာမေးရင် အများပြည်သူအတွက် မသင့်လျော်သော စကားလုံးသုံးနှုန်းမိမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကူညီပါဦးဆရာ
Reply	moon permalink	08/10/2010 14:30	နောက်ထပ် post အသစ်တွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်..
အခုတင်ထားတာတွေက ဖတ်ပြီးသွား ပါပြီ..
အဲ့ဒါကတော့ အပျိုစစ်မစစ် ဘယ်လို သိနိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ..နောက်တခု ကြားဖူးတာက အပျိုတကယ်စစ်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်တယ် ဆိုတာဟုတ်ပါသလားရှင်..
Reply	ချစ်ကိုကို permalink	22/12/2011 23:45	ဟုတ်ပါတယ်….ကျွန်တော်လဲ ကြားဘူးနာဝရှိတာပါ.. တစ်ခါမှတော့စမ်းမကြည့်ဘူးပါဘူး..ဇတ်ကားတွေထဲမှာတော့ဒီလိုပဲ ကြည့်ဖူးတာပဲ
Reply	kg ka lay permalink	22/03/2012 23:13	ဟုတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့ စတင်sex ဖြစ်တုန်းက ကောင်မလေးက အပျိုအစစ်လေးပါ..သူမရဲ့  အဂါထဲက သွေးနည်းနည်းထွက်ပါတယ်.. နည်းနည်းပါးပါးတော့ နာတာပေါ့.. ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဆက်ဆံတဲ့ အချိန်တွေဆိုရင်တော့ အေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီ..
ဇော်ဝဏ္ဏ permalink	08/10/2012 10:53	ဆရာစာအုပ်တွေမှာလဲရေးထားပါတယ် ကျွန်တော်ကပြန်ပြောပြတာပါ
ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေမှာ အင်္ဂါရဲ့ အပေါ်ယံ အေ၇ပြားလေးပြုတ်သွားသလိုပေါ့ အဲ့လိုပါပဲ အမျိုးသမီးအင်္ဂါလေးဟာ အင်မတန်နုပါတယ် ပထမဆုံးအတွေ့ကြုံဆိုရင်တော့ အဖော်ယောက်ျားလေးရဲ့ ယုယနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ခံစားရမှုက ကွာဟ နိုင်တယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်
Reply	zawye permalink	25/10/2010 15:02	ဆရာရဲ့စာတွေကိုကျန်တော်သားငယ်တို့နားလည်ဖို့ထဲက စောင့်ဖတ်ခဲ့တာပါဆရာ အရမ်းကို ကြိုက်ပါတယ် နောက်ပြီးဆရာရဲ့စာတွေက ကျန်တော်တို့လင်မယားကြားမှာလည်း အင်မတန်မှအဖိုးတန်လှပါတယ် ကျန်တော်တို့သမီးရီးစားဘ၀ထဲက မီးငယ်တို့စာအုပ်ကိုကျန်တော်ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ဆရာရဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများကိုလည်း ၀ယ်ပြီးစုထားပါတယ် ဒါပေ့မယ် ကျန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပျုငှာတဲ့မှုရာ စာအုပ်ကိုခိုးသွားတယ်ဆရာရယ်ကျန်တော် အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ဝယ်ချင်ပါတယ် ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာပြောပြပေးလို့ရမလားဗျာ… ဆရာ့စာပေများကို သေသည်အထိအားပေးသွားပါမယ်… လေးစားစွာဖြင့် zawye
Reply	lettwebaw permalink	26/10/2010 23:00	နိုင်ငံခြားမှာတော့ ဘယ်လို ၀ယ်ရမယ်ဆိုတာ မပြောတတ်ဘူးခင်ဗျ။ မြန်မာစာအုပ်တွေ ရောင်းပေးနေတဲ့ စလုံးက လုပ်ငန်း တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ link ကျွန်တော် မေ့နေတယ်။ လောလောဆယ် အင်တာနက်ကလည်း google ရယ်၊ yahoo ရယ်၊ gmail နဲ့ facebook ရယ် ၀င်မရအောင် အလွန်ထူးဆန်းနေတာမို့ ရှာမပေးနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါ။ google မှာ myanmar books ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ site ကို တွေ့မယ် ထင်ပါတယ်။ သူက တစ်ဆင့် ၀ယ်လို့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်က မိသားစုကို ၀ယ်ခိုင်းချင်ရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့က (စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင် တချို့ကလွဲလို့) ဆိုင်အတော်များများမှ ၀ယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက အင်းဝ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာပါပဲဗျာ။
Reply	Ye Ye permalink	15/03/2012 19:02	ဆရာ့ကို အားပေးနေပါတယ်………….
zawye permalink	04/12/2010 09:43	ချစ်တင်းနှောခြင်းကို ယောက်ျားသားတွေက ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ခံစားကြသည် မှန်သော်လည်း အမျိုးသမီးများကမူ “နှလုံးသားဖြင့်” ခံစားလိုကြပါသည်။
Reply	lsland permalink	11/01/2011 13:13	ဒီဘလော့ဂ်လေးကို လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်လောက်ကမှရှာတွေ့တာပါ။ နှစ်ရက်အတွင်း ရှိသမျှပို့စ်အကုန်လုံးကို ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက Idea ကိုဖတ်ရင်းဆရာ့စာတွေနဲ့ရင်းနှီးနေပေမယ့် ဆရာရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုတော့ ၀ယ်မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တူတူနေတဲ့အဒေါ်အပျိုကြီးတွေတွေ့သွားရင် အဆူခံရမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ ခုလို သူတို့လက်လှမ်းမမီတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားရင်တော့
ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်ရေးလေးသာယာဖို့အတွက်ရော..သားသမီးတွေအတွက်ပါ ဆရာ့စာအုပ်တွေဝယ်ထားဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဆရာစာတွေအများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။ အမြဲတမ်းအားပေးသွားမှာပါ။
Reply	Shwe Zin Ko permalink	16/01/2011 05:11	ဒီစာတွေဖတ်ပီးမှ အိမ်ထောင်ရေးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရတာပါ။ အမြဲအားပေးလျှက်ပါဆရာ။
Reply	oliver permalink	18/02/2011 21:04	သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောလို့ ၀င်ပြီးလေ့လာတာပါ…….
ယောကျာင်္းလေးတွေ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ပါ။။။
Reply	KhinMK permalink	25/02/2011 21:15	ဆရာ။
ဆရာ့ ကို ကျွန်မရဲ့ အခြေအနေတချို့ ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာ့ ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကို အလေးထား သိချင်မိလို့ ပါ။ ကျွန်မက အခု ပြည်ပရောက်နေတော့ ဆရာ့ ကိုဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။ ဆရာ့Email ကိုမေးကြတဲ့ မေးခွန်းအချို့ ကို ဆရာပြန်ဖြေထားပုံအရ Ebook အနေနဲ့ ထွက်ထားတဲ့ ဆရာ့ စာအုပ်တွေမှာရော၊ သရဖူ၊ Teen Magazine တွေရဲ့ online website တွေမှာပါ ဆရာ့ ကိုဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာ ရှာကြည့် ပါတယ်။ ဆရာ့ အိမ်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ တွေ့ ရပြီး Email လိပ်စာတော့ မတွေ့ ရပါ။ ဆရာ့ ကို မေးမြန်းအကြံဥာဏ်တောင်းခံချင်တာများကို ယခုလိုပဲ comment box ထဲမှာ ထားခဲ့ရမှာပါလား။ အကယ်လို့ များ ဆရာ့ Email ကိုတိုက်ရိုက်ပို့ ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင် ဆရာ့Email ကိုသိပါရစေ။
Reply	lettwebaw permalink*	25/02/2011 22:43	ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… ခင်ဗျား email ကို ကျွန်တော် မေး(လ်)ပို့ထားပါကြောင်း။
Reply	ထွန်းအောင် permalink	22/04/2011 13:13	ဆရာ.ရေး သား ထား ထား တာ တွေ က လွန် သိမှတ် စ၇ာ ကောင်း ပါ တယ် ခင် ဗျာ ဆရာ.အီးမေး ကို ကျွန်တော်. ဆီ ကို ပို.ပေး ပါ လား ခင် ဗျာ ဆွေးနွေးချင် လို. ပါ ဆရာ
Reply	SaiOn permalink	24/04/2011 10:28	ဆရာကျွန်တော့်ကိုလည်းဆရာရဲ့မေးလေးပို့ပေးပါလားဗျာ။ကျွန်တော့်မှာလည်းဆွေးနွေးစရာလေးရှိလို့
Reply	၁၂၃၄ permalink	24/04/2011 19:01	ဆ၇ာကျွန်တော်လစဉ်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ပြသနာ လေးကို အဖြေရှာပြီး စဉ်းစားပေးပါဦးဗျာ…..ဆရာလိုပါပဲ ဆရာက ဆရာမိန်းမကြောင့် လတိုင်း ဒေါသတွေမြိုလို့ ဝလာပေးမယ့် ကျွန်တော် ကပိန်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ပြသနာ က နဲနဲ ပိုကဲမယ် ထင်တယ်ဗျ….ပြသနာက အခုကျွန်တော့်ကောင်မလေးက menstruation လာတိုင်း ကျွန်တော့်ကို ပြသနာရှာနေတာပါပဲ….ကျွန်တော်နဲ့ ၎နှစ်ကွာတယ် အဆိုးဆုံးက အရင်က ကျွန်တော် ရည်းစား တစ်ယောက်ထားဖူးတယ်ဗျာ ပြတ်သွားတာ ၄ နှစ် ကျော် လောက်ရှိပြီ အခု လက်ရှိတစ်ယောက်နဲ့ က သုံးနှစ် ပြည့်တော့မယ်….menstruation လာပြီဆို သူကိုမစရဲ မနှောက်ရဲ နဲနဲ စလိုက်တာနဲ့စိတ်အလိုမကျဘူး….. အသေးအမွှားလေးကအစ အထာကောက်ပြီး ပြသနာ ရှာနေတတ်တယ်…. အဲ့ဒါ ပြသနာ မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိဖြေရှင်းပြီးသွားရင်အရင်ရည်စားအကြောင်းရောက်သွားတယ် နောက်ဆုံး ဒီဘူတာပဲစိုက်တာပဲ…..သူက 1st love,kiss မဖြစ်ရလို့ကျွန်တော့် မှာ သစ္စာလဲမဖောက် သူမကြိုက်တာ ဆေးလိပ်၊အရက်၊လောင်းကစား တစ်ခု မှမလုပ်ဘူး အရင် က ရည်းစားလေးတစ်ယောက်ထားမိတာ လတိုင်းလို ပြသနာ ရှာခံနေရတယ်…နောက်ဆုံးဒီတစ်ခါ အဆိုးဆုံးက တိုက်ပေါ်က ခုန်ချမယ်ဆိုပဲ
ချစ်သူက ဒီလိုဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုနေနိုင် မှာလဲ…..အရင် ရည်းစားနဲ့ ပတ်သက်လို့တစ်လတစ်လ ရှာတဲပြသနာ ခေါင်းစဉ် ကတော့ မထပ်ဘူး ဆရာရေ အဲ့ဒါအဆင်ပြေအောင် နည်းလမ်းရှာတော့ အကြံတစ်ခု ရတယ် သူ menstruation ရောက်ရင် ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက်မတွေ့ ဘူး….ပြီးမှပြန်တွေ့ မယ် ဒါလဲ အဆင်ပြေမလို နဲ့အဖျားရှူးသွားတယ် မတွေ့ ရတော့ massage နဲ့ ပြသနာ ရှာတယ် ပြသနာရဲ့ အသေးစိတ်ကို တော့ မပြောပြတော့ပါဘူးဗျာ သူလဲ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ကျွန်တော့်စီကတောင်းနေတယ် ကျွန်တော်လဲဆရာကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲ
ကူညီပါ ဆရာ ရယ် အားကိုးပါတယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	Moe Sweet permalink	29/04/2011 13:31	နားရင်းသာ အုပ်လိုက်ဗျာ။ No offence!
Reply	မောင်မောင်တုတ် permalink	20/05/2011 15:20	အဲ့ ဒီအချိန်မှာ သွားပြီး ချစ်တင်းနော ကြည့်ပါလား – သူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့။
ဒါကြောင့်ပဲ စိတ်တိုနေတာလားမသိဘူး။ သားသားတော့ ကြောက်ကြောက်။
ဇင်နိုင်းခ permalink	15/06/2011 21:54	မဆိုးဘူးပဲ… ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်… နားရင်းအုပ်မှာလား?
တော်ကြာ ဟိုဟာလာလို့နာတာတမျိုး အတင်းသွားနှောလို့ နာ
zaw zaw permalink	28/06/2011 23:24	ဟုတ်တယ်
lettwebaw permalink*	19/05/2011 07:31	လစဉ် ဓမ္မတာကြောင့် စိတ်အနေအထား ပြောင်းတာကတော့ သဘာဝကျတာမို့ ခွင့်လွှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင် ရည်းစားကိစ္စ တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရမယ်ရှာနေတာကတော့ သဘာဝမကျဘူး။ သူ့စိတ်ကို သူ မပြင်ရင် နှစ်ယောက်စလုံး ရေရှည်မှာ စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြတ်လမ်းနည်းကတော့ အဲဒါကို ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာလုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ အပြတ်အသား ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်။ ရေရှည်နည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့ကလေးမ စာအများကြီး ဖတ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ အရေးမကြီးတာနဲ့ အရေးကြီးတာကို ကွဲပြားအောင် သိမြင်နိုင်တဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ခမျာမှာ နည်းရှာတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူသာဆိုရင် ဓမ္မတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းနေရင်တောင်မှ ဒါ ဒါချည်းပဲ လှိမ့်လုပ်နေမှာ မဟုတ်တာ သေချာတယ်လေ။ ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ အဲလို မိန်းကလေးမျိုးနားမှာ ကြာကြာ မနေတော့ဘူး။ ဖ၀ါးနဲ့ တင်ပါး တစ်သားတည်းကျအောင် ပြေးတော့မှာ။ (ပြေးလည်း ပြေးခဲ့ဖူးပါသဗျာ။) Reply	ဇင်နိုင်းခ permalink	15/06/2011 21:58	ဟားဟားဟားးp
kalo permalink	14/12/2011 13:16	ပြေးနိူင်မှလွတ်မှာ………လမ်းခွဲလိုက်တာပိုအဆင်ပြေမယ်ဗျို့
Nay Yu Aung permalink	09/09/2012 12:25	ဟုတ်တယ်ဗျ တော်တော်ကိုဆင်ခြင်တုံတရားနည်းရှာမယ့်ပုံပဲ.. .သူပြောပုံအရ..လဗွှတ်နဲ့သာပွတ်ပလိုက်ဗျာ…။
N-x permalink	26/01/2012 10:17	တူတူပဲဗျို့.. ဒုက္ခက .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ရက်ထဲပါ …
စိတ်ဆတ်နေတာ .. အဓိက ပြသာနာဖြစ်နေတာ အကို
Reply	Yan permalink	30/04/2011 23:49	ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Site ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ဖတ်ရှုသင့် လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Reply	sybergun permalink	18/05/2011 21:08	ဆရာမေးစရာရှိလို.ပါ။စကားလုံးရိုင်းသွားရင်ခွင်.လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော.ကောင်မလေးရာသီလာတာနောက်ကျနေလို.ပါ။
Reply	lettwebaw permalink*	19/05/2011 07:23	တစ်ခုခု အစားအသောက် အနေအထိုင် ချွတ်ချော်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုခု ရှိရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Dofinal က အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး အပြင်းစားပါ။ အစာနဲ့ သောက်ရပါတယ်။ သူက အစာအိမ်ကိုပဲ အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာဝန် မဟုတ်လို့ သည်လောက်ပဲ ဖြေတတ်ပါတယ်။
Reply	lettwebaw permalink*	19/05/2011 07:23	တစ်ခုခု အစားအသောက် အနေအထိုင် ချွတ်ချော်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုခု ရှိရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Dofinal က အကိုက်အခဲ ပျော်ဆေး အပြင်းစားပါ။ အစာနဲ့ သောက်ရပါတယ်။ သူက အစာအိမ်ကိုပဲ အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာဝန် မဟုတ်လို့ သည်လောက်ပဲ ဖြေတတ်ပါတယ်။
Reply	sybergun permalink	18/06/2011 20:02	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေ။
Hnin Nu permalink	20/05/2011 16:29	Sayar i want your advice, please give me youremail adress. Sincerely
Reply	lettwebaw permalink*	20/05/2011 16:50	You may easily find my email address in any of my books. Please find it yourself. I don’t feel like giving my email to people who randomly come up to the internet and ask for it. I want people to exert some of their own efforts if they really want to resolve their own challenges in life. Sorry.
Reply	1234 permalink	21/05/2011 16:25	I really appreciate u sir ATK for reply me even u’re busy . we’re now ok n she gave meapromise will do never
Reply	SaiOn permalink	12/06/2011 11:24	မောင်မောင်တုတ် y’all boy always think like dat ifagal is unsatisfied .
Reply	khinthitsar permalink	13/06/2011 16:12	ဆရာ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးပါတယ်၊၊
Reply	Kyaw NyeinChann permalink	13/06/2011 21:44	Nice to meet u again sayar .Last three years around i came to your home and chatted with u.I thought that
u cannot remember me. I missed that time, really thanks for your ideas and suggestions that can get many advantages for mine. Now I’m at foreign country.I really wish u to get more and more successes for whole life.
Reply	ဇင်နိုင်းခ permalink	15/06/2011 22:08	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. အားလုံးအတွက်ပါ…ဆရာ့နာမည်က အတ္တကျော် နော နောက် ကျွန်တော်သိချင်တာရှိရင်လည်းမေးပါ့မယ် … မန်ဘာအနေနဲ့ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း
ကျွန်တော် ဝင်ချင်ပါတယ် … လွတ်လပ်စွာ ကွန့်မန့် ပေးခွင့်ရမယ်ဆိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့နာမည်က ဇင်နိုင်းခ ပါ….
Reply	1234 permalink	17/06/2011 11:12	ဆ၇ာကျွန်တော်ဇာတ်ထုပ်အဟောင်းကြီးရဲ့ပြသနာကို အကြံပေးဖို့ထပ်လောင်း အကူအညီတောင်းပါရစေ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်နဲ့ ဆရာ အနီးကပ် ဂဃနဏ ခရေစေ့တွင်းကျ ဆွေးနွေးခွင့် ရမယ်ဆိုရင် အတိုင်းအထက်အလွန်ပါ။ ခုလို ပြောရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့၃နှစ်စာ ဇာတ်လမ်းတွေ ပြောပြီ ဆရာ့ဆီက အကြံဥာဏ်လိုချင်လို့ ပါ ။ ဒီပြသနာကို စခဲ့သူက ကျွန်တော်ပါ သူမနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး 9လ အကြာမှာ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ ကို Gtalk ကနေ အရင် တယောက်စီ စိတ်ကတစ်ခါတလေ ရောက်နေကြောင်း ပြောမိခဲ့တာကို သူမက ကျွန်တော် chat ထဲမှာ ရှာတွေ့မိသွားရာက ခုချိန်ထိ ပြသနာ အရှာခံနေရတယ် ဆိုပါတော့. ကျွန်တော်ဘက်က ကတိတွေ ထပ်လောင်း သစ္စာတွေ ထပ်လောင်း ပေးခဲ့၊ ဆိုခဲ့ပြီး ပါပြီ။ အဲ့အချိန်ကစ ကျွန်တော်အပေါ် အယုံအကြည် မရှိခဲ့ တာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ အဖြစ်က သေသွားတဲ့လူ အတွက် သောက ရောက်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ သေသောသူက ပြန်မရှင်နိုင်သလို သောကရောက်နေလို့လည်း အကျိုးမထူးပါဘူး ဒီစကားကြောင့် သူမခံစားနေရတဲ့ ဒဏ်ကနေ အမြန်လွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ် menstruation လာတိုင်းကျွန်တော်အရင်အဆက်ဟောင်းပြသနာကိုအရှာခံနေရတာဟာ ကျွန်တော်မွေးနေ့တလသာလွဲပြီး ထပ်အရှာခံနေရပြန်ပါပြီ။ခက်တာက ကျွန်တော်ဘက်က ကျွန်တော် GF(အခုလက်ရှိ) ကို မပြတ်နိုင်တာပါပဲ ။ဆရာဘက်က ဖြတ်ဖို့အကြတ်ကိုင်ခိုင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်းအမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ပြသနာဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မပြတ်နိုင်လး သူမဘက်က ကျွန်တော့်အပေါ် မယုံကြည်တာက တကြောင်း သူ့ကိုယ်တိုင်က သံသယများတာတစ်ကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို နောက်ဆုံး နားလည်သည်တိုင်အောင်လက်ခံပေးဖို့လမ်းစမမြင်ပါဘူး ။စကားအထအနလည်းအလွန်ကောက်တတ်သူပါ ဒီလဆို နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြသနာ တက်နေပါတယ်။ဒီပြသနာတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ 2ယောက်ရဲ့ အချစ်သံယောဇဉ် တွေ၊မလျော့ရဲသွားချင်ပါဖူး အလားတူအိမ်မက်တွေကိုလည်း အပျက်စီးမခံနိုင်ပါဖူး…ယုတ်စွအဆုံး သူမကိုသာ မခွဲရဖူးဆို ဘာမဆို လိုက်လျောဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ပြသနာတိုင်းမှာ သူပြောသူမှန် ကိုယ်ပြောကိုယ်မှန်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြသနာတွေရဲ့အစလယ်ဆုံးကို နားထောင်ပြီး မမြင်တာတွေမြင်အောင် ပြသနိုင်သူ၊အကြံပေးနိုင်သူဆိုလို့ ဆရာတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ဆရာရဲ့ထိမ်းမြားပေါင်းဖက်ရန်ဖြစ်လျက်ပင်ချစ်ကြင်နေနည်း ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်း ပြန်ဖတ်နေပါတယ်၊ကူညီပါ ဆရာရယ် စိတ်တွေ အရမ်းရှုပ်ယှက်ခက် ရင်ထဲမှာ လည်းအရမ်းတင်းကျတ်နေပါတယ်။
Reply	lettwebaw permalink*	18/06/2011 19:46	အကူအညီပေးလို့ မရဘူး ထင်ပါတယ်။ မရဘူးဆိုတာက အဲဒီ့မိန်းကလေးက သူ့စိတ်ကို သူ ပြင်မယ့် သဘောမရှိဘူးလေ။ ပြင်ချင်စိတ်လည်း ပြင်းပြင်းပြပြ ရှိဟန်မတူဘူး။ စကားပြောဖို့ လိုတာက နှစ်ယောက်စလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ့ကလေးမပဲ အဓိက လိုအပ်တာပါ။ သူကိုယ်တိုင်က ပြင်ချင်စိတ်ရှိရင် သူ့ဘာသာသူ နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်မှာ လောလောဆယ် အချိန်အား အင်မတန် နည်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပေးတာတွေ ရပ်ဆိုင်းထားတာ နှစ်နဲ့ ချီနေပါပြီ။ ဆောရီးပါ။ သူနဲ့သာ မခွဲရဘူးဆို ဘာမဆို လိုက်လျောဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အဆင့်တောင် ရောက်နေမှတော့ သူ ပြဿနာရှာသမျှ ဆက်ခံလိုက်ပေတော့လို့သာ ပြောရုံ ကျန်တော့တယ်လေ။ “ဘာမဆို”လို့ ကိုကိုက ဆိုတယ် မဟုတ်လား။ Reply	1234 permalink	19/06/2011 10:31	Hopeless ?I try it myself to solve this problem so long.As possible as sir pls help me once first time and last.I also said to her that to chat wif u sir , she also agree.She wanna change her mind but she can’t control it when we find problem.I don’t wanna carry these stupid things into our marriage life.I can’t help cus when we find problem she ever tell my fault.I know she really luv me and i do too.
lettwebaw permalink*	19/06/2011 10:39	It isapsychological problem which needsalot of counselling sessions that I cannot afford at all. And let me correct you: I don’t think she really loves you, but she is hopelessly falling in love with herself. Sorry for not being able to lend youahand. lettwebaw permalink*	19/06/2011 10:48	On second thought, you should ask her to listen to the broadcast I made some time ago. The link is http://atkbooks.wordpress.com/2011/02/14/201011/ It might be of some help to her.
1234 permalink	18/06/2011 15:31	pls help me sir
Reply	1234 permalink	19/06/2011 14:35	နားထောင်ပြီးပါပြိ ဆရာပြောတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်ရဲ့ အဖြစ်နဲ့ တော်တော်ကြီးကို တူပါတယ်။မတူတာက ဒီကောင်လေးနဲ့ ကျွန်တော်ပါပဲ ကျွန်တော်က သူ့အပေါ်မှာ တစ်ခါသစ္စာဖောက် ခဲ့တာလေးပဲ မတူတာပါ ကျန်တာအားလုံးက အကုန်တူပါတယ် ရည်စားမကျနေခဲ့ တာတွေကော ဒီ site ကိုလဲ ကျွန်တော် ကောင်မလေးကို ပေးနားထောင်လိုက်ပါ့မယ် ကျွန်တော် တို့အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေတစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သာသူနေရာမှာဆို ပြန်လည်စိတ်လည်ချင်တဲ့ စိတ်များ ဖြစ်မိမလားပဲ ။ ရည်စားမကျနေခဲ့တာကြောင့် ပါ။ ဒီကောင်လေး ပြောသလို ကျွန်တော့် ကောင်မလေးလဲ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ် ခွင့်လွတ်တာနောက်ဆုံးပဲ ။ သူ့နည်းအတိုင်း နောက်တစ်ကြိမ်ဆို လုပ်မလားမသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ကကတိပေးပြီးသွားပြီ မလုပ်ဘူး သေချာပါတယ် မလုပ်မှာ ။ မယုံတော့လဲ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်စိုတာ မသိတော့ဘူးဗျာ။..
Reply	komyo permalink	21/06/2011 18:11	ဆက်ဆံတဲ့အခါကြာအောင်ဘယ်လိုထိန်းထားရမလဲ……ဆ၇ာ..ကူညီပေးပါ
Reply	lettwebaw permalink*	17/07/2011 11:09	http://www.scribd.com/doc/57475935/%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B8%E1%80%B9?secret_password=22j0pe1dh6gldaxee7c8 မှာ ဆရာဝန်တစ်ဦးက သည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သွားဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်တော့ မဖတ်ရသေးဘူးဗျ။) Reply	ဇင်နိုင်းခ permalink	03/08/2011 12:56	ဈေးမှာကြာဆေးဘယ်လိုရောင်းလည်းလို့သွားမေးလေ…ဟီးးးးးးးးးးးးး
Reply	East coast nigger permalink	29/06/2011 00:56	ဆရာ ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးနည်းနည်းရှိလို့ပါဗျာ..ဒီလိုပါ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးရဲ့ယောနိဝက နည်းနည်းမည်းနေတယ် ခင်ဗျ အဲဒါလေ ကျွန်တော်ကြားဖူးထားတဲ့အရောင်နဲ့လွဲနေလို့ အပျိုရောစစ်ရဲ့လား?တစ်ခြားအကြောင်းနဲ့အဲလိုမည်းသွားနိူင်လား ခင်ဗျာ..ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါ ခင်ဗျာ..
Reply	lettwebaw permalink*	12/07/2011 20:51	ဘယ်လို အရောင်များ ကြားဖူးထားပါလိမ့်ဗျာ။ စိတ်များ ညစ်ပါရဲ့။ အပျိုအစစ်ရဲ့ နားရွက်အရောင်က ဘာအရောင်လို့ရော ကြားဖူးသေးလဲဟင်င်င်င်… Reply	angelpricess permalink	02/07/2011 17:02	ဆရာ့ရဲ့ Explicit Blog မှာမေးချင်ရင် ဘယ်လိုမေးရပါလဲဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	12/07/2011 20:44	အခုလိုပဲ မေးပေါ့ခင်ဗျာ။ Reply	DIYAY permalink	06/07/2011 00:17	ဆရာအတ္တကျော်…
တခါမှမဆက်ဆံဖူးတဲ့အပျိုစင်တယောက်ရဲ့နို့သီးခေါင်းဟာဆူထွက်နေပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply	lettwebaw permalink*	12/07/2011 20:43	အဲ… အဲဒါ မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော် မြင်ဖူးတာကတော့ ပုံစံမျိုးစုံပဲ။ အပျိုစင်တွေရဲ့ နို့သီးခေါင်း အတော်များများ တွေ့ဖူးပါသဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ အပျိုစင်ရဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးဟာ ဘယ်လိုနေလဲလို့ မေးတာမျိုးနဲ့ အတူတူ ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply	ဇာနည် permalink	17/07/2011 00:09	ဆရာ့ အတ္တကျော်…
ခင်မင်လေးစားစွာနှင့် ကျနော့်စာရေး မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်….ကျနော်မေးချင်တာက မိန်းမတွေ ဘာကြောင့် နောက်လင်ငယ်နေကြတာလဲ…..
ကျနော်ကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေတာပါ….ကျနော့်မိန်းမနဲ့သားအပေါ်ကို
ဘ၀တစ်ခုလုံးစာ ပုံပြီးချစ်တာပါ…ကျနော်မေးတဲ့ မေးခွန်းကို မိန်းမသားတွေ ဘက်ကလည်း ပြန်ပြီးမေးခွန်း
ထုတ်လို့ ရပါတယ်..(ယောက်ကျားတွေ ဘာလို့ မယားငယ်နေလဲ)….ကျနော်က မိန်းမနဲ့အဝေးမှာ ရောက်နေပေမယ့် ကျနော့်ကိုကျနော် ထိန်းသိမ်းပါတယ်….မနေနိုင်ရင် အိမ်သာထဲမှာ အာသာဖြေပါတယ်.
မိသားစုတာဝန်လည်း ကျေအောင်ကျနော် တာဝန်ယူတယ်…..မိန်းမကိုလည်း စီးပွားရေး တစ်ခုအနေနဲ့
ကျနော့်မိန်းမက အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာလင်ငယ်နေ နေပါတယ်…ကြာခိုတဲ့ ကောင်ကလည်း ဒီမိန်းမမှာ ကလေးနဲ့ယောက်ကျားရှိတာ သိသိကြီးနဲ့..အပြင်မှာ အတူနေဖို့ထိ ချိန်းဆိုပါတယ်…မိန်းမကလည်း လက်ခံပါတယ်….အဲဒါတွေအားလုံး ဘယ်လိုသိလဲ မေးလို့ရပါတယ်..ကျနော်က သူ့ရဲ့အီးမေးလ်တွေ အားလုံးကို ဖောက်ဖတ်ပါတယ်….ပြောရရင် သူ့ဂျီမေးကို ဟက်ပြီး ဖောက်ဖတ်တာပါ….ကျနော် အချိန်မှီသိလို့ သူ့မိဘတွေနဲ့ တားဆီးနိုင်ပေမယ့်….ပြန်ပြီး ဆက်သွယ်ဖောက်
ပြန်နေပါတယ်….ကျနော့်ဘက်က သူမှားတာကို သိပြီး မှားပြီးပြီ ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ဆက်မမှားဖို့ တောင်းပန်ထားတယ်….ထပ်ပြီးဆက်လုပ်နေပါတယ်….ဘာကြောင့် ဒီလိုဖောက်ပြန်နေရတာလဲ…..ကျနော် သူ့ကိုအရမ်းချစ်လို့ မိဘတွေတားနေတဲ့ကြားကပဲ ယူခဲ့တာပါ…ခုဆိုကျနော်တို့မှာ ကလေးတစ်ယောက်လဲ ရနေပါပြီ….ကျနော်ကလည်း မြန်မာပြည်ကို မပြန်နိုင်သေးပါဘူး…ကျနော့်ကလေး ဘ၀အတွက် ရသလောက် စုဆောင်းချင်ပါသေးတယ်…ကျနော် ဘာလုပ်သင့်လဲ အကြံဥာဏ်ပေးပါဦး ဆရာ…..ကျနော်သူနဲ့ကွာရှင်းပြီး ကလေးကိုဆွဲခေါ်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလား.
ကျနော့်မှာ အလုပ်ကတစ်ဖက် အိမ်ထောင်ရေးက တစ်ဖက်ကိုယ့်အတွင်းရေးကို အပေါင်းသင်းကို ပြောပြရမှာလည်း ရှက်လှပါတယ်….ကျနော့်မှာ ကလေးအတွက်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်…
ကျနော့်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့အနီးစပ်ဆုံး လမ်းညွှန်မှုတစ်ခု ပြသပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ…ဆရာ…
Reply	lettwebaw permalink*	17/07/2011 10:52	အေးဗျာ ကိုဇာနည်မောင်။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ခေတ်ကာလကြောင့်လို့ ပြောရမလားတော့ မသိဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် ယောက်ျားတွေ ဖောက်ပြန်တာက စီးပွားရေး ပြေလည်တဲ့အခါ သွေးသား အာသာ သဘောကြောင့် ဖြစ်တတ်ပြီး မိန်းမတွေ ဖောက်ပြန်တာက စီးပွားရေး မပြေလည်တဲ့အခါ အားကိုးရှာရင်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အခု ကိုဇာနည်မောင့် ကိစ္စကတော့ အဲဒီ့ ယေဘုယျထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကျတော့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းနဲ့ အနေဝေးတဲ့အတွက်လို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သွေးသားကြောင့်လို့တော့ ကံသေ ကမ္မမ အပြောရခက်ပါတယ်။ အထီးကျန်မှုကို ဖြေဖျောက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို သွေးသားကြောင့်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ ခေတ်ကာလကလည်း သွေးသားဆူပွက်ချင်စရာ ရုပ်သေ ရုပ်ရှင်တွေ အလျှံပယ်ဖြစ်နေတာလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူ့မိဘ (အထူးသဖြင့် သူ့မိခင်)ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တတ်ပြန်တယ်။ ဆိုလိုတက အဖေ အမေက အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို လုပ်ဖူးတယ်ဆိုရင် သူတို့က မွေးတဲ့ သားသမီးတွေလည်း အဲလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အကြံတော့ ကျွန်တော် မပေးပါရစေနဲ့။ ကိုဇာနည်မောင့်ဘာသာပဲ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။
Reply	ဇာနည် permalink	18/07/2011 20:08	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ..ခုလိုအချိန်ပေးပြီး ပြန်လည် ပြောပြပေးတာ..သူ့မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ အဲလိုမျိုး အကျင့်စရိုက် မရှိကြဘူး ဆရာ…သူ့စိတ်က ကျနော်နဲ့မရခင်တည်းက လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို
မိဘကတားရင်တောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ဇွတ်တိုးတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆရာ…သူလုပ်တဲ့ အရာမှန်သမျှကိုလည်း ၀န်ခံတယ်….မှားပါတယ်လို့ ၀န်ခံခြင်းမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးဆရာ….ငါမမှားဘူး ဒါငါလုပ်တယ် ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတဲ့ သဘောပါ….ခုကိစ္စမှာလည်း သူဝန်ခံတယ် သူမမှားဘူး သူလုပ်ချင်လို့ လုပ်တယ်လို့ ပြောတယ်ဆရာ…ကျနော် သူ့စိတ်ဓာတ်ကို တော်တော်လေးကြောက်နေတယ် ကျနော့်ကလေး အတွက်လည်း စိတ်ပူမိတယ်…သူ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုး ကလေးမှာ ပါလာရင်သွားပြီလို့ ထင်တယ်ဆရာ….ကလေးအမေ ယောက်ကျားရှိတာ သိသိကြီးနဲ့ ကြာခိုတဲ့ လူကိုလည်း ကျနော် အံ့သြတယ်…အဲဒီကောင်ရဲ့အသက်က ခုမှ၂၃ ပဲရှိသေးတယ် ဆရာ..ကျနော့်မိန်းမက ၃၀ ကျော်နေပါပြီ..
ဒီကောင်ကပဲ မိန်းမကို ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း စပြောတာ…ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမကောင်းလို့ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်….ကျနော့် စိတ်တွေတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုရအောင် အကောင်းဆုံးကို
Reply	Htet Htet Kyaw permalink	27/07/2011 17:42	ကိုဇာနည်မောင်ရေ နွားကျ မခံသင့်တော့ဘူး ကိုယ့်လို မိသားစု အပေါ် တာဝန်သိပြီး သစ္စာရှိတဲ့ ယောက်ျားနဲ့လည်း မတန်ဘူးလို့ထင်တယ် . . . ခြံတစ်ခါ ခုန်ဖူးတဲ့နွားဟာ နောက်တစ်ခါ ခုန်ဖို့လည်းဝန်မလေးတတ်ဘူး ခလေးကို သနားတယ်ဆိုပေမဲ့ အကျင့်ပြတ် မိခင်တစ်ယောက်အပေါ် အရိုအသေ မတန်ခင် လမ်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် မိခင်ကို မရိုမသေပြုမူတာမျိုး မလေးမစား ဆက်ဆံမိတာမျိုးကင်းသွားမယ် ခလေးအတွက် အကုသိုလ်မရှိအောင်ပေါ့ နောက် မိခင်ကို အရွဲတိုက်တာမျိုးတွေ မလုပ်မိခင် မြန်မြန် လမ်းခွဲသင့်ပါတယ် အဲဒီ ဇာတ်လမ်းမျိုး ကျွန်မတို့ မိသားစု မှာ ရှိခဲ့ဘူးလို့ပါ ခလေးသိတတ်တဲ့အရွယ် မရောက်ခင် ဝေးသွားနိုင်ရင် ခလေးအတွက် ပိုကောင်းပါတယ် . .
ဒီလို မိန်းမမျိုးတွေ အတွက် ၀တ်ဆိုတာလည်း အရွယ် မလွန်ခင်မှာ ရတတ်ကြပါတယ်. . .အရွယ် မညီတဲ့ စုံတွဲ ဖြစ်နေလေတော့ ဟို တစ်ဖက်ကကြာခိုတဲ့ကောင်လို စရိုက်မျိုးဆိုတာ သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့မိန်းမကို ကြာကြာ မတွဲတတ်ပါဘူး သာတာတွေ့ရင် ပြောင်းသွားမှာပါ . . .စရိုက်ကိုက ကြာကူလီသက်သက်ဆိုတော့ တစ်ယောက်ထဲ အပေါ်မှာ ဘယ်ကြာကြာ ဆက်ဆံနိုင်ပါ့မလဲ . . .sponsor များများပေးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူ့ထက်ငယ်တဲ့ မိန်းခလေးနဲ့ ကွယ်ရာမှာ ခိုးတွဲနေမှာပါ မမကြီး စည်းဇိမ်ကုန်တဲ့အထိပေါ့ ဒါတွေက formular တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ အဲဒီအချိန်ကြရင်လည်း ကိုဇာနည်ဘက်က ပြတ်သားဖို့လိုပါတယ် . . .မှားပါတယ်ဆိုရုံနဲ့ပြန်လက်မခံမိအောင် . .နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးပေါ့ . . ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖောက်ပြန်တာကို နားလည်ပေးလို့ရတယ် . . .မိန်းမ ဖောက်ပြန်တာကို လုံးဝ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး. . . .ပညာမတတ်လို့အားကိုးမရှိလို့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့မကောင်းတာ လုပ်စားနေရတဲ့ မိန်းခလေးတွေကို ကျွန်မ နားလည်ပေးနိုင်တယ် ဖောက်ပြန်တာကိုတော့ အရမ်းရွံတယ်. . . .ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်း ရှာဖွေကြွေးနေတဲ့ ယောက်ျားကို လုပ်ရက်တယ်နော် . . . ပြတ်သားလိုက်စမ်းပါ . . .
Reply	lettwebaw permalink*	27/07/2011 21:31	ဘေးလူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကြံပေးရတာ သိပ်ကို လွယ်ပါတယ်။ အဲလို ဇာတ်လမ်းမျိုး မိသားစုထဲမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အကြံပေးလိုက်တာကိုလည်း နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ဦးစီမှာ သူ့ အကြောင်းနဲ့သူ ရှိတတ်သလို ကာယကံရှင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း လေးစားသင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြားတာကို နားလည်ပေးနိုင်ရင် မိန်းမတစ်ယောက် ဖောက်ပြားတာကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်သင့်တာပေါ့။ ယောက်ျားကျတော့ ထင်ရာလုပ်စေ၊ မိန်းမကျတော့ မှားခွင့် မရှိဘူးဆိုရင် မိန်းမက လူမဟုတ်တော့ဘူးလားလို့ မေးစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လူမှန်သမျှ အမှား မကင်းပါဘူး။
တစ်ခါက အခု ကိုဇာနည်မောင်လိုပဲ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူရဲ့ ဇနီးသည်က ပြည်တွင်းမှာ ဖောက်ပြန်တယ်။ ယောက်ျားဆီကို မိန်းမရဲ့ အမျိုးတွေက သတင်းပို့လို့ ယောက်ျားလည်း အူယားဖားယား ပြန်ရောက်လာတယ်။ သူရောက်လာပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ အဲဒီ့မိန်းမက နောက်လူနဲ့ လိုက်ပြေးတယ်။ ပြန်လာသူ ယောက်ျား ရင်ကွဲနေတာ ကျွန်တော့် မျက်စိရှေ့တင်။
တစ်ပတ်လောက်နေတော့ အဲဒီ့လူ မျက်နှာပြန်ကောင်းလာတယ်။ ဒါနဲ့ မေးကြည့်တော့ “သူ ပြန်လာလို့ ကျွန်တော် ပြန်လက်ခံထားလိုက်တယ် ဆရာ”တဲ့။ ကျွန်တော်က “ချီးကျူးတယ်ဗျာ၊ ခင်ဗျားက မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ”လို့ ပြောလိုက်တော့ “ဆရာ တစ်ယောက်ပဲ အဲလို ပြောသေးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်ကရော သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောကျတော့ ကျွန်တော့်ကို “နွား”လို့ ပြောကြတယ်”တဲ့။ “သည်လိုပဲ ပြောကြမှာပေါ့ဗျာ၊ သို့သော် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ခင်ဗျားဟာ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူပါ။ ခင်ဗျား သဘောထားကြီးတာ ထင်ရှားပါတယ်”လို့ ကျွန်တော် သူ့ကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါ ဖြစ်ခဲ့တာ ဆယ်နှစ်လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ အခုထက်ထိ သူတို့ လင်မယား တတွဲတွဲ ရှိနေဆဲ၊ ပေါင်းသင်းနေဆဲ၊ မြေးတွေ ဘာတွေတောင် ရနေပါပြီ။
ဒါ ကိုဇာနည်မောင်ကို ပြန်ပေါင်းဖို့ အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့ စကား မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဘ၀အနေအထားနဲ့ ခံယူချက်ကို ပေါ်လွင်စေချင်လို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇာနည်မောင့်ကိစ္စကို သူ့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဘယ်သူကမှ အားပေးတာ၊ မြှောက်ပင့်တာ၊ တားဆီးတာတွေ မလုပ်အပ်ပါဘူး။ ပြောရတဲ့သူက အဲဒီ့ အခြေအနေ၊ အဲဒီ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။
Pann permalink	21/08/2011 18:37	ဆရာပြောတာ သမာသမတ်ကျပါတယ်…
ကိစ္စတစ်ခုကို ယောင်္ကျားမို့လို့ လုပ်သင့်တာ
အလားတူကိစ္စကိုပဲ မိန်းမတွေလုပ်ရင် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာတွေက ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့
Reply	DIYAY permalink	25/07/2011 00:39	ကျွန်တော်မေးထားတာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားတဲ့အတွက်
Reply	yarzar permalink	26/07/2011 13:04	which are you using ? Sir
cos I can read you type of your font , Plz
if you don’t mind let me know , plz
I already installed zawgyi one , myanmar 3
but I don’t which type of font is using here ..
I do hope somebody will reply to my question ..
Reply	lettwebaw permalink*	26/07/2011 16:33	The font used for this blog is Zawgyi One. If you are using Firefox, you may need to change your default font to “Zawgyi One.” Go to Options >> Content and you’ll find the default font box. Hope it works.
Reply	hnin hnin permalink	28/07/2011 11:35	sayaemail address myar ya ning ma lar shint
Reply	Ko Gyi permalink	01/08/2011 13:43	ဆရာ. Email လေးသိပရစေ။
Reply	lettwebaw permalink*	01/08/2011 18:21	ကျွန်တော့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ၀ယ်/ငှားပြီး လှန်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီ့ စာအုပ်ထဲက တစ်နေရာရာမှာ ပါပါလိမ့်မယ်။
Reply	jemmy Mg Mg permalink	12/08/2011 23:01	ဆရာခင်ဗျား
ဆရာ့ရဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ HIV ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သိပ်တူတာပဲဗျာ… ကျွန်တော့်အဖြစ်လေးကို ဆရာ့ဆီ ပို့ထားပါဦးမယ်
ကျွန်တော်သိချင်တာက မိန်းကလေးကနေ ယောက်ကျားလေးကို လေချိုသွေးပေးတဲ့အခါ
တစ်ယောက်ယောက်မှာ HIV ရှိနေမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးက ရောဂါဖြစ်ဖို့ အလားအလာပိုများမလား….ယောက်ကျားလေးရောဂါရဖို့အလားအလာပိုများမလားသိချင်ပါတယ်…
တစ်ဆက်တည်းမေးချင်တာတစ်ခုက အခုကျွန်တော်တို့ ခေတ်လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ယခုခေတ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ Oil Massage တွေသွားတဲ့အခါ ဆီနဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေကို Hand Play လုပ်ပေးတာကရော HIV ဖြစ်နိုင်ပါသလား…. ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စိုးရိမ်တာက Bed Sheet တွေပေါ်က တခြားလူတွေ အရည်တွေကနေ တဆင့် ရောဂါရမှာ စိုးလို့ပါ
Jemmy Mg Mg
Reply	lettwebaw permalink*	23/08/2011 20:13	ပထမ မေးခွန်းက အလားအလာ ပိုများပါတယ်လို့ ဖြေရပါမယ်။ အိပ်ရာခင်းပေါ်က တခြားလူတွေရဲ့ အရည်ဆိုရာမှာ ဘာအရည်လဲ မသိဘူး။ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုက ထွက်တဲ့အရည်ဆိုရင်တော့ အရည်ခြောက်သွားချိန်မှာ HIV မကူးနိုင်ပေမယ့် တခြား လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါများတော့ ကူးစက်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
Reply	ဇာနည်မောင် permalink	13/08/2011 21:08	မထက်ထက်ကျော်နဲ့ဆရာအတ္တကျော် တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျနော့်ကို ခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်..ဆရာပြောတဲ့ လူမျိုး ကျနော်တွေ့ဘူးပါတယ်…ကျနော်နဲ့ညီအကိုလို ပေါင်းသင်းတဲ့လူပါ…ဆရာပြောတာနဲ့တစ်ထေရာတည်းကို တူပါတယ်..ဒါပေမယ့် သူ့မိန်းမကို အပေါင်းအသင်းတွေ ရှေ့ကိုတော့ ခေါ်မထုတ်ရဲတော့ဘူးဗျ…ကလေးတွေလည်း အမေနဲ့အတူသွားဖို့ သူကိုယ်တိုင် ခွင့်မပြုတော့ဘူးဗျ..ကလေးတွေအတွက် ပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်…တွဲသွားတွဲလာ မလုပ်တော့ဘူး ကလေးတွေကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဒုက္ခခံပြီး ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ လုပ်တယ်….နောက်ဆုံး သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ မိဘတွေကွဲနေတဲ့ ကလေးမဖြစ်ရအောင် သူပြန်လက်ခံလိုက်တယ် လို့ ကျနော်ကိုပြောပါတယ်…သူဆိုရင် ရွှေတွေအားလုံးကို မိန်းမကယူသွားပြီး ပစ္စည်းတွေအားလုံးကုန်တော့ လင်ငယ်ကလက်မခံတော့လို့ သူဆီကို ပြန်ကပ်လာတာပါ….ကျနော့်သူငယ်ချင်း ရလိုက်တာတော့ ရက်ကွပ်ထဲမှာ နာမည်ပျက်တယ် မိသားစုနဲ့ညီကိုမောင်နှမက ဒီမိန်းမကို ပြန်လက်ခံလို့ မိသားစုက ပစ်ပယ်တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်…တစ်အိမ်ထဲနေပါတယ် အတူမအိပ်ပါဘူး…သူပြောတာကတော့ သူစိတ်မသန့်တော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်…သူပြန်ပေါင်းတာ ကလေးတွေအတွက်လို့ပြောပါတယ်….ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ကျနော်လည်း စိတ်မသန့်တော့ပါဘူး ကလေးအတွက်လည်း ပြန်ပေါင်းနိုင်လောက်အောင် ကျနော်မှာ ခန္ဒီပါရမီမရှိပါဘူး..ကျနော့်မိဘရဲ့ပြစ်ပယ်ချင်းကိုလည်း ကျနော်မခံနိုင်ပါဘူး…ဆိုတော့ ကျနော့်သားကို ကျနော် တရားဥပဒေအရ ရအောင်ဆွဲခေါ်ပြီး..ကျနော့်သား အနာဂတ်ကို ကျနော်ပုံဖော်ပါမယ်…မထက်ထက်ကျော် ပြောသလို ခြံခုန်ဘူးတဲ့နွားကတော့ ခုန်ဖို့ဝန်လေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး…အဲဒီစကားကိုတော့ ကျနော် အကြွင်းမဲ့လက်ခံပါတယ်…..ခုလို ကျနော့်ကို စဉ်းစားပေးကြလို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်….ကျနော့်သားအတွက် ကျနော့်ဘ၀ကို အသစ်ကပြန်စနေပါပြီ…
Reply	ma ma permalink	20/08/2011 14:45	ယောက်ျားတွေ က မယားငယ်နဲ့ သွားအိပ်ပြီး ပြန်လာတာကို မိန်းမတွေက ခွင့်လွှတ်ပေးရတယ်။ ယောက်ျားတွေကျတော့ လင်ငယ်နဲ့ အိပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ မိန်းမကို မသတီဘူး ဆိုတာ နဲနဲတော့ လွန်သလားလို့။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာ မရှိသင့်တာအမှန်ပါပဲ
ကျွန်မနဲ့ အစ်ကိုဇာနည်ရဲ့ အဖြစ်ကတော့ ပြောင်းပြန်ပါ။ ကျွန်မက နိုင်ငံခြားမှာ ယောက်ျားက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိန်းမ ယူလိုက်တယ်လေ။ အင်တာနက်ပေါ်က တွေ့တဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ကိုပါ။ ကျွန်မကို နိုင်ငံခြားကို အတင်းသွားခိုင်းပြီး သူက ယူလိုက်တာပါ. ခုထက်ထိတော့ သူက ဖုံးထားပေးမယ့် အမှန်တရားဆိုတာ ကြာရှည် ဖုံးကွယ်လို့မရနိုင်ပါဘူး… အဲဒီတော့ အဲလို ယောက်ျားမျိုးကိုရော ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ….
Reply	lettwebaw permalink*	23/08/2011 20:10	အဲလိုယောက်ျားမျိုးကို ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာထက် ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ… “အချစ်… အချစ်”ဆိုပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အော်ဟစ်ယုံစားခဲ့ကြရင်းမှ ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ သဘောကို ကိုယ့်လိုပဲ အချစ်ကို ကိုးကွယ်လိုသူ မိန်းမငယ်လေးများ သဘောပေါက်လာအောင် ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောသင့်တဲ့ စကားတွေ ပြောပေးတာက လူ့ဘောင်အတွက် ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျား။
mm permalink	01/10/2011 23:14	But Man and woman are different types in myanmar communication world.
I hate woman who got small husband.If she did not like her husband, she can separate with him, but no need to try to get small husband.Ifaman got two woman, this can be able to accept.But ifawoman has two husbands atasame time,this is impossible to hear that.Cause she isamyanmar girl is Asia.
minnthitlwinn permalink	27/10/2012 16:59	မမလို့ ခေါ်တဲ့ မမရေ… မယားငယ်နဲ့ သွားအိပ်ပြီး ပြန်လာတာကျတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးရတာ မဟုတ်ပါဘူး…။ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကြတာပါ…။ဘာလို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဆိုတာတော့ မမတို့ပဲ သိကြမှာပေါ့..။ ဒီလိုပဲ…လင်ငယ်နေနေမှန်းသိသိနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေလည်း ရှိတာပဲ.. ဆရာတောင် ရေးပြခဲ့သေးတယ်လေ..။ အခုမမက နိုင်ငံခြားမှာပဲ… ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ်ရှာနေတာလို့ ထင်ပါတယ်..။ ဒီလိုဆို ကွားရှင်းလိုက်တော့လေ… အားကိုးစရာလည်း မလိုဘူး… သုံးစားဖို့လည်း မလိုတော့ဘူး ထင်ရင်ပေ့ါ..။ ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်ပေးရတယ်လို့ မပြောပါနဲ့…။ အဲဒါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မဟုတ်ပါဘူး..။ခွင့်လွှတ်ချင် လွှတ်ပေါ့… မလွှတ်ချင်လည်း မလွှတ်နဲ့ပေါ့..။ မိန်းမမှ.. ယောင်္ကျားမှ မဟုတ်ပါဘူး… သစ္စာမရှိတဲ့လူက မရှိတာပဲ.. ခွင့်လွှတ်တာလည်း ဒီလိုပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ထောင်မရှိလို့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထင်တာလေးတွေ ရေးပေးခဲ့တာပါ..။ မှားတာရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ မမ။ကျွန်တော့် ကာင်မလေးကသာ ကျွန်တော့မိန်းမဖြစ်လာပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ သစ္စာဖေါက်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်ထားခဲ့မှာပါ..။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုအချိန်အထိ သူ့ရှေ့တင်ရော ကွယ်ရာမှာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အီစီကလီတောင် မလုပ်ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော်သစ္စာဖေါက်ရင်လည်း ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ထားခဲ့စမ်းပါလို့ ပြောထားပြီးသားပါ..။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခေတ်လူငယ်က လူငယ်သက်သက်ပဲ..။ ခေတ်ဆိုတာနဲ့ သစ္စာဆိုတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး..။ ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာမြဲခဲ့တဲ့လူတွေ သစ္စာမဲ့တဲ့လူတွေ အများကြီးပါ..။ ကိုယ်မပါဖို့နဲ့ ကိုယ့်ချစ်ခင်ရသူ မပါဖို့ပဲ တတ်နိုင်သလောက် အချစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအစ အားလုံး ဖေးဖေးကူကူ နေသွားကြသင့်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်..။ မမဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်တွေ ရှိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ..။ စွပ်စွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူး မမရေ…။ဒါပေမယ့် အရင်ကလည်း ချစ်လက်စရှိတယ်.. အိပ်ယာထဲ့မှာလည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင်မှုမှာလည်းကောင်း တာဝန်ကျေသိတတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတော့ အတင်း နိုင်ငံခြားလွှတ်ပြီး ဒီမှာ မယားငယ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ တော်တော် တရားလွန်တဲ့ယောင်္ကျားဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဟုတ်ရင် မမဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
ကျော်စွာ permalink	19/08/2011 16:31	ဆရာခင်ဗျား.. ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က..ကိုယ်ဟာကိုယ်စိတ်ဖြည်ရင် ..
ပြီးတော့ ကွန်ဒုံးက ၁၀၀% ရောဂါပိုးကာကွယ်ပါသလား..
Reply	lettwebaw permalink*	19/08/2011 22:10	သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ စုစုပေါင်းမှ စာ အပုဒ် ၄၀ ပဲ ရှိပါတယ်။ စုံအောင် ဖတ်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီ့စာတွေထဲမှာ အဖြေတွေ ရှိပါတယ်။ Reply	pu kyue permalink	20/08/2011 14:05	ဆရာ .. ဆရာဝက်ဆိုဒ်က စာတွေ ဖတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ၊တကယ်ကို အဖိုးတန်ပါတယ် ၊ဘာနေရာမှာမှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ ဗပာုသုတကိုရရှိစေပါတယ် ။ ပြီးတော့ သိချင်တာတွေမေးထားတဲ့သူတွေကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူတို့မေးလို့ သမီးတို့လဲ သိသွားရတဲ့အရာတွေအများကြီးပါ ။ အခုလဲ သမီး သိချင်တာလေးတခုရှိလို့ပါ ..အဲတာကတော့ သမီးအမျိုးသားရဲ့ကိစ္စပါ .. ပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကနေစပြီး သူ့လိင်တံ ရဲ့အောက်ခြေမှာ အသားပို ထွက်သလို အသားစိလေးတွေ ပေါက်လာပါတယ် ။ ဘာအန္တရယ်မှတော့ မပေးပါဘူး ဒါပေမဲ့သမီးစိတ်ထဲတခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ …ဆရာသိရင်ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် ။
Reply	lettwebaw permalink*	23/08/2011 20:06	မဖြေတတ်ပါ။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Reply	thingyan permalink	18/08/2012 21:11	ကာယကံရှင် မေးထားတာတစ်နှစ်တောင် ရှိပြီဆိုတော့ နောက်ကျနေပါပြီ။ဒါပေမယ့် တစ်ခြားသူတွေ ဗဟုသုတ ရမလားဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီ အသားပိုလေးတွေက papilloma လို့ခေါ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့တွေ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူ့ကိုဖြစ်စေတာက human papilloma virus ပါ။ လိင်ဆက်ဆံ ရာကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ယောင်္ကျားတွေ အတွက် သိပ်ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေမှာတော့ CA Cervix လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး လဲပေါ်နေပါပြီ။
ဖိုးသက် permalink	22/08/2011 12:55	ကိုဇာနည်မောင်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြားရတာ စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်ဗျာ။
၂၀၀၃ခုနှစ်လောက်က ကျနော့်ဘေးမှာ အတူအိပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အလုပ်လုပ်နေရင်း ၁၃ထပ်ကနေခုန်ချပီးသတ်သေသွားဖူးတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးပိတ်ရက်မရှိ အလုပ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာလုပ်ပီး
အိမ်ကိုငွေပို့နေတဲ့သူ့ခမျာ ဗမာပြည်က မိန်းမက ရှိတာလေးတွေအကုန်ယူပီးနောက်ယောက်ျားနဲ့ထွက်ပြေး၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေး၂ယောက်ကို ရပ်ကွက်ကစောင့်ရှောက်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားလိုက်ရတော့ မခံနိုင်ရှာဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲ့လိုဆင်တူယိုးမှားအဖြစ်တွေက လောကမှာအများကြီးပါလေ။ ကိုဇာနည်မောင် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုတာ တနယ်တကျေးမှာအပျော်မရှာဘူးဆိုတာနဲ့တင်သိသာပါတယ်။ ဘ၀အသစ်တစ်ခု မြန်မြန်တည်ဆောက်ပီး ငြိမ်းချမ်းပါစေငါ့အကိုရေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
ဆရာပြောသွားတဲ့အထဲမှာဗျာ.. မိဘဖောက်ပြန်ဖူးရင်သားသမီးလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာလေးက လူပြောသူပြောနဲ့ကျနော်ကြားဖူးပါတယ်။ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့မိဘကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရနေရှာတဲ့ ကလေးတွေကို ဖိထောင်းနေသလိုများဖြစ်နေသလားလို့။ ဒီအချက်ကလေးကိုကျနော်ဖတ်ဖူးသမျှ ဆရာ့စာတွေထဲမှာ ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရေးပြပီးပီဆိုရင်လည်းတစ်ချက်လောက်ညွှန်းပေးပါဦးဗျာ။ မရေးပြရသေးဘူးဆိုရင်လည်း ရှင်းပြပေးပါလို့ ရို၂သေ၂တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာ။
Reply	lettwebaw permalink*	22/08/2011 18:32	အဲဒီ့အတိုင်းရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ စိတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ကလေးတွေကို ဖိထောင်းသလို ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ကလေး လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရှေ့ဆောင်နွားလားတွေ ပြခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားဖို့က ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ မိခင်ဘာသာစကား ဘယ်က တတ်လာသလဲ၊ စိတ်တိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်က တတ်လာသလဲ၊ ၀မ်းနည်းရင် ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်က တတ်လာသလဲ၊ အဲသလိုပဲ အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားကလည်းပဲ တမင်ပုံတူကူးချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ မိဘဆီကနေ အလိုလို ကူးစက်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ခြွင်းချက်တော့ ရှိတယ်ပေါ့။ တကယ့်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်နာကျင်ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ နေမယ့်သူတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှ အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မှာ သစ္စာမြဲတာက သတ်သတ်၊ ဘာသိဘာသာစရိုက်က သတ်သတ်နဲ့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်တတ်ပြန်ပါသေးတယ်။
Reply	mandalayfree permalink	22/08/2011 17:48	ဆရာ ခင်ဗျားးး ကျနော် ဆရာရဲ့ email ကိုသိပါရစေ ကျနော် အနေနဲ့ တစ်ခြားလူ မသိစေချင်သော အကြောင်းတစ်ရာများကို မေးမြန်းလိုရွေ့ ဖြစ်ပါတယ်.. ကူညီနိုင်ရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply	lettwebaw permalink*	22/08/2011 18:25	ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော့် မေး(လ်)က ကျွန်တော့် ထုတ်ဝေပြီး စာအုပ် အတော်များများမှာ ပါပါတယ်ခင်ဗျား။ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
Reply	mandalayfree permalink	23/08/2011 21:12	ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ..
ကျနော် မနေ့က သွားရှာပါတယ်.. ဆရာစာအုပ်တွေမှာပါ ..
ဆရာရဲ့ အီးမေး ကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး ခင်ဗျာ
ပေးရမှာ ဆရာ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင် ကျနော် မေးကို ပို့ပေးပါလို့
ကျနော် ကောင်မလေး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ လေး မေးချင်နေလို့ပါ ဆရာ
mandalayfree permalink	24/08/2011 13:28	ဆရာ
ကျေးဇူး ပြုပီး bhonenaykha.ydnb@gmail.com
ကျနော် သိချင်တာလေးက ဆရာကို မေးမှ ဖြစ်မှာ မလို့ ပါ
Reply	lettwebaw permalink*	24/08/2011 16:51	ပင့်ကူအိမ်မှတ်တမ်း၊ ယောက်ျားသားချင်းပွင့်ပွင့်လင်း၊ နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ ဘ၀င်ရွှင်လန်းတဲ့စိတ် စတဲ့ စာအုပ်များမှာ အသေအချာပါပါတယ်။ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မတတ်နိုင်တော့ပါ။ ၀မ်းနုတ်ဆေးချည်း အားမကိုးပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင် ညှစ်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းတော်မူပေးပါဦး။ Reply	mandalayfree permalink	24/08/2011 20:40	ငါလိုးမသား ကြီးကလဲ မာနတွေ လာကြီးပြနေတာ.. email လေးပြောပြလိုက်တော့ မင်းမိန်းမ ကြီး လင်ငယ်နေမှာ မလို့လား.. ဒီက မရိုင်းချင်လို့ ကောင်းကောင်းမေးနေတာကို ကိုမေကိုလိုးကြီးက မဖြေချင်ဘူး ဟုတ်လား.. မင်းမေလိုး မမေးတော့ ဘူးကွာ.. ဖြေရဲဖြေကြည့် လီးနဲ့လာထိုးမယ်.. Reply	karkar permalink	23/09/2011 22:53	lol
Reply	ghost permalink	20/10/2011 22:11	မင်းမရိုင်းချင်တာကလည်းကွာကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းလိုက်တာ ကိုယ့်ထက်လည်းအသက်ကြီး၊
နောက်တစ်ချက်ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးများလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနေတဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်
Reply	ဇာနည်မောင် permalink	25/08/2011 01:01	အပေါ်က ‘မမ’ ပြောတာ မှန်ပါတယ်…လင်ငယ်နေတဲ့ မိန်းမကို ယောက်ကျားတွေက မသတီဘူး မယားငယ်နေတဲ့ ယောက်ကျားကိုလည်း ဆက်လက်သီးခံပေါင်းသင်းနေထိုင် နေတဲ့မိန်းမတွေကိုလည်း ကျနော်လေးစားပါတယ်..သားသမီးတွေကြောင့် ယောက်ကျားဆိုးတာကို သီးခံပေါင်းသင်းနေတယ်လို့ပဲ ကျနော်ထင်ပါတယ်..ကျနော့်ရဲ့ ခံယူချက်တစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်..ကျနော့် ချစ်တဲ့မိန်းမကို ကျနော်တစ်သက်လုံး ချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုလက်မထပ်ခင် အချိန်မှာကိုယ့်စိတ်ကို သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဘ၀တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ….ကျနော့်
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်မယားသူယူ သူ့မယားကိုယ်ယူ လုပ်နေတဲ့လူတွေ အမြောက်အများတွေ့ရပါတယ်..ဒီလိုလူတွေကို ကျနော် အန်မတန်ရွံ့ပါတယ်…ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာလည်း ရှက်ပါတယ်…ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့
သူတို့ဘ၀ကို ရှင်သန်ပြီး ဘယ်လိုခံယူချက်တွေနဲ့ ဒီလိုအလုပ်တွေ လုပ်ကြတယ်ဆိုတာ ကျနော်စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး…ကျနော်ဘ၀မှာ အဲလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံမှာကို အင်မတန် ကြောက်ခဲ့ပါတယ်…ကျနော့်သားလေး ဘ၀မှာလည်း အဲလိုအမဲစက် အရိပ်မဲကြီး ကပ်ပါလာမှာ အင်မတန်ဆိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ရှောင်လွှဲလို့မရ
တဲ့ကျနော့် ရှေးဘ၀အကုသိုလ်ကံကြောင့် ကျနော် ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကို လက်တွေ့ခံစားနေရပါတယ်…ကျနော်ပြောချင်တာက အဲလိုလုပ်တတ်တဲ့ မိန်းမယောက်ကျား ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ဖို့ လုံးဝမထိုက်တန်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ဥပေက္ခာပြုသင့်တယ်လို့
ကျနော်ယူဆတယ်…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခြံခုန်ဖူးတဲ့နွား နောက်တစ်ခါခြံခုန်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး..
အဲဒီစကားက အပြည့်အ၀ မမှန်ဘူးလို့ ငြင်းလို့ရပါတယ်…၈၀ %ကျော် မှန်ပါတယ်..မယုံကြည်တဲ့သူများ ကိုယ့်ဘေးက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲလိုလူတန်းစားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်ကောင်းလဲ လေ့လာကြည့်ပါ..
သားသ္မီး ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်စဉ်းစားရင် အဲလိုစိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ လူတွေနဲ့တစ်သက်လုံး အတူပေးမနေသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…ကျနော်ကတော့ ကျနော့်သားလေးကို ဒီအရိပ်မဲကြီးက ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင် ဒီလိုမိခင်လက်ထဲက ရအောင်ဆွဲထုတ်ပါမယ်….
ဒါကျနော့်ရဲ့ အတွေးတစ်ခုကို ဘ၀တူတစ်ဦးနဲ့စာဖတ်သူအပေါင်းကို ဝေမျှပေးတာပါ…
မိန်းမယုတ်တို့ အင်္ဂါရပ်ကို ဆရာဖတ်ဖူးတာ မှတ်ထားတာလေးများရှိရင်
ပြန်လည်ဝေမျှပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဆရာ…
Reply	lettwebaw permalink*	25/08/2011 11:49	လှေနံဓားထစ် အယူအဆတွေနဲ့တကွ မိန်းမတွေကို တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်တတ်တဲ့ ဉာဉ်ကို မိန်းမသားတစ်ဦးဖြစ်သော မွေးသမိခင် ကျေးဇူးရှင်ကို ချစ်ခင်လေးစားသောအားဖြင့် ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီ့ မိန်းမယုတ်တို့ အင်္ဂါရပ်“ဆိုတာ”မျိုးတွေကို ကျွန်တော် မှတ်မထားပါဘူးခင်ဗျား။
ကိုဇာနည်မောင် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့် ခံစားချက် ပြင်းထန်ပေါက်ကွဲနေတာကိုလည်း စာနာနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၈၀ % ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းမျိုးနဲ့ ပြောတာမျိုးတော့ လက်လွတ်စပယ် ပြောလို့ မရပါဘူး။ အထောက်အထား ခိုင်လုံမှ ပြောသင့်တာမျိုးပါ ခင်ဗျာ။ ဖွင့်မပြောကြလို့သာပါ။ “တစ်ခါတလေမှားတာလေးနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မပျက်စေနိုင်”ဆိုတဲ့ ဆရာ စိုင်းခမ်းမလိတ်ရဲ့ သီချင်းစာသားထဲကလို ပြန်လည် အဆင်ပြေသာယာနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ နာမည်နဲ့ ထုတ်မပြောကောင်းလို့သာပါ၊ နာမည်ကျော်၊ ဂုဏ်မြင့်သူတွေထဲမှာတောင် ရှိပါတယ်။ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ ဇနီးလုပ်သူက ဖောက်ပြန်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ အဲဒါတွေ အားလုံးကို မေ့ဖျောက်ပြီး သားသမီးများ မြေးများနဲ့ ပွဲတိုင်းတက်နေကြတာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ရှေ့မှာ နမူနာ ပြခဲ့တဲ့ စုံတွဲဆိုရင်လည်း ယခုအခါမှာ မြေးများနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ၊ သွားလာ လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ပွဲတက်နေပါတယ်ဗျာ။
အားနာစွာနဲ့ပဲ ပြောပါရစေ ကိုဇာနည်မောင်ရေ။ မြန်မာစကားလည်း အရှိသား မဟုတ်လား။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်ပါတယ်။ အဲတော့ သူ့ဘက်မှာ ၉၀ % တာဝန်ရှိတယ်ပဲ ထားဦး၊ ကိုဇာနည်မောင့်ဘက်ကတော့ ၁၀ % တာဝန်ရှိမှာပဲလောက်တော့ လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲတော့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို သုံးသပ်ရာမှာ ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ ဦးနှောက်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ဖို့ လူတိုင်း သတိထားသင့်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းဟာ အမှား မကင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အမှားတွေ တစ်သီကြီး ကျူးလွန်ခဲ့၊ ကျူးလွန်ဆဲ၊ ကျူးလွန်မိနေဦးမှာ မလွဲပါဘူး။ အမှားထဲက သင်ခန်းစာယူပြီး ပြုပြင်ခဲ့ကြလို့ သည်နေ့ဘ၀ကို ရလာကြသူချည်းပါပဲ။ ဒေါက်တာ မတင်ဝင်းဆီက ရဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိဖူးတယ်။ “လဲကျတာ ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ ပြန်မထနိုင်တာကသာ ရှက်စရာပါ”ဆိုတာပါ။
သတီတယ် မသတီဘူးဆိုတာလည်း ကိုယ့်ခံယူချက်ပါ။ HIV ပိုးဝင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး ဖေးမ ပေါင်းသင်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ သတီတယ်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ တာသွားမှုက စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ကလေးအပေါ်မှာ အရိပ်မည်းဆိုတာကလည်း စဉ်းစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အရိပ်မည်းထိုးအောင် လုပ်ရင် အရိပ်မည်း ကျသွားမှာပေါ့။ မထိုးအောင် ကာပေးရင် မကျဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့်ဇနီးကတော့ ဖအေ မှားခဲ့တာတောင် ကလေးတွေ ဖအေအပေါ် အမြင်မမှားအောင် ကာပေးခဲ့ဖူးတာမို့ ကလေးတွေအပေါ် ဘာအရိပ်မည်းမှ မထိုးခဲ့ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကိုဇာနည်မောင် စိတ်လိုက်မာန်ပါနဲ့ ကလေးကို မရအရ ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာလည်း သဘာဝကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေး အသက် ၂၀ လောက် ရောက်တဲ့အထိ ကိုဇာနည်မောင် နောက်ထပ် တစ်အိုးတစ်အိမ်မထူထောင်ဘဲ မအေနေရာကရော ဖအေနေရကပါ ခိုင်ခိုင်မာမာနေပေးဖို့ တွက်ချက် စဉ်းစားပြီးပါပြီလား။ အနာဂတ်ကို ကိုဇာနည်မောင် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ပိုင်ဆိုင်သေချာထားပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းများကို ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။
နောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြု၊ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးသားမြေးတွေ မွေးလာ၊ ဖအေတူ မအေကွဲတွေ ကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး စိတ်ဒဏ်ရာ သေရာပါတာက အရိပ်မည်းထက် ပိုဆိုးနေတာတွေလည်း ကျွန်တော် မြင်ဖူးပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးက ကျွန်တော့် အဖေ အရင်းခေါက်ခေါက်ပါပဲ။ သူ့မှာ ဖအေတူ မအေကွဲတွေ ရှိတာကိုး။ သူ့အဖေ သေတာတောင် အပြုံးမပျက်ခဲ့သလို နာရေးကိုလည်း မသွားဘဲနေခဲ့တာ ကျွန်တော့် မျက်စိအောက်တင်ပါဗျာ။
စဉ်းစားစရာ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်တာပါ ကိုဇာနည်မောင်။ စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး စုစည်းစေချင်ပါတယ်။ မခံချိမခံသာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်က သိပ်ကို ဦးဆောင်နေဆဲ အချိန်မှာ ဘာကိုမှ အဆုံးဖြတ် မစောစေချင်သေးပါဘူး။ ရန်မဖြစ်ခင် တစ်ည အိပ်လိုက်ပါဦး၊ မနက်ဖြန်မှ သတ္တိပြရင်လည်း နောက်မကျသေးဘူးနော်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခု ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
Reply	aa permalink	25/08/2011 15:37	အိုး … ဟို mandalayfree လူက အရမ်းရိုင်းတာပဲ … တော်တော် အောက်တန်းကျတာပဲ။ လူတိုင်း ဆရာ့စာအုပ်ကနေ ရှာတွေ့ကြတာကို သူကမတွေ့ဘူးတဲ့ … တကယ်ရှာဖတ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား …. . ဒီလောက်လူသိမခံနိုင်တဲ့ ကိစ္စရှိနေတဲ့လူ က ဒီလို စကားလုံးတွေနဲ့တော့ ပြောရမှာ မရှက်ပါလား။ ဆရာ ရေ ဒီလောက်ရိုင်းတဲ့သူကို မပေးနဲ့။
Reply	thinzar permalink	25/08/2011 16:26	ကိုဇာနည်မောင်
Reply	2012 permalink	23/11/2011 21:32	နိုင်ငံခြားမှာ ကျွန်ခံပြီးလုပ်ကျွေးနေတာတောင် သောက်ကျောထချင်တဲ့မိန်းမတွေကရှိသေး မပြည့်ဆုံတာဆိုလို့ အတူတူမနေနိုင်သေးတာပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ် တိုက်ဆိုင်သူတစ်ဦး
Reply	kalo permalink	14/12/2011 13:50	သူတို့လိုအပ်တာကအဲ့ဒါဖြစ်နေလို့ဗျို……ဒါကြောင့်မိန်းမမယူသေးတာ……………
ဇာနည်မောင် permalink	25/08/2011 23:02	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ..ဆရာပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးလက်ခံနိုင်ပါတယ်..
ကျနော့် ဘ၀မှာနောက် အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို စိတ်နဲ့တောင် မခံစားပါဘူး။။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်သားနဲ့မိန်းမ အဲဒီ ၂ယောက်က ကျနော့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခု
လို့ခံယူထားလို့ပါပဲ..ခုချိန်မှာ ကျနော့်ဘ၀မှာ သားတစ်ယောက်ကလွဲလို့ နောက်မိန်းမဆိုတာ
ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး..ကတိတစ်လုံးကို လွယ်လွယ်ပေးလို့ မရဘူးဆိုတာ ကျနော်နားလည်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ဆရာပြောသလို မိဘနောက်အိမ်ထောင်ကြောင့် သားသမီးတွေ ဒုက္ခရောက်ကြတာ ကျနော့်
ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရလို့ ကျနော့်ချစ်တဲ့လူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင် ကျနော့်ကလေး အဲလိုဘ၀ကို
မရောက်စေရဘူး ခံယူထားလို့ပါ….ဆရာပြောသလို ကျနော့်ဘက်က ၁၀% ဆိုရင်တော့
အဝေးမှာရောက်နေလို့ သူနဲ့ညမအိပ်နိုင်တာ တစ်ခုပဲထောက်ပြရမလိုပဲ…
ဒေါက်တာမတင်ဝင်း စကားကို ကျနော်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ် ဆရာ…..
ကျနော်လဲကျသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး…ပြန်မထနိုင်လောက်အောင်လည်း ကျနော့်စိတ်ဓာတ်
မပျော့ညံ့ပါဘူးဆရာ…ဆရာခုလို ဆင်ခြင်စဉ်းစားစရာ အချက်လေးတွေနဲ့ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း
ရဲ့စကားလေးကို နောက်တစ်ကြိမ် အမှတ်ရစေခဲ့တဲ့ အတွက်ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျနော့်ဘက်က အားလုံးပြည့်စုံနေလားဆိုတဲ့ စကားကို ပြောရရင်..လူတိုင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူ ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ…ဒါပေမယ့် ကျနော်
ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးစဉ် အချိန်တည်းက ကျနော့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဥိးစီးဆိုတဲ့
တာဝန်ကို ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပါတယ်…ကိုယ့်ဘ၀ကိုလည်း အမြဲတိုးတတ်ဖို့ ကြိုးစားနေ
ပါတယ်…နေစရာ စားစရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူရာဝင်အောင် ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်..အဲလိုထားနိုင်အောင်
လည်း ကျနော်သိပ်ချစ်တဲ့ မိန်းမနဲ့သားကို ခွဲပြီးပြည်ပမှာ ငွေရှာနေတဲ့ ဘ၀ပါ..ယောက်ကျား အဝေးကို
ရောက်မှ ခုလိုလုပ်ရပ်ကို လုပ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်က…ကျနော့်ဘက်က ဘာတွေချွတ်ယွင်း
နေလဲဆိုတာ စဉ်းစားလောက်ရအောင် သူ့လုပ်ရပ်က အကြောင်းပြချက် ပေးရလောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်….
Reply	nosinmo permalink	26/08/2011 21:01	Hello!
ဒီနေ့မှ ရောက်ဖြစ်တာပါ။ အရမ်းကောင်းပြီး Knowledge အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ကျွန်တော် နည်းနည်း မေးချင်ပါတယ် ဆရာ။ ကျွန်တော့ အသက်က အခု၂၃ ပါ။ အခု နှိင်ငံခြားမှာ ရောက်နေပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ နေတုန်းက ရည်းစားလည်း တစ်ခါမှ မထားဖူးပါ( တစ်ခါမှ မိန်းကလေးတယေက်နဲ့ အတူမအိပ်ဖူးပါ)။ ဒီရောက်မှ ( အတန်းဖော်) တရုတ်အမျိုး သမီးနှင့် ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲံ့ကြတယ်။ ဘာမှ အကာကွယ်မပါဘဲ Living together ၁၀ ကြိမ်နီးပါး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ပြီးရင် အပြင်မှာပဲ လွတ်ပါတယ်။ တစ်ခါပြီးတိုင်း ကိုယ့်ပစည်းတွေကိုတော့ ဆေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ပြီးတဲ့ နောက် အပြင်မှာ လွတ်ပြီးတာက ၁၀၀% စိတ်မချရဘူး ဆိုတာ တွေ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးအတူနေခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း(၂၈.၇.၂၀၁၁) ကျွန်တော့ ကောင်မလေး အဖြူရောင် အရည်တွေ ၁၃ရက်အတွင်း ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အခု( ရိုးရိုးနာတဲ့ ပုံစံနဲ့ မတူဘူးလို့ ပြောပါတယ်) ဗိုက်နာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရတာ ဖြစ်နှိင်မလား ဆရာ or မိန်းကလေးတွေမှာ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ဒါပဲလား။ မြန်မာလို ရေးတာ အခက်အခဲရှိလို့ အတောင်းပန် ပါတယ်။ ဆရာနေနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဖတ်ပြီးပါလို့။
Please! As soon as possible
By hopefully nosinmo@gmail.com (If Sir can send me by mail)
Reply	lettwebaw permalink*	27/08/2011 11:39	ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အဖြူဆင်းတာက သဘာဝပါ။ သို့သော် သိပ်ရက်ကြာနေတယ်၊ ဆင်းတာလည်း သိသိသာသာ များတယ်၊ အနံ့အသက်လည်း ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ ဆရာဝန်နဲ့ ပြတာပါပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ကိုယ့်ဘာသာ စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ kit လေးတွေ ၀ယ်လို့ လွယ်တာပဲ။ အဲဒါနဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်ရင် အဖြေက ရှင်းသွားမှာပါ။
Reply	angelpricess permalink	28/08/2011 13:56	ဆရာရှင့်..သမီးအသက်က ၂၄ နှစ်ပါ.အမျိုးသားရဲ့အသက်က ၃၂ နှစ်ပါ.. အိမ်ထောင်သက် ၄နှစ်ရှိပါပြီ. ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတာပါ.. နှစ်ယောက်လုံး အတူတူ အိမ်မှာ စာသင်တဲ့အလုပ် လုပ်ပါတယ်. အိမ်ထောင်ကျပြီး ၂နှစ်အထိကတော့ လိင်ဆက်ဆံမှုက တပတ်ကို၂ကြိမ် ၃ကြိမ်လောက်တော့ ရှိပါတယ်.. အဲဒီနောက်ပိုင်း ၄ ၅လတခါသာ ပြုလုပ်ပါတယ်.. ကလေးမရှိပါ. .နှစ်ယောက်ထဲနေတာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလဲ အဆင်ပြေပါတယ်.. သာမန်အချိန်တွေမှာ သမီးအပေါ် အရမ်း ဂရုစိုက်ပါတယ်.. သူတခြားကို စိတ်ရောက်နေတာ မဟုတ်သလို ဖောက်ပြန်နေတာလဲ မဟုတ်ပါ.. လိင်ဆက်ဆံမှုက သမီးအတွက်က ပြသနာမရှိပေမဲ့ သူ့မှာ ရောဂါတခုခု ရှိနေသလား သိချင်လို့ပါ.. ပုံမှန်လားလို့ကော သိချင်ပါတယ်…ဖြေပေးပါနော်…
Reply	angelpricess permalink	28/08/2011 14:18	ဆရာရှင့်.. အခုအချိန်မှာ သမီးတို့နှစ်ယောက်လုံး အပူအပင်မရှိဘဲ ပျော်ရွှင်နေပါတယ်.. ဒီပုံစံအတိုင်း ဆက်သွားနေရင် တချိန်ချိန် သမီးတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြသနာရှိနိုင်လားဆရာ.. ဒီလိုဖြစ်နေတာ ၂နှစ်လောက်တော့ ရှိနေပေမဲ့ သမီးတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာပြသနာမှ မရှိသေးပါဘူး.. .လေးငါးလ တကြိမ်သာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ နောင်တချိန် ဘာပြသနာတွေ ရှိလာနိုင်သလဲ ဆရာ…ဖြေပေးပါနော်..သမီးမှာ မေးစရာလူ မရှိလို့ပါ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…
Reply	Beach permalink	02/02/2013 16:49	စိတ်ကုန်သွားတာနေမှာ
lettwebaw permalink*	28/08/2011 20:41	အဲ… သည်လောက် သိရရုံနဲ့တော့ အပြတ်ပြောရ ခက်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အသက်အရွယ်၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ၊ ကလေးသားမြေး မရှိပုံများနဲ့ ချိန်ဆရင် လေး-ငါးလ တစ်ကြိမ်ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို နည်းပါးလွန်းပါတယ်။ စီးပွားရေးလည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုထားတော့ တခြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ရှိသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာတယ်။ အမျိုးသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးသင့်မလား မသိဘူး။ ကျန်းမာနေတယ်ဆိုရင်တော့ တခြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ်။ အမျိုးသားက အရှက်အကြောက်ကြီးတတ်တဲ့ သူမျိုးလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စထဲမှာ ပါနေတယ်။ ဒါမှမဟုတ်… စဉ်းစားစရာတွေကတော့ အတော်များလာပါပြီ။
Reply	angelpricess permalink	29/08/2011 07:41	သူ့ကို ကျန်းမာရေးစစ်သင့်သလား ဆရာ… အရာအားလုံးက သာမန်လူလိုပါပဲဆရာ.. ကျန်းမာရေးစစ်မယ် ပြောရင်ကော လက်ခံပါ့မလား… စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာဆုိရင် ဘယ်လိုလုပ် ဖြေရှင်းရမလဲ… ဆရာ စဉ်းစားမိတာရှိရင်လည်း ဖြေပေးပါနော်… အားကိုးပါတယ်ဆရာ…
angelpricess permalink	29/08/2011 07:52	သူ့ကို ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ကျတော့ သူက လက်ခံမယ်မထင်ဘူး.. သူ့ကိုယ်သူတော့ နေကောင်းနေတယ် ထင်မှာပဲလေ.. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင် သမီးဘက်က ဘာတွေ ပြုလုပ်ပေးရမလဲ… မိဘတွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်… သူလည်း ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါဆရာ.. ဆရာဝန် ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို ရေးတဲ့ လိင်ပညာပေး စာအုပ်တွေကိုလည်း သူရော သမီးပါ ဖတ်ဖူးပါတယ်… ဆရာ လိုအပ်မယ် ထင်တာတွေကို သမီးကို မေးနုင်ပါတယ်… သေသေချာချာ အသေးစိတ် ဖြေပေးပါနော်…
Reply	lettwebaw permalink*	29/08/2011 11:34	ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းပါ ကျန်းမာနေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ လိင်စိတ်က ရှိနေရမှာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်က ဒါကို ပြဿနာတစ်ခုလို့ မယူဆဘူး၊ မူမှန်လို့ပဲ ယူဆနေတယ်ဆိုရင် ဘေးလူက ဘာမှ လုပ်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်က ဒါကို ပြုပြင်ချင်စိတ်ရှိမှသာ ကူညီပေးလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာ၊ ဟိုဟာ သည်ဟာ အနည်းအပါး ဖတ်ဖူးတာဟာ ဘ၀အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ပညာတတ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရား မရှိတဲ့သူတွေ လောကမှာ အများကြီးပဲဟာ။ ဖတ်တိုင်းသာ ကောင်းသွားမယ်ဆိုလည်း တစ်ပြည်လုံးက တရားစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတွေလည်း သောတာပန်တွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ လိုအပ်တာတွေ ညည်းကို မေးလို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်က လိုလိုချင်ချင် ဖြေရှင်းချင်မှ ကူညီပေးလို့ ရတာမျိုးပါ။ ဘေးလူက ဘယ်လောက်သိလို့တုံး။ သူ ပြောသလောက်ပဲ သိထားတာနဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။
Reply	ma ma permalink	31/08/2011 12:23	ဆရာ…
အမျိုးသမီးတွေ အဖြူဆင်းတယ် ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာ သိလိုရနိုင်မလား..
နောက်ပြီး ဘယ်လိုဆေးတွေ သောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးလိုရမလား..
Reply	lettwebaw permalink*	31/08/2011 19:11	အဖြူဆင်းတာ ပုံမှန်ပါ။ မမျိုးအိမ်မှာ မမျိုးဥတွေ မဖြစ်ခင် အချွဲအကျိ အမြောက်အမြားကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရာသီမလာခင်နဲ့ ရာသီလာအပြီးမှာ အဖြူ ဆင်းတာဟာ သဘာဝပါ။ တစ်နည်းပြောရင် သဘာဝ တရားက မျိုးဆက်ပွား အင်္ဂါကို သူ့နည်းနဲ့သူ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယားယံခြင်း မရှိဘူးဆိုရင် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ယားယံတယ်ဆိုရင်တော့ yeast infection ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါလည်း စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အရောင်က အဖြူမဟုတ်တော့ဘဲ ၀ါတာတာ၊ ဒါမှမဟုတ် စိမ်းတိမ်းတိမ်းဖြစ်လာမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အဖတ်တွေ အခဲတွေ ပါလာမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အနံ့အသက်ကလည်း ဆိုးမယ်၊ ဒါမှဟုတ် ယားယံတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ယောနိတ၀ိုက်မှာ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်နေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ့အထဲက နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးဖြစ်စေ၊ အကုန်လုံးဖြစ်စေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါပြီ။
ကျွန်တော် ဆရာဝန် မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာဆေးသောက်ရမယ်လို့ မပြောတတ်ပါ။ ပြောတတ်လည်း ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနေတဲ့ နေရာမှာ ဆေးနာမည်တွေ ထည့်ပေးခြင်းဟာ အန္တရာယ်များတယ်လို့ ခံယူတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဆေးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သောက်သုံးခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကြားဖူးနားဝ၊ ဖတ်ဖူးတာမျှလောက်နဲ့တော့ ဆေးဝါးတွေကို မသောက်သုံးသင့်ကြပါဘူးခင်ဗျာ၊
Reply	Pan permalink	13/09/2011 19:35	ဒီနေ့ ဆရာရဲ့ အ်ိပ်မက်အတူမက်ကြစို့ မနက်မလင်းခင် စာအုပ်ကို တော်ဝင်စင်တာက
စာအုပ်ဆိုင်မှာတွေ့လို့ ၀ယ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်ရှာမရတဲ့သူတွေ ၀ယ်နိုင်အောင်လို့
Reply	lettwebaw permalink*	13/09/2011 20:18	ကျေးဇူးပါ။ ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လည်း ဘယ်လို ခံစားရသလဲဆိုတာလေး ပြောပေးရင် ပိုကျေးဇူးတင်မှာပါခင်ဗျာ။
Reply	Pan permalink	19/09/2011 19:34	ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့
တောင်ပေါ်ကို လေအိတ်ကားကြီးနဲ့ တအိအိ တငြိမ့်ငြိမ့်တက်သွားပြီးတော့မှ
တောင်အောက်ကို ထော်လာဂျီနဲ့ တလမန်းကြမ်းဆင်းလာခဲ့ရသလိုပဲ
နောက်ဆုံးအိပ်မက်က သိပ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး မက်လိုက်ရသလိုပဲ
ခြေရာပြိုးပြောက်ထဲက ၀တ္ထုတွေကို ပိုကြိုက်မိတယ်
lettwebaw permalink*	19/09/2011 20:17	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြောတတ်သလို ပြောတာလေးကိုက လှပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပါဦးမည်ပေါ့။
1234 permalink	14/09/2011 12:47	can also buy @city mart phone gyi road,LMD Tsp.
Reply	မုန်တိုင်း permalink	16/09/2011 22:34	ဆရာရေ ကျွှန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ ကျွှန်တော်ဆိုက်ထဲကိုဒီနေ့မှစရောက်တာ သိချင်တာလေးမေးချင်လို့ပါ ဖြေပေးပါနော် တစ်ချို.မိန်းမတွေယောနိဝ ကနီရဲနေပြီးတော့ တစ်ချို.ကဘာလို့မဲနေတာလဲသိချင်တာပါခင်ဗျာ ဆရာကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော်….လေးစားစွာဖြင့်
Reply	lettwebaw permalink*	17/09/2011 01:44	အဲ… ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ တချို့သူတွေက အသားမည်းပြီး တချို့သူတွေက အသား တအားဖြူပြီး တချို့သူတွေကျတော့ နီစပ်စပ်ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြီး ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါနော်… Reply	မုန်တိုင်း permalink	17/09/2011 11:18	ကျွှန်တော်သိချင်တာက ဆေးသုံးတာလား အဲဒါသိချင်တာပါဆရာ ……….လေကြောရှည်တာမဟုတ်ပါဘူး
Mie Mie permalink	19/09/2011 16:34	ဆရာရှင့်
လေချိုသွေးယုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားရှင့်။ အမျိုးသား အင်္ဂါက အရည် ပါးစပ်ထဲ ၀င်သွားရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လားသိချင်လို့ပါ။
Reply	lettwebaw permalink*	19/09/2011 17:38	လိင်အင်္ဂါအပါအ၀င် ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်မှန်သမျှမှာ HIV ပိုး၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးအပါအ၀င် တခြား လ်ိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ ပါဝင်နေတာ ၁၀၀ % သေချာပါတယ်။ HIV ပိုးရှိနေသူ၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး ရှိနေသူများဟာ လူသာမန်များလိုပဲ ပုံမှန် သွားလာ စားသောက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ ချိုပေါက်မနေကြပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ထက် စိတ်ပူရတာက အဲဒါတွေပါ။ အဲဒါတွေကို မပူဘဲ ဗိုက်ကြီးမှာကိုပဲ ပူနေတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဗိုက်ကြီးတာက မွေးချင်မွေး၊ ဖျက်ချင်ဖျက်၊ သူများပေးချင်ပေး လုပ်လို့ ရသေးတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါရရင်တော့ ဘ၀တစ်ခုလုံး တုံးသွားမှာပါ ခင်ဗျား။
Reply	Moe Sweet permalink	19/09/2011 18:28	Blow job ကိုလေချိုသွေးတယ် လို့ခေါ်မှန်းအခုမှ သိတော့တယ် ဆရာက မေးခွန်းအဖြေကို တိုက်ရိုက်ဖြေမထားပေးလို့ ကျွန်တော် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဝင်ဖြေပါတယ် ဆရာ။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
အကြောင်းက ကိုယ်ဝန်ရဖို့ဆိုတာ သုက်ရည်သည် ယောနိကတဆင့် သားအိမ်ထဲရောက်၊ အဲဒီမှာ မမျိုးဥအိမ် (ပုံတွေမှာကြည့်ရင် earphone လေးတစ်စုံနှင့်တူ) ကဆင်းလာတဲ့ မမျိုးဥနဲ့တွေ့မှ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ထဲကဆိုရင် လည်ချောင်း၊ အစာအိမ်၊ အူ စတဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းတလျှောက်ဆင်းသွားလို့ မျိုးပွားလမ်းကြောင်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်လိုပဲ၊ ကိုယ်ဝန်မရ နိုင်တဲ့ နောက်တစ်ပေါက်က တော့ စအိုပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ Reply	lettwebaw permalink*	19/09/2011 18:40	အေးဗျာ… နားလည်ပါတယ် ကိုမိုးချိုရယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတော့ သိပ်မတင်ချင်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော် တမင် မဖြေဘဲ ထားလိုက်တယ်။ ကနေ့ကာလ လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ အသက်မဆုံးရင်တောင် ဘ၀တုံးသွားနိုင်တဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကို မပူပင်ကြဘဲ သည် ဗိုက်ကြီးမှာကိုပဲ ထိုင်ထိုင်ပူပြနေကြတာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်ဘူး ကိုမိုးချိုရေ။ ကိုယ့်လင် ကိုယ့်မယားမဟုတ်ရင် ဘယ်သူနဲ့မှ အကာအကွယ်မပါဘဲ ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့မှ လိင်မဆက်ဆံစေချင်ဘူးဗျာ။ ကိုယ့်လင်အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးဆိုရင်တောင်မှ သူ ခြေများနေပြီဆိုရင် မယားဘက်က ငြင်းပိုင်ခွင့်၊ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်၊ ဆေးစစ်ခွင့်ကို လင်လုတာထက် ပိုပြီး အရေးထား လုပ်သင့်တဲ့ ခေတ်ကာလကြီးကို ရောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ မုန်တိုင်း permalink	19/09/2011 23:11	ဆရာရေ………မိန်းမတွေနဲ့ဆက်ဆံရင် သူတို့ရာသီလာပြီး ၇ ရက်နဲ့ ရာသီမလာခင် ၇ ရက်မှာဆက်ဆံရမှုာလား ဒါမမဟုတ် အဒီအချိန်မဆက်ဆံရဘူးလား အဲဒါသိချင်လို့ပါ ဖြေပေးပါနော်
Reply	lettwebaw permalink*	20/09/2011 05:02	သည်ဘလော့(ဂ်)ထဲမှာ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ရက်တွက်တာ စိတ်ချရသလား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်တွက်တာ အဲသလောက် မလွယ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Reply	Moe Sweet permalink	20/09/2011 07:18	ကျွန်တော့် အဖိုး ဆရာဝန်ကြီး ရက်တွက်လိုက်တာ ကျွန်တော့် ဦးလေးထွက်လာတယ်ဗျ။ အဲဒါတော့ သွားမစမ်းနဲ့ဗျာ။ အားမပေးဘူး။
Reply	k.t.mh permalink	17/12/2012 10:04	ရက်တွက်တာ မမှန်ဘူးဆိုတာကို ဥပမာပေးလိုက်တာလေး သဘောကျလိုက်တာ.ဗျာ
Mie Mie permalink	20/09/2011 14:43	ဆရာ အခုလို ပြောပြ ဆုံးမပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ (ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ ပါဝင်နေတာ ၁၀၀ % သေချာပါတယ်) ဆရာ အခုလိုပြောပြပေးလို့ နောက်ဆို ဆင်ခြင်ပါတော့မယ်။ ကို မိုးချိုကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ မီး တကယ်မသိတာကို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်။
Reply	MYOKHIN permalink	25/09/2011 00:18	hey dr.chat gyi u aRE MOTHERFUCKER
Reply	Moe Sweet permalink	14/10/2011 08:28	ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဆရာ အတ္တကျော် blog မှာ drchatgyi ကိုလာဆဲတာတုန်း
Reply	ghost permalink	20/10/2011 21:59	ရှုးကြောင်ကြောင်နဲ့ဆိုဒ်မှားပြီးလာဆဲတာနေမှာပါကွာ
Reply	မောင်စပ်စု permalink	28/09/2011 22:27	ဆရာခင်ဗျာ…
ကျွန်တော့် ကောင်မလေး က အသားအရမ်းဖြူပါတယ်.ယောနိဝလည်းဖြူပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ နို့ သီးခေါင်းကျတော့ မဲနေပါတယ်. ကျွန်တော် သိချင်တာက နို့ စို့ ခံတာ များ ရင် နို့ သီးခေါင်း
p.s- ကျေးဇူးပြုပြီး question type နဲ့ ပြန်မဖြေပါနဲ့ ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော် မသိလို့ မေးတာပါ..
Reply	lettwebaw permalink*	29/09/2011 13:43	ကျွန်တော်လည်း မသိတော့ပါဘူးဗျာ။ ဒါထက် နေပါဦး။ အသားဖြူတဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ နို့သီးတွေလည်း လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးလေ။ သူငယ်ချင်း တရုတ်လူမျိုး ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ နို့သီးတွေလည်း လိုက်လှန်ကြည့်။ အဖြေတွေ့မလားပဲနော်။ သူတို့တွေတော့ အစို့ခံ မထားရတာ သေချာပါလိမ့်မယ်။ Reply	မောင်စပ်စု permalink	29/09/2011 15:18	ခုမှပဲရှင်းသွားတော့တယ်…. ခုမှပဲစဉ်းစားဖို့ တကွက်လိုသွားမှန်းသိတယ်…
တရုတ် တွေရဲ့နို့ သီးကို လှန်ကြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး… ကျေးဇူးဆရာ…
Shumawa permalink	14/02/2012 00:33	ဆရာရယ် ရီလိုက်ရတာ သေတော့မယ်။
အောင်ပြည့် permalink	29/09/2011 20:44	hi
Reply	အောင်ပြည့် permalink	29/09/2011 21:06	ဆရာခင်ဗျာ
ကျွန်တော်မေးစရာရှိလို့ပါ အရင်ဆုံး ကျွန်တော့်မိသားစုအကြောင်း အရင် ပြောပြမယ်
ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက မိန်းမတွေကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းလာရပါတယ် မိန်းမတွေဆိုတာက ကျွန်တော့်အဖွားရယ် အဒေါ် 3ယောက်ပါ သူတို့တွေပဲ ကျွန်တော့်ကို ထိန်းကျောင်းလာတာ အခုထိတိုင်အောင်ပါပဲ ကျွန်တော်သိချင်တာက အဲဒီလိုမိန်းကလေးတွေ ကြာ်းမှာ အနေများရင် မိန်းမစိတ် ၀င်လာတတ်ပါသလား ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မှာ အကျင့်1ခုရှိပါတယ် ဒါကတော့ ကောင်လေးချောချောလေးတွေ မြင်ရင် လိုက်ကြည့်တတ်ပါတယ် ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်က ချောတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ မပါပေမဲ့ ကြည့်လို့တော့ ကောင်းပါတယ်ဲပြီးတော့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အတွင်းခံတွေ လှမ်းထားတာ မြင်ရင်လဲ လိုက်ကြည့်တတ်ပါတယ် ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲ အခြောက်စိတ်ဝင်နေလို့ပါလား ပြီးတော့ ၀က်ဆိုက်တွေ ကြည့်ရင်လဲ အခြောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ ကြည့်လေ့ရှိပါတယ် ကျွန်တော်က ရည်းစားလဲ ထားဖူးပါတယ် အောကားလဲ ကြည့်ပါတယ် 1ကိုယ်ရည် အာသာဖျော်ဖြေမှုလဲ လုပ်လေ့ရှိပါတယ် ကျွန်တော် အခြောက် မဖြစ်ချင်ပါဘူး အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ 1ချက်လောက် ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန့်တော့်စာမှာ အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။ ။ ။
Reply	mm permalink	01/10/2011 22:31	Dear Saya,
May I know your gmail address?
I want to ask some question about marriage life.
Reply	mm permalink	01/10/2011 23:42	Sorry, I know what I do, I will find your gmail address in your old books.Thanks
Reply	သိချင်သူလေး permalink	12/04/2012 14:27	တစ်ခုလောက်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ… ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော့ကောင်မလေးက (စကားအသုံးအနှုန်းမှာရင် ခွင့်လွတ်ပါ) ချစ်တင်းနှောဖူးပါတယ်..ကျွန်တော့်ရဲ့ လိင်တံကို တော့ မသွင်းဘူးပါဗျာ…ဒါပေမယ့်သူ့ အတွင့်ခံကိုတော့ ချွတ်ပီး အပြင်မှာပဲ ထိတွေ့ တာပါ…scrotum နဲ့ vagina တော့ ထိတွေ့ တာပါ..အဲဒါ ကိုယ်ဝန်များ ရနိုင်သလားခင်ဗျာ……
1234 permalink	07/10/2011 09:53	Sir,I wanna know about viargra Details.Can I buy here(Local)?
Reply	Moe Sweet permalink	14/10/2011 08:27	City Mart Pharmacy မှာတော်တွေ့မိသလိုပဲ။ တစ်ကဒ် ၃၀၀၀၀ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။
Reply	အောင်ကြီး permalink	07/12/2012 07:07	ဟုပ်လို့လားငါဝယ်တာ၂၅၀၀ပဲ
Georgory permalink	13/11/2012 20:13	Viargara is only indicated for impotence( inability to erect your penis)….If misused, I mean, if you would use it to last longer, it will cause dangerous side effects such as blood pressure drop (if combined with some vasodilators; nitrate) and blue green tingeing of vision. In UK it is only indicated for IMPOTENCE…So take care of its usage.
Reply	lettwebaw permalink*	13/11/2012 20:50	An official site for Viagra:
may moe permalink	13/10/2011 01:15	ဆရာရှင့်
သမီးက ဆရာ့ရဲ့ စာတွေကို မကြာမကြာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
ဗဟုသုတတွေလည်းရပါတယ် …. အမှန်တိုင်းပြောရရင် စာအုပ်တော့တစ်ခါမှ ဝယ်မဖတ်ဖူးပါဘူး
အွန်လိုင်းကနေပဲ အမြဲဝင်ဖတ်ဖြစ်တာပါ …
အခု ဆရာ့ကို သမီးတစ်ခုမေးပါရစေ …
သမီးနဲ့ သမီးချစ်သူက အတူနေချစ်သူတွေပါ … အဲလို အတူနေချစ်သူဖြစ်သွားတာကလည်း သိပ်တော့မကြာသေးပါဘူး ..
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံရရင် သမီးတို့ ဆက်ဆံကြတာ ၄ကြိမ်ပဲရှိပါသေးတယ်
ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ပဲ ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ်မှာတော့ ပြီးတာကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်
အဲဒီမှာ ပြသနာတက်တော့တာပါပဲ ဆရာ ….
၃ကြိမ်တိတိ သူပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့ သမီးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
ပြီးတော့ ပိုဆိုးတာက သူ့ အတွက်ပြီးတဲ့အချိန်က တစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန် ပိုပိုပြီးမြန်လာခဲ့တာပါပဲ
နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာဆို ဆက်ဆံမယ်လို့ ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲ သူပြီးသွားခဲ့ပါတယ်
သမီးအတွက် ခု ချိန်မှာ ဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ သမီးအတွက်လည်း ကျေနပ်မှု ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိနေပါတယ်
အဲဒါကြောင့် ဆရာ့ကို သမီးမေးချင်တာက သူ အဲလို မြန်လွန်းနေတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ ..
ရောဂါလို့ နာမည်တပ်နိုင်ပါသလား …..
ဘယ်လို ကုသမှုမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ ဆရာ့အနေနဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ ..
Reply	Moe Sweet permalink	14/10/2011 08:26	နေ့တိုင်းမှန်မှန်ဆက်ဆံရင် လိပ်ပတ်လည်ပြီး ok သွားမယ်ထင်တယ်။
နောက်တခုက သူ့ကို နိုးဆော်တဲ့ အမူအရာ၊ အသံတွေ သိပ်မလုပ်ပါနဲ့။
ကိုယ်ပြီးချင်ရင် ကိုယ်အရင် အပေါ်ကနေ ဝ အောင်လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုက oral sex နဲ့လည်းပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Reply	ghost permalink	20/10/2011 22:02	အစ်ကိုမိုးရယ်မိန်းကလေးကိုသွားမြှောက်ပေးသလိုဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ
SS permalink	13/09/2012 09:09	၇ီလိုက်ရတာ..ကိုမိုးချိုက ဆရာ့အစားဝင်ဝင်ဖြေပေးနေတာကြည့်ပြီးးးအငြိမ့်ကြည့်နေ
thinthinmya permalink	13/09/2012 17:07	ကျေးဇူးပါပဲ။ညီမမှာလည်းဒီproblem ဖြစ်နေတာ။အခုမှသိတော့တယ်။နောက်တခါအသံမထွတ်တော့ဘူး။ဟီး
Moe Sweet permalink	21/10/2011 07:43	ကျွန်တော်က “အတူနေချစ်သူ” ဆိုတာကို living together လို့ မှားဘာသာပြန်မိလို့ နေ့တိုင်းလုပ်မယ် ယူဆမိလို့ပါ။ ;D အခုပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှ မဟုတ်လောက်မှန်းသိရတာ။
Reply	အောင်ကြီး permalink	07/12/2012 07:10	အော်အဲ့ဒါကသူဆန္ဒစောနေလို့ပါ
Reply	မင်းသော်တာ permalink	13/10/2011 05:28	ဆရာကို့ကိုယ့်ဦးလေးအရင်းတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး အကြံတစ်ခုလောက် တောင်းချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်က ဟိုတလောကမှ 18နှစ်ပြည့်ပြီးတာပါ။
ကျွန်တော်ကောင်မလေးက ကျွန်တော်ထက်ငယ်ပါတယ်။ သူက 17 နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ ရည်းစားသက်တမ်းကတော့ 2နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ က မိဘတွေ မသ်အောင်ခိုးတွေ့ ရတာဆိုတော့ လူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲတွေ့ ကြပါတယ်။
သမီးရည်းစားသက်တမ်းတစ်လျှောက် သူ့ ကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို စည်းကျော်ဖို့ လဲ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်သူကို ဖြူဖြူစင်စင်ပဲချစ်လာခဲ့တာပါဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရဲ့18 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ လုပ်တဲ့ညမှာ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် အရက်အလွန်အကြွံ သောက်သုံးမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညမှာပဲ ဆရာရယ် ဘယ်လိုပြောရမလဲ အရက်မှုးနေတဲ့ကျွန်တော့်ကို အိမ်အထိ သူကလိုက်ပို့ ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် အမေကလဲ ရုံးအလုပ်နဲ့နယ်ရောက်နေတဲ့အချိန် တစ်အိမ်လုံးမှာလဲ သူနဲ့ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိနေခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မှားခဲ့ကြတယ် ဆရာ။ တစ်ကြိမ် တစ်ခါ ဆက်ဆံရုံနဲ့ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား ဆရာ။
ကျွန်တော်မေးတာ သူ့ ကိုတာဝန်မယူချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ဆေးကျောင်းသူပါ။ ကျွန်တော်ကလဲ နောက်လလောက်ဆို အမေရိကကို သွားရတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်သူက လက်ထပ်မှာပါဆရာ။ ဒါပေမယ့် သူ့ ပညာရေးနဲ့ ကျွန်တော့်ပညာရေး ငဲ့နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်သွားပြီးမှ ကိုယ်ဝန်ပေါ်လာခဲ့ရင် သူလဲအရှက်ကွဲမှာပါဆရာ။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲ ဆရာရယ်။ အကြံပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်စာမှာ ရိုင်းပျတာပါသွားရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
Reply	Moe Sweet permalink	14/10/2011 08:22	စာရေးတာနဲ့ပဲ နောက်ကျသွားပြီ။ အရေးပေါ်ဆေးဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ လုပ်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းသောက်ရတယ်။ အခုအချိန်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ သူ့ ovulation day ကိုတွက်ခိုင်းပါ။ ovulation day မကျဘူးဆိုရင်တော့ risk ယူပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ အချိန်တန်မလာတော့လည်း ကေသီပန်တိုက်လိုက်ပေါ။ ဆေးကျောင်းသူကလည်း ဒါကိုမသိဘူးလား။ အရက်အလွန်အကြွံ မူးနေတုန်း လိင်ဆက်ဆံနိုင်တာလဲ ချီးကျူးတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်ထင်တာ။
Reply	ဟီးး permalink	10/12/2011 14:16	ကောင်းတယ် ပြောပလိုက် မင်းသော်ဇင် permalink	13/10/2011 05:46	ကျွန်တော်နာမည်က မင်းသော်ဇင်ပါဆရာ။ ကျွန်တော်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူကမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် အရမ်းဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလဲ သူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူအခု မော်ဒယ်အေဂျင်စီ တစ်ခုမှာ သင်တန်းသွားတက်နေပါတယ် ဆရာ။
ကျွန်တော်ကြားဖူးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်လောက၊ မော်ဒယ်လောကဟာ မင်းသမီးမှန်ရင် ပရိုဂျူဆာက အရင်စားတယ်တဲ့ ဆရာ။ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော်သူကို စိတ်ပူပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော် သူကို တားပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတွေကို တိုင်ပင်ကြည့်တော့ တော်တော်များများက ကိုယ်အရင် ပိုင်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပေါ့လို့ ပြောကြပါတယ် ဒီအကြံတွေက မှန်သလားဆရာ။ မိန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကာမကိုရရုံနဲ့သူကို့ ပိုင်ပြီလို့ ပြောနိုင်သလား ဆရာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုပဲ အလှကြည့်နေချင်တာပါ။ ဒါကိုပြောတော့ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းမခူးရင် သူများခူးသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ ဆရာ။ သူ ကျွန်တော်ကို့ တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်ဆရာ။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်သူ့ ကို စိတ်ချထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် စောစောကလို သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပါများတော့ ကျွန်တော်တွေဝေလာပါတယ်။ မရှက်မရွံပြောရရင် သူနဲ့ တွေ့ ရင် ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲ တဏှာစိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ တဏှာစိတ်ရိုင်းကို သတိချွန်းနဲ့ကျွန်တော်ထိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှန်သလား ဆရာ။ ကျွန်တော့်ကို အကြံပေးပါဦးနော်။
Reply	Moe Sweet permalink	14/10/2011 08:17	“မိန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကာမကိုရရုံနဲ့သူကို့ ပိုင်ပြီလို့ ပြောနိုင်သလား ဆရာ” ဆိုရင်တော့ ပြောနိုင်ပါဘူး။ သူကကိုယ့်ကို အထင်ကြီးလေးစား အားကိုးပြီး၊ သူ့ဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုယ့်ကို အရေးပေး တိုင်ပင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Sex ကတော့ သူသဘောတူရင် လုပ်သာလုပ်ပါ။ တဏှာ က စိတ်ရိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အစာ အဟာရလိုလို့ ဗိုက်ဆာသလိုပဲ၊ မျိုးပွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စေ့ဆော်ချက်ပါ။ Safe sex တော့ဖြစ်ပါစေ။ i.e, Condom သုံးပါ။
Reply	မေတ္တာ permalink	31/10/2011 19:03	မျိုးစက်ပွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စေ့ဆော်ချက်ဆိုပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ မလုပ်သင့်တဲ့သူတွေတော့ ရှိမှာပေါ့နော်.. လူတိုင်းကို သဘောတူတဲ့သူတိုင်းကို မလုပ်သင့်ဘူးဟု ထင်ပါတယ်.. လုပ်ပီ နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကရော ဘာတွေ ရှီနိုင်ပါသေးသလဲ။ နောင်တတဖန် ပူပန်တာမျိုးရော မရှိနိုင်ဘူးလား..
Personal boy permalink	06/03/2012 10:54	ဆရာ ကိုမိုးချို ..ကိုလေးစားပါတယ် … ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ တခု ရေးပါလားဆရာ … ရှိပီးသားဆိုရင်လည်း… ဆရာ့ ဘလော့က စာတွေ ဖတ်ခြင်ပါတယ်….
aungzawmoe permalink	13/10/2011 22:50	ဆရာခင်ဗျား
ကျွန်တော် ကိုတခုလောက်မေးခွင့်ပြု့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံ အိမ်ထောင်ကျတာ တနှစ်ခွဲပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အသက်ကလဲ ၃၅ ပါတ်ဝန်းကျင်တွေပါ။ကလေးလိုချင်လို့ ဆရာဝန်တွေကော နတ်စင်တွေပါ မကျန်ပေါ့ဆရာရယ်။ဒါပေမယ့် အခုချိန်အထိ အရိပ်အယောင်တောင်မမြင်ရသေးပါဘူးဆရာ။ဖြစ်နိုင်တာလေးတွေ ပြောပြပေးပါလားဆရာ။နောက်တခု က ကျွန်တော်တို့က အမြဲ အတူမနေနိုင်ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်က တိုင်းခြားမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးခုချိန်ထိ ၄လခွဲလောက်ပဲ အတူနေချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာ။အသက် အရွယ်ကြောင့်ဆိုင်မလားဆရာ။ဒီထက် အသက်ကြီးလာရင် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲနိုင်မလား။ဆရာ့ဆောင်းပါးထဲကလို ကလေးမျိုးတွေ ရလာနိုင်မလား။ကျွန်တော့ ကို ပြန်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီ၁၂လပိုင်းမှာ ကျွန်တော့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချစရာရှိနေပါတယ်။ပြန်မလား ဆက်နေမလားဆိုတာပေါ့ဆရာ ။ပြန်မယ်ဆိုရင် လဲဒီကိစ္စအတွက် ပါပဲ ဆရာ။အမျိုးသမီးကလဲ ကလေးအတွက်ကြောင့် စိတ်တော်တော်ပူနေပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ….။
Reply	lettwebaw permalink*	13/10/2011 23:14	၃၅ ၀န်းကျင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကလေးယူဖို့ မသင့်တော့တာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ။ အရင်က တစွတ်စွတ်မွေးခဲ့ဖူးသူဆိုရင်တော့လည်း တစ်မျိုးပေါ့။ သားဦးကို ၃၅-၃၆ မှာမွေးမယ်ဆိုရင် မိခင်ရော ကလေးအတွက်ပါ အလွန် အန္တရာယ် များလှပါတယ်။ မရဘူးလားဆိုရင်တော့ ရတယ်။ ခေတ်မီ ဆေးပညာနဲ့ ကျကျနန မွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိခင်မှာ အန္တရာယ် လျော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ သို့ပေမယ့် ကလေးကောင်းလေး မွေးလာမယ်၊ မွေးမလာဘူးဆိုတာတော့ ဘယ်ပညာရှင်မှ အာမ မခံနိုင်တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီ့အန္တရာယ်ကတော့ မလွဲမသွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ သည်ကိစ္စမှာ စွန့်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။
Reply	aungzawmoe permalink	13/10/2011 23:19	ကျွန်တော့ အတွက်အစိုးရိမ်ဆုံးကလဲ အဲဒီကိစ္စပါပဲဆရာရယ်။အမျိုးသမီးကိုတော့ ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတားပါတယ်ဆရာ။သူ့ကိုလဲ သနားတယ်ဆရာရယ်။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ တောင်မသိတော့ပါဘူးဗျာ..။မိသားစုထဲမှာလဲ တော်တော်မျှော်လင့်နေကြတာ..။
1234 permalink	14/10/2011 17:14	why if take pill72,ecee2,their menstruation happens lately?
Reply	ပျော်တော်ဆက် permalink	18/10/2011 14:43	ဆရာခင်ဗျား…
Reply	lettwebaw permalink*	19/10/2011 05:44	သည်ဘလော့(ဂ်)ထဲက သိပ်မများလှတဲ့ စာတွေကို စုံအောင် ဖတ်မယ်ဆိုရင် သည်မေးခွန်းပေါ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ http://nookycontent.wordpress.com/2010/10/09/261/ မှာ ပြောပြီးသားပါ။
Reply	Htun Aung Kyaw permalink	19/10/2011 02:51	ဆရာခင်ဗျား
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော်ဟာ masturbate လုပ်လွန်းသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း နေပါတယ်။ အိမ်မှာ အင်တာနက်လိုင်းလည်း ရှိတဲ့အတွက် အွန်လိုင်းကနေ အပြာဇာတ်လမ်းတွေ ဒေါင်းလုဒ်ချပြီး ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း စိတ်ပါလာတိုင်း ကျွန်တော် masturbate အမြဲ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ အကျင့်ကြီး တစ်ခုလို ဖြစ်လာပြီး လိင်တံ အားမကောင်းလည်း ကိစ္စပြီးတဲ့အထိ လုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုရင်ပဲ တစ်ခါတစ်လေ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်အထိ ဖြစ်သွားတဲ့ ရက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သုက်လွှတ်အားလည်း မကောင်းတော့ပါဘူး။ ထွက်တယ် ဆိုရုံအထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲလို လုပ်တာ ရေရှည်မှာ ပန်းသေ ပန်းညှိုး ရောဂါ ဖြစ်မှာ၊ သုက်လွှတ်အား မကောင်းတော့မှာ၊ ကလေးမရတော့မှာ အလွန် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စွဲမြဲနေတဲ့ အကျင့်ကြီးကို ဖျောက်မရနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာက သတိပေးစကား တစ်ခုခု ပြောကြားလာရင်တော့ ကျွန်တော် မရမက ဆင်ခြင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှာပါ။
နောက်ထပ် ဆိုးကျိုး တစ်ချက်က အဲလို လက်နဲ့ ဖြေလွန်းအားကြီးတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကောင်မလေးနဲ့ ဆက်ဆံကြတဲ့အခါ လိင်တံက ထောင်မလာတော့ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ သူရော ကိုယ်ရော ဆန္ဒ မပြည့်ဝဘဲ သူက ကျွန်တော် တခြားနေရာမှာ အားအင်တွေ သုံးထားတယ်လို့ သိ၊ တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ သံသယ ရှိပြီး ကျွန်တော်နဲ့ ကတောက်ကဆလေးတွေလည်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံပေးပါဦး ဆရာ။ Masturbation ကို စွန့်လွှတ်ထားဖို့ ဆရာ အကြံပေးလာရင်လည်း ကျွန်တော် နာခံပါ့မယ်၊ လိင်တံနဲ့ သုက်လွှတ်အား ပြန်ကောင်းလာနိုင်မယ့် ဆေး ၀ယ်သောက်ရမယ် ဆိုလည်း ဆေးအညွှန်းလေး လိုချင်ပါတယ်။ အရမ်းကို အားကိုးပါတယ်ဆရာရယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အမြန် ဖြေကြားပေးပါဦးနော်။
Reply	lettwebaw permalink*	19/10/2011 05:41	http://nookycontent.wordpress.com/2010/07/31/about-masturbation/ မှာ အပြည့်အစုံ ပြောပြပြီးသားပါ။ အဲဒါကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ http://nookycontent.wordpress.com/2010/09/10/196/ မှာလည်း ထပ်ပြီး ရေးထားပါသေးတယ်။ အဲဒါလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမေးကို ဖြေထားတာဖြစ်ပေမယ့် အဖြေဟာ၊ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက စိတ်ပြဿနာလို့ ယူဆရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတာနဲ့ မဆက်စပ်ပါဘူး။
Reply	myo min permalink	20/10/2011 07:39	ဆရာ စာတွေဖတ်ရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ အတွက်က အပြာစာအုပ်တွေရယ် ရှေ့ကအကိုကြီးတွေရယ် ဒါပဲ ကြားဖူးနားဝနဲ့လုပ်နေကြတာများပါတယ်။ကျေးဇူးကြီးပါတယ် ဆရာ။
နောက်တစ်ခုက ဆရာ့လိုပဲ စေတနာနဲ့ဒီကိစ္စတွေကို ရေးထားတဲ့ Blog တစ်ခုအသိမျှပေးချင်ပါတယ် အားလုံးကိုပါ။ http://www.yamunaclinic.org/ ဆိုတာလေးပါ။ဆရာဝန်တစ်ဦး တင်ထားတာပါ။မေးချင်တာလည်း မေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆရာ ၂ ဦး အားကိုးနဲ့ပဲ မိုက်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
Reply	1234 permalink	22/10/2011 14:12	yes yes.me2
Reply	zarniaung permalink	29/10/2011 23:35	ဆရာ ခင်ဗျာ
မိန်းကလေးနဲ့ အတူနေ ပြီးတဲ့အခါမှာ —————-
ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ———-
ဆေးအ မြဲတမ်းသောက်လို့ဘယ်လိုရောဂါမျိုးဖြစ်တတ်ပါသလဲ ခင်ဗျာ ———–
အတူနေတိုင်း ဆေးသောက်ခဲ့လို့နောက်ပိုင်းဆေးယဉ်သွားပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ရတတ်ပါသလား ————
အတူနေတိုင်း ဆေးသောက်ခဲ့လို့ကလေးလိုချင်တဲ့အခါ ကလေးမရနိုင်ဖြစ်တာတကယ်ပါလား ———-
အခုခေတ်ပေါ်နေသော တားဆေးတွေက စိတ်ချရပါသလား ————–
မှတ်ချက်။ ။ တရားဝင်ကြော်ငြာတဲ့ ဆေးရှိသလို ၊ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ဆေးလည်း ၇ှိနေလို့ ပါ—
ဖြေကြားပေးပါ။ ။ကွန်ဒုံးသုံးတာနဲ့ဆေးတိုက်တာ ဘယ်နည်းက ပိုကောင်းပါသလဲခင်ဗျာ ———–
မှတ်ချက်။ ။အိမ်ထောင်သည်မဟုတ်ပါ ။ ဆေးလုံးဝမတိုက်ဖူးပါ —————
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာခင်ဗျာ ————
Reply	lettwebaw permalink*	06/11/2011 12:51	ကွန်ဒုံးကို ပိုပြီး အားပေးချင်ပါတယ်။
Reply	ကောင်လေး permalink	30/10/2011 01:55	ကျနော်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ
ကျနော်တို့ 10 တန်းလောက်တုန်းက အဆောင်မှာနေပါတယ်
အဆောင်နားက မိန်းကလေးတွေရေချိုးရင် ချောင်းကြည့်ကြပါတယ် အစတုန်းက တော့ အပျော်ပေါ့ နောက်တော့ တကယ့် နှာ စိတ်နဲ့ပါ
နောက် 10 တန်း ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့ အဲဒီဟာက စွဲကပ်လာပါတယ်
အိမ်နားက ကောင်မလေးရေချိုးတာကို ချောင်းပါတယ် တနေ့တော့ အကြည့်လွန်ပြီး သူက သိသွားပါတယ်
ဘာမှမပြောပါဘူး အဲနောက် အဲဒီကောင်မလေးကို အပြင်မှာမြင်ရရင် ကိုယ့်ကလန့်နေပါတယ်
အဲဒါက ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး တခြားကောင်မလေးတွေကိုပါ ဘာမှမသိတဲ့သူဆိုရင်တောင် ကြောက်လာပါတယ်
နောက် မေးချင်တာက ကျနော့် ကောင်မလေးက မပြောမဆို အဝေးထွက်သွားကတည်းက ကျနော့်မှာ သူ့ကို နေ့တိုင်းလိုလို မျှော်နေမိပါတယ် နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း မေ့မယ် ထင်တာ အနဲဆုံး တစ်ပတ်မှာ34 ခါလောက် သတိရမိပါတယ် အခုသူက အိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ ဒါပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ သူက ရှိနေသေးပါတယ် ကျနော့်ကို ကျနော် မေ့ဖျောက်ကြည့်တာ မရပါဘူး
နောက်ပြီး ကျွန်တော် ကအစွဲအလန်းကြီးပြီး အရှက်ကြီးတက်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုက နေ့တိုင်း Masturbation ပြီးမှ အိပ်တက်တာက အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ် မလုပ်ရရင် သိပ်အိပ်မပျော်ပါဘူး ဘယ်လို ဖျောက်ရမလဲ ကျနော့်ဂျိုးက ပန်းငုံနေပါတယ် ကျနော် အသက်က 19 နှစ်လွန်နေပါပြီ အိမ်ကိုလည်း မပြောရဲပါဘူး ဘယ်သူနဲ့မှ မတိုင်ပင်ဖူးပါဘူး ကျနော်က အရွယ်ရောက်တည်းက လက်နဲ့ တစ်ခါမှလည်း မလုပ်ဖူးပါဘူး သူများတွေပြောလို့ လုပ်ကြည့်ရင် နာပါတယ် ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူး အဲဒါကိုလည်း ဖြေပေးပါ
ပန်းငုံနေတဲ့သူက ဆက်ဆံလို့ ရပါသလား
တစ်နေ့ တစ်ကြီမ် Masturbation လုပ်တာ များပါသလား ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေရနိုင်ပါသလဲ
ဆီးမွှေးကို ရိတ်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလား
မေးခွန်းတွေများပြီး ရိုင်းရင် ခွင့်လွှတ်ပါ
Reply	lettwebaw permalink*	06/11/2011 12:33	တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြီးသားပါ။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပန်းငုံတာက အချိန်တန်ရင် ပွင့်သွားမှာပါ။ Masturbation လုပ်တယ်လည်း ဆိုသေး၊ လက်နဲ့ တစ်ခါမှလည်း မလုပ်သေးဆိုတာကို နားမလည်ပါ။ လက်နဲ့ masturbate လုပ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းပွင့်သွားပါမယ်။ ဆီးခုံမွှေးကို ရိတ်တာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု မကောင်းရင် ရိတ်ရိတ် မရိတ်ရိတ် ပြဿနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Reply	Phyo Khine permalink	04/11/2011 09:15	ဆရာခင်ဗျာ . . .
ကျွန်တော့်ဇနီး ရဲ့နို့သီးခေါင်း ကအထဲကိုဝင်နေတယ်ဗျာ။ ကလေးရလာရင်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံပေးပါအုံးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	lettwebaw permalink*	06/11/2011 12:27	မပူပါနဲ့ဗျာ။ သဘာဝတရားက ကလေးကို ပစ်မထားပါဘူး။ ကလေး တကယ် နို့တိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ဟာသူ အလိုလို စူလာမှာပါ။ ကလေးကို မွေးပြီးပြီးချင်း တစ်နာရီအတွင်း (နို့ထွက်သည်ဖြစ်စေ မထွက်သည်ဖြစ်စေ) နို့တိုက်သင့်ပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ နို့ဦးရည်မှာ မိခင်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားတွေ၊ မိခင်ထိုးထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက ဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလို့ပါ။ နောက်တစ်ချက်က မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးပါဆိုတာဟာ ကလေးကို ရေတောင် မတိုက်ဖို့ မှာကြတာပါ။ မိခင်နို့မှာ ရေဓာတ်က အများအပြား ပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေး ၆ လအထိ မိခင်နို့ကလွဲရင် ဘာဆိုဘာမှ တိုက်ကျွေးစရာမလိုပါ။ (သည်လို ပြောထားလျက်နဲ့မှ တအား စိတ်ပူပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချင်ရင်တော့ ဖခင်လောင်းက နာနာဆွဲထုတ်ထားပး၊ စို့ပေးထားပေါ့ ခင်ဗျာ။ လင်မယား ပြဿနာတက်ရင်တော့ တာဝန် မယူဘူးနော် )
Reply	ကြယ်စင်အောင် permalink	04/11/2011 09:47	ဆရာရေ …ကျွှန်တော့်ှဆီမှာ မေးစရာလေးရှိပါသေးတယ်..
ဘယ်သူ့ဆီမေး၂ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေမတွေ့လို့
ကျွှန်တော်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးက ခုဆို အသက်၂၂ ရှိနေပါပီ…
ကျွှန်တေ်ာတို့ တွေက ပြည်ပမှာ တွေ့ ချစ်ကြတဲ့သူတွေပါ
သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဆရာရေ အနေထိုင်ကလဲ လွတ်လပ်တော့ နယ်လွန်လာတယ်ပေါ့
ကျွှန်တေ်ာနဲ့ သူဆက်ဆံလာတာ ခုဆိုရင် ၁ နှစ်ကျော်လာပါပီ.သို့ပေမယ့်
နေရာကလဲ သိပ်မနီး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ တပတ်မှ တရက်(တရက်ကို သုံးကြိမ်)
လောက်ပဲ တွေ့ဖြစ်ပါတယ်..ကြားရက်တွေကတော့ တခါတလေ သူ့ဘာလို သူ Masturbation လုပ်ဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်.
လွန်ခဲ့ တဲ့ သုံးလလောက်ကစပီး သတိထားမိလာတာကတော့ ကျွှန်တော့် ကောင်မလေးရဲ့ အင်္ဂါက
သိသိသာသာကြီးကို အရောင်က ပြောင်းလာတာကိုပါပဲ အညိုရောင် ပြောင်းသွားတယ်ဆရာ
ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ ကျန်းမာရေးအရလား..ဆေးစစ်မှု့ကတော့ တနှစ်ကိုတခါလောက် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ဖို့
စစ်ရပါတယ်…သူဆေးစစ်ထားတာကလဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကပါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးသိပါစေဆရာ ..လိုအပ်ရင် ဘာဆေးတွေ သုံးရမလဲပါ လမ်းညွန်ပါဦး
Reply	lettwebaw permalink*	06/11/2011 12:21	အသုံးများလို့ အရောင်ပြောင်းတာ ဖြစ်မလား မသိဘူးဗျ။ နဂိုက ဘာအရောင်မို့တုံး။ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူးဗျာ။ အရောင်က အရေးကြီးရင် မိတ်ကပ်လူး၊ နှုတ်ခမ်းနီ ရောင်စုံဆိုးရုံပဲ ရှိမယ် မှတ်တယ်။ (နောက်ပြီး ပြောတာ လျှောက်မဆိုးနဲ့နော်၊ ဓာတ်မတည့်မှ ဆေးကုနေရဦးမယ်။) Reply	1234 permalink	07/11/2011 10:18	ု်ိ်ကြံ၂ဖန်၂မေးတတ်တယ်း)
Reply	arkar permalink	08/11/2011 09:42	ဆရာခင်ဗျာ..
ကျွှန်တော့မိန်းမနဲ. နေတော့ နှူးရင်းနဲ့ အရည်တွေရွှဲလာတယ်ပေါ့ဗျာ..အဲဒါက ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံဖို.အတွက်လား ပြီးသွားတာလားဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲခင်ဗျာ။ အသားတွေတုန်ပြီး ကျွှန်တော့ကိုဖက်ရင်းနဲ.အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ (ကျွှန်တော်နှူးနေတုန်းပေါ့ဗျာ)..အပြင်ကိုထွက်ကျလာတာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျ..အရမ်းကိုရွှဲနေတာ…မြန်တယ်ခေါ်တာလား……အရည်ကြည်ထွက်တာများတာလား သေချာသိချင်လို.ပါ…။ .
Reply	lettwebaw permalink*	08/11/2011 18:17	ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… ကိုအာကာကို အကြံပြုချင်တာကတော့ အပြာာစာအုပ်တွေ သိပ်မဖတ်ပါနဲ့၊ အပြာကားတွေ သိပ်မကြည့်ပါနဲ့လို့ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေ ပြီးရင် အရည်ထွက်တယ်ဆိုတာ အပြာစာအုပ်တွေထဲမှာသာ ထွက်တာပါ။ နောက်ပိုင်း အပြာကားတွေမှာလည်း ထွက်ပြကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ရေတွေ ကြိုထည့်ထားပြီး ညှစ်ပြနေကြတာပါ။ ချစ်တင်းနှောဖို့ အဆင်ပြေအောင် သဘာဝက ချောဆီ ထုတ်ပေးတာသာဖြစ်ပါတယ်။
Reply	mgmg permalink	22/06/2012 10:34	အဲ့ တာ စောက်ရေထွက်တာလို့ ခေါ်တယ် ငတုံးရဲ့ရိုင်းသွားရင် sorry သူငယ်ချင်း
Reply	kaungsan permalink	13/11/2011 18:21	လူဂလန်. လူ.ဂွစာ စာရေးဆရာ
ယခုလို စာတွေ ရေးတာကို ကျေးဇူး တင် ရှိကြောင်း မထမ စာရေး ဆရာ အောင်ထွန်းကျောကို ပြောပါရစေ. မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ sex နှင် ပတ်သက်လာရင် ဘာမှ ဗဟုသုတ မရှီကျဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ ကြောင်. HIV ဖြစ်ပွားနှုံးက မြင်.လာနေပါတယ်။ ဒါကြောင်. ATKအနေဖြင်.ပညာပေးစာ များ များများရေးပေးပါလို. အကြံပြုပါတယ်။
Reply	ပိုးတုံးလုံး permalink	17/11/2011 10:29	ဆရာခင်ဗျား…. မိန်းမတစ်ယောက်ကို နမ်းတဲ့အခါ..ပါးစပ်ခြင်းထိပြီးနမ်းတယ်လို့ပဲသိထားပါတယ် ဆရာ…
ဒါပေမယ့်.. အသိတွေက အဲဒီလောက်မရိုးဘူး ပညာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်…
မိန်းမတစ်ယောက်စိတ်ကျေနပ်အောင် နမ်းနည်းလေး များရှိရင်… ဝေမျှပေးပါလားဆ၇ာ…
ကျွန်တော်..အခုထက်ထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကြင်နာမပေးတတ်သေးဘူးထင်လို့ပါ…..
ကျွန်တော့်ကောင်မလေးက လဲ ကျွန်တော့်ကို အကြင်နာမပေးတတ်သေးဘူးလို့ ပြောနေလို့ပါဆရာ…
Reply	zawye permalink	24/11/2011 10:15	ကျန်တော်သိသလောက်လေး ၀င်ဖြေမယ်နော် ကိုပိုးတုံးလုံးခင်ဗျာ နမ်းတယ်ဆိုတာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ ဘယ်လိုအချိန် မှာနမ်းမှာလည်းဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ် ဥပမာ အလုပ်သွားခါနီးလေး မိန်းမကို နမ်းမှာလည်း သမီးရီးစားချိန်းတွေ့တဲ့အချိန် နမ်းမှာလား ဒါမှာမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် အစပျိုးနမ်းမှာလားဆိုတာပါ၊ ဘယ်အချိန်ပဲနမ်းနမ်းအရေးကြီးတာကတော့ စိတ်ပေါ့ဗျာ နမ်းတဲ့ထဲမှာ ကြင်ကြင်နာနာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ နမ်းတဲ့ထဲမှာ စိတ်ကိုနှစ်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ ကျီးလန့်စားစားနဲ့လူ လစ်တုံးခိုးနမ်းရတာဆိုရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလည်းပေါ့ဗျာ.နောက်တစ်ချက်က အာခံတွင်းကလည်း မနံနေရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ နမ်းလည်းနမ်း နံနံလည်းနံဆိုရင်တော့ အလုပ်သိပ်မဖြေစ်ပြန်ပေဘူး၊ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတဲ့လင်မယားတွေတောင် ကြင်ကြင်နာနာလေးနဲ့ နမ်းလိုက်ရင် အရမ်းကြိုက်ကြတာဗျာ နမ်းတာဟာတစ်ကယ်ကောင်းပါတယ် နမ်းတဲ့နေရာမှာ တော့ စာနဲ့ရေးပြရင် သိပ်တောင်ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ဘူး အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် တလပ်စပ်ကြီးတော့မနမ်းမိစေနဲ့ဗျာ အသက်ရှူလည်းကျပ်နေပါဦးမယ် တစ်အားလည်းသွားမစုပ်သင့်ပါဘူး အတွင်းထဲရောက်တဲ့အခါ လျှာလေးကိုလည်းနည်းနည်းကစားပေးသင့်ပါတယ်။ သိသလောက် ၀င်လျှာရှည်မိပါတယ် အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ကြပါ။
Reply	Phoe Thar permalink	25/11/2011 18:22	လေးစားရပါသောဆရာ…
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပြုပါ..ကျွန်တော် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ခဲ့ပါတယ်..ချစ်တာမှ အရမ်းကို ချစ်မိတာပါ..သူလည်းကျွန်တော့်ကို အရမ်းကိုချစ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး ဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူး..ရင်ထဲမှာဘဲ တိတ်တိတ်လေး ချစ်နေကြတာပါ..အခုဆိုရင် ၈ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ…သူလည်း ရည်းစားမထားခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်း ရည်းစား မထားခဲ့ပါဘူး..သူ့ကိုဘဲချစ်တာပါ..ဘာလို့ ဖွင့်မပြောရတာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က မောင်နှမ တစ်ဝမ်းဘဲကွဲသေးတာမို့ပါ..သူများတွေကို မေးကြည့်တော့ အဲဒါ ခွေးမျိုးလို့ ပြောကြတယ် ..ဆရာ့ ထင်မြင်ချက်လေး ဆုံးမ လမ်းညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်..လေားစားစွာဖြင့်.
အဲလိုချစ်မိတာ တကယ်ဘဲ ခွေ
Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 02:08	ကျွန်တော့်အဖြေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားပါလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများပြောတာနဲ့တင် မဆုံးဖြတ်စေချင်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ မောင်နှမ တစ်ဝမ်းကွဲချင်း အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့အခါမှာ autosomal recessive gene ဆိုတဲ့ မျိုးဗီဇတစ်မျိုး အလွန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့် မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေမှာ အပြစ်အနာအဆာ တစ်ခုခုပါလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကတော့ ရှိနေတာ အမှန်ပါပဲ။ တချို့ လူမျိုးတွေမှာ အဖေ ညီအစ်ကို၊ အဖေနဲ့ မောင်နှမ ရင်းချာက မွေးတဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲချင်းယူတာကို တားမြစ်ကြပေမယ့် အမေညီအစ်မ၊ အမေနဲ့ မောင်နှမရင်းချာက မွေးတာမျိုးကျတော့ ခွင့်ပြုတာလည်း ရှိတယ်။ ရှေးမြန်မာ မင်းတွေမှာတော့ “မဟာဆီ မဟာသွေး”ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှိခဲ့တယ်။ ဘုရင့်သွေးချည်းပဲ ဖြစ်နေအောင် မောင်နှမအရင်းချင်းသာ လက်ဆက်ရရိုး ထုံးစံရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ကောင်းတာကတော့ သူနဲ့ လက်ဆက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေ၊ ဥပမာ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေမှာ အနာအဆာ ရှိနိုင်တာလိုဟာမျိုး လက်တွေ့ကျတာတွေကို တစ်ရွက်သတ်သတ်ရေး၊ သူနဲ့ လက်ဆက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ကောင်းကျိုးတွေမှာလည်း လက်တွေ့မှာ တကယ်တမ်းဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတာတွေကို တစ်ရွက်သတ်သတ်ရေး၊ သူနဲ့ ကင်းအောင် နေလိုက်ရင် ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးကို တစ်ရွက်၊ ဆိုးကျိုးကို တစ်ရွက် ကျကျနန ချရေးစေချင်ပါတယ်။ (ဆိုးကျိုးမှာ အသည်းကွဲလို့ ရင်ကွဲနာကျပြီး သေမယ်ဆိုတာမျိုးလို လက်တွေ့မကျတာတွေ မပါပါစေနဲ့။) ပြီးရင် နှစ်ရက်၊ သုံးရက် ပစ်ထားလိုက်ပါ။ သုံး-လေးရက်နေမှ ပြန်ဖတ်၊ လိုတာ ဖြည့်၊ စိတ်ကူးယဉ်ရာ ရောက်နေတာကို ဖျက်။ နောက်တစ်ခါ ထပ်ပစ်ထား။ ငါးရက်လောက်နေမှ ပြန်ဖတ်၊ ထပ်ဖြည့်သင့်ဖြည့်၊ ဖျက်သင့်ဖျက် လုပ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် လေး-ငါး-ခါလောက် လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လမ်းက အရွေးသင့်ဆုံးလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။
Reply	min maung permalink	07/12/2011 15:16	ခင်ဗျား တကယ်ချစ်ရင် ယူလိုက်ကြပါ။ ခင်ဗျားတို့ အရမ်း ဒုက်ခရောက်မယ်နော်။ ဒါပေ့မယ် ခင်ဗျားတို့တာ တစ်ကယ်ချစ်ရင် ကျော်လွားနိုင်ပါမှာ။ ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ မျိုးပါပဲ အခုလည်းသူနဲပဲ လက်ထက်ထားလို့ ကလေးတောင်ရနေပါပြီ။ ဒီစာကို ဆရာအတတကျော်က တော့ ဖွင့်ပေးပါမလားမသိဘူး….
Reply	မိုးသောက် permalink	10/03/2012 02:28	ဟုတ်တယ်ဗျ…အားပေးပါတယ်…တကယ်ချစ်ရင်တော့ယူသင့်တယ်…စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်….
Reply	tharginwe09@gmail.com permalink	20/03/2013 01:49	ကောင်းပါတယ် အရမ်းလည်းကြိုက်တယ်။
Reply	yehtut permalink	15/12/2011 12:28	thanks sayar………….
Reply	Brown permalink	16/12/2011 15:42	I can’t see myanmar font properly. which font i need to install ?
Reply	lettwebaw permalink*	16/12/2011 16:58	Just Zawgyi one. If you’re using Firefox browser, you will have to change some settings to see it. From Options > Content Window you will need to change Default font to Zawgyi One.
Reply	Brown permalink	17/12/2011 12:58	Thank u so much sayar, I already done it.
htut aung permalink	20/12/2011 19:22	Dear, Sir
May i know your email address please,,,
Reply	Carrina permalink	20/12/2011 19:53	ဆရာ
အချစ်ကို ငွေတွေ ဂုဏ်ပကာသနတွေနှင့်ယှဉ်လာရင် နှလုံးသားကိုတော့ ငယ်ရွယ်သူမို့ဦးစားပေးချင်တယ်…မျိုးရိုးအရဆိုရင် ပေးစားသူကိုဘဲယူရတယ်..သူတို့ဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းရတယ် ..ခု သမိးယူရမဲ့သူက ပါရဂူပါဆရာ..သမီးအသက်က၁၈ရှိပါသေးတယ်..သမီးလဲ သူ့အပေါ်သံယောဇဉ်တော့ရှိပါတယ်..သမီးက တူတူမနေဘူးပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပြောစကားနဲ့တင် တူတူနေရမှာကြောက်နေတတ်သူပါ..သူကတော့ တလ၅ရက်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်..ဘာလုပ်သင့်သလဲဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	20/12/2011 21:27	ဘာကို ကြောက်နေတာလဲဆိုတာ သိရမှ ဖြေရှင်းပေးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
Reply	ကောင်ကြီး permalink	27/02/2012 18:32	အဟတ်..
1234 permalink	31/12/2011 17:49	Sir I wanna know about IUD details.Who uses IUD can make masturbation?How much does it cost if uses?If 20yrs,can start to use it?How can we know it’s surely set up inside or not?Cuz if it’s not surely set up,can get pregnancy.Thanks sir
Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 02:12	ပထမဆုံး ပြန်မေးရမှာက အိမ်ထောင်သည်မို့လို့ အိုင်ယူဒီ သုံးဖို့ စိတ်ကူးတာပါလားလို့ပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိမှာထက် HIV အပါအ၀င် တခြား လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံကို ကာကွယ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၂၀ နဲ့ အိုင်ယူဒီ သုံးမယ်ဆိုလို့ ပြန်မေးရတာပါ။
Reply	awaji permalink	03/01/2012 00:24	ဆရာကိုမေးပါရစေ။ ကျွန်တော်မိန်းမရတာတစ်လကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်လည်းမရှိအေးအေးဆေးဆေးဆိုတော့ တစ်နေ့ကို သုံးခါ မှလေးခါအထိ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆရာရေ အခုတစ်လော လိင်ဆက်ဆံရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ တစ်နေ့ နှစ်ကြီမ် ၊ တစ်ခါတစ်လေတစ်ကြီမ် တည်းဆက်ဆံတာတောင်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့ လိင်အင်္ဂါက အပြည့်အ၀ မမာလာတော့လို့ပါဆရာ။ အခုတစ်လောဆို လိင်ဆက်ဆံနေရင်နဲ့ကျွန်တော့အင်္ဂါ ကပျော့သွားပြီးဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော့မိန်းမနဲ့က လိင်ကိစ္စမှာပွင့်လင်းကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ကမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဗိုင်ရာဂရာတို့ဘာတို့လည်းမသောက်ချင်ဘူး။ တစ်ခြားနည်း (သို့) အကြံပေးပါအုံး ဆရာ။ မိန်းမကိုလည်းအရမ်းအားနာနေပြီ။ ကျွန်တော့ကိုကူညီပါအုံး။
Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 00:38	အဲဗျ… အသက် ၂၆ နှစ်နဲ့ အဲလောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်မျိုးလည်း မလျှောက်တတ်တော့ဘူး။ တစ်နေ့ကို သုံးခါ၊ လေးခါ ဆက်တိုက်က ဘယ်နှရက်လောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နှလလောက် လုပ်ခဲ့လို့များပါလိမ့်။ နည်းနည်း နားကြည့်ပါလား။ တစ်ပတ်လောက် နားကြည့်ပြီး ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။ ရပြီဆိုရင်လည်း သုံးခါ-လေးခါတော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ချက်က တခြား ဘာဆေးတွေများ သောက်နေတာ ရှိသလဲ။ အားဆေးဆိုတာမျိုးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား ရောဂါ တစ်ခုခုအတွက် သောက်နေတာမျိုးတွေရော ရှိသေးလား။ အဲဒါတွေ မဟုတ်ရင်တော့ နည်းနည်း ရိုးအီလာလို့ ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ကြောင့်ပေါ့။ နားကြည့်လိုက်ပါလေ။
Reply	ko htet permalink	31/01/2012 13:34	if u takearest for two day ur boy will hard again like rock and ur sperm is like water.ok donot take extreme just middle ok
Reply	awaji permalink	03/01/2012 00:28	ကျန်နေခဲ့လို့… ကျွန်တော့်အသက်က ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ မိန်းမနဲ့လည်း အသက် အရွယ်တူပါပဲ။
Reply	awaji permalink	03/01/2012 01:19	ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ အားဆေးက Ginsomin ပဲသောက်ပါတယ်။ သွေးတိုးကျဆေးတော့နေ့တိုင်းသောက်နေရပါတယ်.. Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 01:27	အဖြေထွက်သွားပါပြီ။ သွေးတိုးကျဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပဲလို့တောင် တိတိကျကျ ပြောမယ်ဆို ပြောလို့ရပါတယ်။ ၂၆ နှစ်နဲ့ သွေးကျဆေး သောက်နေရတယ်၊ နာမည်မှာလည်း awaji (အ၀ကြီး)လို့ ရေးထားတယ်ဆိုတော့ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသွားတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ချဖို့ အားထုတ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သွေးတိုးတာရဲ့ အရင်းခံကို ရှာဖွေရမှာပါ။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ချတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန် လုပ်တာများနဲ့ ထိန်းသွားသင့်ပါတယ်။ ၂၆ နှစ်ဆိုတာ အင်မတန် ငယ်ပါသေးတယ်။ အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်ပါတယ်။ သည်အရွယ်မှာ အဲလို ဖြစ်နေတာ လုံးဝ ကောင်းတဲ့ အလားအလာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူရဲ့ အကူအညီကို အမြန်ဆုံး ရယူသင့်ပါပြီခင်ဗျား။
အားဆေးတွေကိုလည်း နားလည်တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် မသောက်စေချင်ပါဘူး။ ကြော်ငြာကောင်းတိုင်းလည်း ကိုယ်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်တတ်တာကို သတိချပ်သင့်ကြောင်းပါ။
Reply	awaji permalink	03/01/2012 01:46	Reply လုပ်တာအရမ်းမြန်လို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်က ၃ ။ ၄ ရက်လောက်စောင့်ရမယ်ထင်နေတာ။ ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။ ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပါမယ်။ awaji က company နာမည် ပါခင်ဗျာ.. လေးစားလျက်…..
Reply	awaji permalink	03/01/2012 01:50	အဲ…. အသက်က ၂၆ ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်က ပေါင် ၁၄၀ ရှိပါတယ်ဆရာ… အရပ်က ၅ပေ ၄ လက်မ… နည်းနည်းတော့ဝနေတယ်… Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 02:24	ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ၅ ပေ ၄ လက်မနဲ့ ၂၆ နှစ်အရွယ်ဟာ သေရောကျေရော ပေါင် ၁၂၀ လောက်ပဲ ရှိသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားနဲ့ အရပ်အတူတူပဲ။ အလေးချိန်က ၁၅၅ ဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်က ၅၅ နှစ်ထဲကို ၀င်လာတာ တစ်လကျော်နေပြီဆိုတော့ လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ၁၃၀ လောက်ပဲ ရှိသင့်တာမို့ အသည်းအသန် လမ်းလျှောက်နေတယ်။ ကျွန်တော် ခင်ဗျာ့အရွယ်က ၁၁၀ ခင်ဗျ။
Reply	1234 permalink	03/01/2012 10:23	HIV အပါအ၀င် တခြား လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံကတော့..ကျွန်တော်ကလိင်အပျော်အပါးမက်မောတဲ့လူ၁ယောက်မဟုတ်ပါဖူး။ပြီးတော့ဆေးလိပ်၊အရက်၊ကွမ်းလည်းမစားတတ်ပါဖူး။ခုလိုမေးရတာကလည်း၃လမှ၁ခါဆက်ဆံရတာပါ၊ဒီတော့emergency pills တွေမသုံးစေချင်ဖူးဗျာ။တွဲလာတာလည်း၃နှစ်ရှိပြီးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြသူတွေပါ။ဒီIUDသုံးတဲ့သူဟာmasturbation လုပ်လို့ရပါသလား၊ဒီIUDကကိုယ့်အထဲမှာသေချာထည့်ထားမထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။သေချာထည့်မထားရင်pregnent မှာဆိုးလို့ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော့ရဲ့အပေါ်မေးခွန်းတွေဖြေကြားပေးပါ
Reply	lettwebaw permalink*	03/01/2012 13:42	လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ပြောတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်တစ်ဖက်တည်းလို့ မြင်တာကို အံ့သြ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဲဒီ့ သုံးလ တစ်ကြိမ် ဆက်ဆံတဲ့ မိန်းကလေးမှာ ဘာပိုးမှ မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံထားပါသလဲ။ အသည်းရောင် ဘီပိုး၊ စီပိုးရော ရှိမနေနိုင်ဘူးလားဆိုတာလောက်တော့ စဉ်းစားသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကို နားလည်ပါတယ်။ သို့သော် သည်ခေတ်မှာ မွေးကင်းစ ကလေးမှာတောင် ပိုးတစ်ခုခု ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိလောက် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သုံးလတစ်ခါ ဆက်ဆံသူက အိုင်ယူဒီအထိ အတွေးချော်မယ့်အစား ကွန်ဒုံးကို သုံးတာသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တော်လောက်ပါပြီ။ ထပ်မေးလည်း ဖြေစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
Reply	1234 permalink	09/01/2012 17:09	အခုလိုစိတ်ရှည်စွာပြန်ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
1234 permalink	03/01/2012 10:26	Sir, if you know the doc who make for IUD,please let me know.If she uses,can i ejaculate inside?Thanks anyway Sir.Wish best wishes
Reply	Ng Gy! permalink	04/01/2012 00:16	လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမြန်၂ပြီးသွားတာဘာကြောင့်ပါလဲ မြန်၂မပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Reply	kokoR permalink	04/01/2012 23:54	ဆရာ ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပါရစေ။ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်ပါ။ကောင်မလေးကို ဆေးရုံတက်ရင်းတွေ့တာပါ။သူက စင်တင်တေးဂီတ မှာ မော်ဒယ်လျှောက်ပါတယ်။သိသိကြီးနဲ့ အပျော်ပဲဆိုပြီးတွဲတာ တနှစ်လောက်ကြာပါတယ်။အတူလည်းနေဖြစ်ပါတယ်။သူပြန်သွားတော့ သူ့ကိုပဲလွမ်းပါတယ် တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့တွဲလည်း သူ့ပဲမြင်နေတယ်။သူက အခုစင်တင်တော့မလုပ်တော့ပါဘူး။သူ့အိမ်မှာ အေးဆေးနေနေတယ်။ကျွန်တော်သူနဲ့အမြဲတမ်းနေချင်တယ်။ဒါပေမယ့် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ မိဘတွေက ဘယ်လိုမှ သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် အလုပ်သင်ဆင်းရင် သူရှိတဲ့မြို့ကို ဆင်းပြီး သူနဲ့ပြန်တွဲရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိတယ်။ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးစိတ်က နှစ်ခွဖြစ်နေတယ်။သူက ရှစ်တန်းတောင်မအောင်ပါဘူး။ကျောင်းပြန်တက်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် မတက်ချင်ဘူးတဲ့သူက။ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ အကြံပေးကြပါ။ကျွန်တော့်အိမ်က ချမ်းသာပါတယ်။အဖေကလည်း ရာထူးကြီးပါတယ်။ကောင်မလေးက မိဘမဲ့လေးပါ။သူ့အဒေါ်တွေအိမ်မှာနေတာပါ။သူက ကျွန်တော့်နဲ့တွဲတုန်းက သစ္စာရှိပါတယ်။စိတ်ရင်းလဲကောင်းပါတယ်။သူသာဘွဲ့ရတယောက်ဆိုချက်ချင်းယူမှာပါ။အခုဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲအကြံပေးပါဦး။
Reply	ko yeဲ permalink	07/01/2012 19:01	မင်္ဂလာပါ ဆ၇ာ ။သိချင်တာ လေး တခု ၇ှိလို့ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေ၇ တာ တခု ၇ှိပါ တယ်။သွေးဆင်းပြီး (၇)၇က်။သွေး မဆင်းခင်(၇)ရက် ချစ်တင်းနှော၇င် ကိုယ် ၀န်မ၇နှိင်ဘူးတဲ့။တချိူ့ ကြတော့လဲ အဲ့၇က်တွေမှာ ချစ်တင်းနှော ၇င် ကိုယ်ဝန်ရနှိင်တယ်တဲ့။ဘယ်ဟာ က မှန်သလဲဆို တာ သိချင်ပါ တယ် ဆရာ။
Reply	lettwebaw permalink*	07/01/2012 20:07	ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သည်ဘလော့(ဂ်)ထဲမှာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျား။ Link ကို မပေးတာက ၀မ်းနှုတ်ဆေးကိုချည်းပဲ အားကိုးနေပြီး ကိုယ်တိုင် ညှစ်ချင်စိတ်ကလေး ပပျောက် ဆိတ်သုဉ်းသွားမှာ စိုးလို့ပါပဲ။ သြော်… စေတနာ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သည်မေးခွန်းကို ကြားချောင်က ၀င်ဖြေပေးမယ့် comment ရေးသူများကိုလည်း တစ်လက်စတည်း မှာလိုက်ပါတယ်နော်။ သည်မေးခွန်းကို တိုက်ရိုက်ပြန်ဖြေပေးတဲ့ ဘယ်ကွန်မန့်ကိုမှ ကျွန်တော်က အများပြည်သူ ဖတ်ရအောင် အတည်ပြုပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
Reply	kokoR permalink	08/01/2012 10:05	ဆရာ ခင်ဗျား ကျွန်တော့ကို အကြံလေးပေးပါဦး။လေးစားစွာဖြင့်
Reply	lettwebaw permalink*	08/01/2012 10:14	အတိုဆုံး အရှင်းဆုံး ပြောရင်တော့ ရေရှည်မှာ (ဆိုလိုတာက နောက် ၅ နှစ် နောက်ပိုင်းမှာ) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကို တွေ့လာရဖို့က ၈၅% မက သေချာနေပါတယ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်ပါရစေ။
Reply	superlion permalink	08/01/2012 20:20	ဆရာ မရိုမသေမေးမိတယ်ဆိုရင် ဦးစွာတောင်းပန်ပါတယ် ။
အကြောင်းကတော့ -င်္ဂါ ထိပ်က အရေခွံက ရှိသင့်သည်ထက်ပိုရှည်နေသောကြောင့် အခက်တွေ့နေမိပါသည် ကုလားရှင်ပြု သလို ရှင်ပြုခြင်ပါသည် ။သို့သော်ဗမာစစ်စစ် ဖြစ်နေသဖြင့် ဘယ်လိုဆေးခန်း ဆေးရုံမှာ ဘယ်လိုပြောပီး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံဥာဏ် ပေးစေလိုပါသည်။
အရွယ်ရောက်လူပျိုတယောက်ဖြစ်နေသဖြင့် အလွန်ရှက်တတ်ပါသည်။ နည်းလမ်းကောင်း ပေးပါရန် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Reply	lettwebaw permalink*	08/01/2012 22:14	(၁) “ရှိသင့်သည်ထက် ပိုရှည်နေ”လို့ ဘယ်သူက ပြောပါသလဲ။ ဘယ်လောက်က “ရှိသင့်”တဲ့ အရွယ်အစားပါလဲ။ ဘယ်နှလက္မ၊ သို့မဟုတ် ဘယ်နှပေအထိများ ပိုရှည်နေပါသလဲ။
(၂) ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့ စာအုပ်ထဲမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၃) ကုလားလို ရှင်ပြုတာကို တခြား လူမျိုး မလုပ်ရဟု ဘယ်မှာမှ ပြဋ္ဌာန်းမထားပါ။ လုပ်ချင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ အသေးစား ခွဲစိတ်မှုဖြစ်တာမို့ ဘယ်ဆရာဝန်မဆို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သန့်ရှင်းဖို့ပါပဲ။
(၄) အလွန်ရှက်တတ်ခြင်းက အသက်ကိုပါ ရန်ရှာတဲ့အထိ ဒုက္ခကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ “သည်ကိစ္စတွေဟာ ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်း သိသင့်တဲ့ကိစ္စတွေပါ”ဆိုတဲ့စကားကို တစ်နေ့ကို မနက် အိပ်ရာထတွင် တစ်ကြိမ်၊ နေ့လည် ထမင်းစားခါနီးတွင် တစ်ကြိမ်၊ ညစာ ထမင်းစားခါနီးတွင် တစ်ကြိမ်၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် တစ်ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း လေးကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် သက်စေ့အရေအတွက်ဖြင့် ရက်ပေါင်း ၅၀ တိတိ ရွတ်ဆိုနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Reply	superlion permalink	12/01/2012 21:53	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ပြန်ဖြေပေးတဲ့အတွက်။ကျနော် သိစေလိုတာက အရေခွံ ထိပ်ဖျား ကိုပြောတာပါ။ငှက်ပြောဖူး ပုံဖြစ်နေတယ် မိန်းမရရင် အခက်ဖြစ်နေမှာမို့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပီး ဖြတ်ရင် သင့်မသင့် ပါ။
lettwebaw permalink*	12/01/2012 22:09	ထပ်မေးပါရစေဦး။ အဲဒါကြောင့် “မိန်းမရရင် အခက်ဖြစ်နေမှာ”လို့ ဘယ်သူက ပြောပါသလဲ။ ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာများ ဖတ်ဖူးပါသလဲခင်ဗျာ။
ko yeဲ permalink	09/01/2012 17:54	ဆ၇ာတင်ထားပြီး သားဆို ၇င် တော့ကျွန်တော်၇ှာ ဖတ်လိုက်ပါ့ မယ်ဆ၇ာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……
Reply	pyaepyae permalink	12/01/2012 18:27	ဆ၇ာခင်ဗျား မြန်မာအယူ အဆမှာ သူအဂ်ါကို ပါစပ်နဲ့ ရက်ရင် ငရဲကြီးတယ် ဆိုတာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာ
Reply	lettwebaw permalink*	12/01/2012 22:08	လာမေးတဲ့ နေရာမှားနေတယ်။ ဒါ ဘုန်းကြီးတွေကို မေးလျှောက်ရမယ့် မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Reply	ကောင်ကြီး permalink	27/02/2012 18:26	ရီလိုက်ရတာ ဆရာ .ဟုတ် ပါ့ မေးတာကလဲ..
Ye Ye permalink	15/03/2012 18:55	အင်းတော်တော် ရယ်ရတာပဲနော်ဆရာ
ကျော်စွာ permalink	14/01/2012 18:32	တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်..စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုဘဝင်မကျဖြစ်နေလို့ပါ ..ကျွန်တော်က ၂၄ နှစ်ထဲရောက်ပါပြီ…
ဘွဲ့လည်း ရပြီးပါပြီ…ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှလဲ ဒီအရွယ်ထိ စွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး…ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဖိုမသဘာဝအရ စိတ်ဝင်စားရုံလောက်ပဲရှိခဲ့ဖူးတာပါ..ဘယ်ဇာတ်လမ်းမှ မစခဲ့ပါဘူး..အခုမှ ကျွန်တော် ကျောင်းပြီးလို့
နယ်မှာ ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ တာဝန်ကျတာပါ.. အဲ့ဒီမြို့က လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားထိုင်ရင်းနဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သမီးကိုမှ စိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်..ခက်တာက အဲ့ဒီကောင်မလေး က ၇ တန်းပဲရှိပါသေးတယ်..
အဲ့ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပြောရင် ပိုးရမှာခက်နေပါတယ်…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ပြန်ဆင်ခြင်ပါတယ်..
ဒီတော့ ၇တန်းအရွယ် မိန်းကလေးကို စွဲလမ်းတာ ဖြစ်သင့်ပါသလား…ကျွန်တော့အထင် အသက် ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ်သာရှိဦးမယ်ထင်ပါတယ်… ကျွန်တော့ကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်နေပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုနဲ့ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ရင်း ဘားမှရှေ့ဆက်မတက်သေးပါဘူး…
Reply	lettwebaw permalink*	14/01/2012 18:51	ဘုရား… ဘုရား… အဲဒါ ကလေးသူငယ်မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်မှုအထိ ရောက်သွားနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ စောင့်နိုင်ရင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ စောင့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆို တရားဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ သိပ်များများ စောင့်ရမှာမှ မဟုတ်တာ။ နောက် ၄-၅ နှစ်လေးပဲဟာ။ Reply	STH lay permalink	15/01/2012 22:35	ဆရာ အိပ်ပျော်နေရင်းနဲ့ သုတ်လွှတ်တာ ဘာလို့လဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်
တစ်နေ့တစ်ခါ masturbation လုပ်ရင်တော့ မဖြစ်ပါဘုး။ တစ်ပတ်ကျော်လောက် masturbation မလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ အိပ်ပျော်နေစဉ် သုတ်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ရောဂါလား
ဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ masturbation မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာ အိပ်ပျော်နေစဉ် အဲ့လို
မဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါသလားဆရာ။ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
Reply	lettwebaw permalink*	16/01/2012 06:53	ရောဂါ မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်စိတ်ပြင်းထန်လွန်းနေတဲ့သဘောသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့”စာအုပ်ထဲမှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်ပေးပါလား ခင်ဗျား။
Reply	ကျော်စွာ permalink	16/01/2012 18:22	ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျား ၊ အဲ့ ဒီလိုတော့ ကျွန်တော်လဲအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး.. ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် ဒီမြို့ ကနေဝေးတဲ့ တစ်ခြားမြို့ မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်.. ဒီလကုန်ရင်ပြောင်းတော့မယ်..တကယ်တော့ အခုနေတဲ့နေရာက ကျွန်တော့ ဇာတိမြို့ပါ..တော်တော်ကြာမှပဲ ပြန်လာတော့မယ်.. ၇နှစ် ၈နှစ်လောက် ထွက်သွားမယ်လို့တော့ စိတ်ကူးထားတယ်.. အခုလို သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ….Thank you
Reply	မေးစရာရှိသူ permalink	17/01/2012 13:52	ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမဲ့ gtalk လေး တခု gmail တခုလောက်ပေးပါဆရာ…ကျနော်ဆွေးနွေးစရာလေးရှိလို့ပါ…ကျနော့် gtalk က ghostfighter199@ ပါကျေးဇူးပြုပြီးအပ်ပေးပါဗျာ
Reply	အရေးကြီးသူ permalink	19/01/2012 11:12	ဆရာ ကျနော့်မိန်းခလေးမှာလွန်ခဲတဲ၁နှစ်ကpregnantရှိခဲဘူးလို့abortedလုပ်ခဲဘူးပါတယ် လုပ်စဉ်က တားဆေးတွေ့မသုံးနဲတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ် တားဆေးdeviceကိုဘဲသုံးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်
အဲဒီထဲကdevice လဲမသုံးဖြစ်ဘူး ရက်နဲရှောင်တယ် မရှောင်နိုင်ရင်ကွန်ဒုန်သုံးပါတယ် ခုဆို၁နှစ်လောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ချင်တော့ ခုတလောမှာ ကွန်ဒုန်ပေါက်သွားတယ် အရင်ကဆို emergency ဆေးတွေသုံးဖြစ်တယ် aborted လုပ်တုန်းကဆေးမသုံးနဲလို့ပြောလိုက်လို့ အခုမသုံးရဲဘူးဖြစ်နေတယ် ဒီတိုင်းလဲမနေရဲဘူး အရင်ကတော့ ecc2 and penorit တို့သုံးဖြစ်ခဲပါတယ် အခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာကူညီပါ အချိန်မကျော်ခင်လေးဆေးမှီအောင်လို့ပါ အလယ်ကကောင်လဲဖြစ်နေလို့ပါဆရာ
Reply	Moe yan Tun permalink	21/01/2012 15:32	Thanks for shearing ur knowledge !!!!
Reply	Ko Maung Hla permalink	25/01/2012 00:32	ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အသက် ၂၇ နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်မိန်းမယူထားတာလေးလရှိပါပြီ။ ကျွန်တော့ အင်္ဂါက အရေပြားနဲ့ငုံနေပါတယ်။
အရည်ကြည်ဖုလေးတွေပေါက်ပါတယ်။ နည်းနည်းများပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလည်းဆရာ။
စဖြစ်တာက ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ စဖြစ်တုန်းက နီနီဖုသေးသေးလေးတွေ။ နဲနဲလည်းယားသလိုလို နာသလိုလိုနဲ့။
တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့သူ့ဘာသာသူပျောက်သွားတယ်။ နောက် ၆
အမြဲတမ်းတော့မဖြစ်ပါဘူး။ ၆ လ တစ်ခါ၊ ၈ လတစ်ခါဖြစ်နေတာကနေ အခုတစ်လော
တစ်လတည်းကို ၃၊၄ ခါလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေကိုရေဆေးလိုက်ရင်
စမ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဆေးမှလည်းမသောက်ဘူးပါ။
ဆရာဝန်နဲ့လည်းမပြဘူးပါဘူးဆရာ။ သူ့ဘာသာသူပျောက်သွားလို့။ ပျောက်တော့လည်း နှစ်ရက်လောက်နဲ့ ပျောက်သွားတယ်။ အခုတစ်လော
ပြန်ပြန်ဖြစ်နေလို့ ရောဂါလားဆရာ။ မိန်းမကိုကူးနိုင်ပါသလားဆရာ။
ကလေးယူရင်ကော ရောဂါတွေဘာတွေကလေးဆီကူးပါသလား။ ကုသလို့ကောရပါသလားဆရာ။
Reply	lettwebaw permalink*	25/01/2012 09:28	ကျွန်တော် ဆရာဝန် မဟုတ်တဲ့အတွက် အဲဒါကို မဖြေတတ်ပါဘူးခင်ဗျား။ အထွေထွေကု ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်းပါ။
Reply	နေဂျူးရင့် permalink	26/01/2012 21:42	နေဂျူး ဆရာကျွန်တော်ပြသနာကိုဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။။ကျွန်တော်တတိုတိုဘဲပြောပါရစေ။။ကျွန်တော်ခု21နှစ်ပါပြီကျွန်တော်ပစ္စည်းကတော့3နှစ်သားလောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ….။။သူငယ်ချင်းတွေပြောသလိုလက်တိုက်တော့လည်းမထူးပါဘူးဆရာ….။။ကျွန်တော်မိန်းမယူလို့တောင်မရဖြစ်နေမှာစိုးနေပါတယ်ဆရာ…။။ခုထိတော့ဘာအထိတွေ့မှမရှိသေးပါဘူးဆရာ..။ဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ……….။။
Reply	lettwebaw permalink*	29/01/2012 22:27	သုံးနှစ်သားလောက်ဆိုရင်တော့ တစ်လက်မလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အတိုင်းအထွာနဲ့ ပြောကြည့်ပါလား။ တင်းမာနေချိန်မှာ ၄ လက်မ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုရင် အားရစရာ သိပ်မကောင်းလှပေမယ့် သိပ်အခြေအနေ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဆေး၊ ဘာနည်းမှာ မရှိဘူးလို့ ယတိပြတ် ပြောလိုက်ပါရစေ။ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒါတွေက ညာတာတွေ၊ လူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ လူပုလေးတွေ အရပ်ရှည်အောင် လုပ်လို့ မရတော့တာကို လက်ခံရင် ဒါကိုလည်း ဘ၀က ပေးထားတဲ့ ရှိရင်းစွဲကနေ ပြောင်းသွားအောင် မကြိုးစားပါနဲ့လို့ အလေးအနက် မှာချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Reply	minaunghlaing999 permalink	29/01/2012 20:59	ဆရာခင်ဗျား နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါး နဲ့ နာပါ ခင်ဗျား…ကျတော် အသက် 23 နစ် ၇ှိပါပီကျောင်းသား တဦး ပါခင်ဗျာ ပြသနာ က ကျ တော် အလိုလို နေရင်းသုတ်လွှတ် လွှတ် တတ် နေပါသည် ခင်ဗျား မ၇ိုသေ စကားပါ
အထူးသဖြင့် ကျတော် အပြာ ကား တွေ ကြည့် ၇င်းတန်းလန်း လွှတ် ဖြစ်ဖြစ်နေတတ် ပါသည် ခင်ဗျား ထို ဇာတ်ကားတွေ မကြည့် ဘူးမကြည့် ဘူး ဆို ပီး ကျတော် ကြည့် ကြည့် ဖြစ်သွားပါသည်…ကြည့် ရင်းတန်းလန်း လွှတ်မိ ပါသည်…..ကျတော် အ၇င် က အိမ်မက်သုတ် လွှတ်မျိုး လည်းခဏခဏ ဖြစ်ပါသည်….ယခု နောက်ပိုင်းတော့ အဖြစ်ကျဲ သွားပါသည်….ကျတော်သိချင်တာက .ကျတော့် အသက်အ၇ွယ် နှင့်ေ၇ာဂါ များ ဖြစ်နေပါပီလား ဆရာ…..အပြာ ကား တွေဟာ ကျတော့် တို့ ကို အတော်ဖျက်ဆီး ပါသည်။ ကြည့် ပီးတိုင်း လည်း …..ငါ ကြည့်မိပြန်ပီ ဆိုပီး…..နောင်တ ရပြန် ပါ သည်…….သို့ သော်ခွေးမြီး ကောက်က ကျည်တောက်ပဲ စွတ်မိပြန်ပါသည်ဆရာ…ထိုဇာတ်ကားများ မကြည့် လျှင်တော့အလိုလို နေရင်း မလွှတ်တတ်ပါ ..ဆရာတို့ အောင်မြင်ကြီးပွားပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပါသည်….
Reply	lettwebaw permalink*	29/01/2012 22:30	ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်စိတ်နိုးကြား တက်ကြွလွန်းနေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သတိထားပြီး လိုသလို ထိန်းတာကို လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဘယ်အချိန်မှာ သိပ်တက်ကြွသွားသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် အဲဒီ့အချိန်ကျရင် စိတ်တအား တက်မလာအောင် ထိန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ရှာကြည့်ပြီး စိတ်ကို ထိန်းယူပါ။ ပြီးတော့ စိတ်ပြန်တက်လာ၊ ပြန်ထိန်းနဲ့ လေ့ကျင့်သွားသင့်ပါတယ်။ အပြာကားတွေမကြည့်ချင်တော့ရင် အားကစားတစ်ခုခုကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ကြည့်ပါလို့လည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Reply	မြတ်နိုးသူ permalink	30/01/2012 12:58	ဆရာ ကျနော်တခုလောက်မေးပါရစေ ဖွားဖက်တော် ကြီးလာအောင်လုပ်လို.ရတဲ့ နည်းများရှိပါသလာ?Porn Site တွေးမှာ တော့ ပလူပျံနေအောင်ကြော်ငြာ တွေးတွေ့ဖူပါသည် အဲတာတွေးဟာ အမှန်တော့ ထိရောက်မှရှိပါသလာ?ဘိုမတွေးနဲ. တွဲရင်တော်တော်အားငယ်ရသလို:P
Club,Disco တွေးသွားရင်လဲ မျက်နှာငယ်ရလွန်းလို.ပါ။အကယ်၍ဆေးရှိတယ်ဆိုရင် ညွန်ပြပေပါအုံး
Thz Q4your time!
Reply	lettwebaw permalink*	30/01/2012 15:21	ခင်ဗျား ကွန်မန့်ရဲ့ အပေါ်က ကွန်မန့်နှစ်ခုကျော်မှာပဲ ဒါကို ဖြေပြီးပါပြီဗျာ။
Reply	saung hnin permalink	04/02/2012 23:11	ဆရာ့ ဘလော့တွေကို ဒီနေ့မှ ၀င်ဖတ်မိဖြစ်တာပါဆရာ…
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဆရာ့ ကို မေးချင်တာတွေ ပေါ်လာလို့ .. ဆရာ *သေချာ*လေးဖြေပေးပါနော်…
(ယောကျာင်္းလေး တွေက အရမ်းချစ်တဲ့မိန်းကလေးရှိလဲ ဖောက်ပြန်မှာဘဲလားဟင်……
ဘာမဆို သူတို့ အလို သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဘဲနေပေးတာတောင်မှ ပေါ့ …………………..
သူတို့ မဖောက်ပြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ အကြံပေးပါဦးနော်………
သမီးမှာက သမီးချစ်သူရှိပါတယ်……..သူ့ ကိုအရမ်းအရမ်းကိုစိုးရီမ်လို့ ပါ)
သမီး က သမီးချစ်သူ ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်….. သူလဲသမီးကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်….
သူနဲ့သမီးနဲ့လဲ လက်ထပ်ဖို့ အထ်ိတိုင်ပင်ထားပါတယ်……. သူနဲ့သမီးနဲ့ နောင်အနာဂတ်အိမ်လေးအတွက်
တွေးပြိးကြည်နူးကြရပါတယ်……. သမီး သူ့ ကိုမေးဖူးပါတယ်….သမီးက လွဲပြီး ဘယ်သူ့ ကိုမှ
စိတ်မ၀င်စားဘူးတဲ့…..သူ့ မေမေ နဲ့ သမီး နဲ့ဘဲ ဘ၀မှာအရေးကြီးတယ်တဲ့… သူအလုပ်တွေ ကြိုးစားနေတာ
သမီးအတွက်ပါတဲ့….. သူစင်ကာပူလာမယ်တဲ့ .(သမီူးက စင်ကာပူမှာကျောင်းတတ်နေလို့ ပါ)
သူနဲ့ သမီးနဲ့ ၂ ညလောက် တူတူ အိပ်ဖူးပါတယ်……ခုဆို ၂လပြည့်တော့မယ်….. သမိီးသူ့ ကိုမေးပါတယ်… သမီးမရှိရင် တခြားသူဆီက တောင်းမှာလားလို့ ……… သူက အဲ့လို မိန်းမ ကိစ္စတွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးစိတ်မပူဖို့ ပြောပါတယ်….. သူက သူ့ မေမေ ကို အရမ်းချစ်တယ်……သူ့ မေမေက ပြောတယ်တဲ့ ကိုယ်တာဝန်မယူဘဲ ဘယ်သားသမီးကိုမှ မစော်ကားရဘူးလို့ ပြောတယ်တဲ့……….ခုတော့ သူတာဝန်ယူရမယ့် သူရှိလာပြီတဲ့….. သူ ထာဝရတာဝန်ယူသွားမှာပါလို့ခုထိပြောနေတုန်းပါဘဲ……….. သူ့ ကို ယုံကြည်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် သမီး ဘ၀ က သူ့ ကို ပေးခဲ့ရပြီဆိုတော့ စိတ်ပူမိပါတယ်………. အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိ မရှုပ်အောင် ပေါ့ ………… သူ သမီးအပေါ်ထားတဲစိတ်လေးကို ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် သမီးကို အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်………သူက လက်ထပ်ပြီးရင် သားလေး နှစ်ယောက်လောက်လိုချင်တယ်တဲ့….သမီးကခွဲမွေးချင်သူပါ………..သူက ရိုးရိုးဘဲမွေးပါတဲ့….သူက ခွဲမွေးတာကို အားမပေးပါဘူး……….နှစ်ယောက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ နှစ်ခါခွဲရမှာပေါ့နော်….. ခွဲတာက နောက်ဆက်တွဲတွေ မကောင်းဘူးတဲ့ …ရိုးရိုးဘဲမွေးပေးပါတဲ့………..သမီးလဲသဘောမတူချင်တူချင်နဲ့ တူပေးခဲ့ပါတယ်………နောက်တော့ သမီးသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်.ကလေးမွေးတယ်ဆိုတာ သေမင်းခံတွင်းဝကို လမ်းလျှောက်တာဘဲလို့ ……… ကြိုးစားပေးပါ့ မယ်လို့ ..ပြီးတော့နာမှာကြောက်တယ်လို့ ..နောက် မွေးလမ်းကြောင်းလည်းကျယ်လာတယ်လို့ သူ့ ကိုလဲအဲ့လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သမီးပြောပါတယ်……. သူနောက်တော့ သမီးမခံနိုင်မှာစိုးတာနဲ့ သမီးကို သနားတာနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဘဲယူပါတော့မယ်တဲ့….ခွဲမွေးလိုက်ပါလို့ သူက သဘောတူလိုက်ပါတယ်…..နောက်ပြီးသူက သမီးမိဘတွေ အတွက်လဲ စဉ်းစားပေးပါတယ်…. တစ်ချိန်က မေမေက ခါ်းခါးသီးသီး ပြောလိုက်လို့… အမြင်မကြည်ပေမယ့်………သမီးနဲ့အိမ်ထောင်ကျရင် သူက သမီး မိဘ အိမ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေပြီး သမီးမိဘတွေကို ကြည့်ပေးရမယ်လို့ သူပြောပါတယ်………… သူက တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းအရမ်းမြင့်ပါတယ်…..
(သမီး ပိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး) သူက သမီးပြောပြရုံနဲ့ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ သမီး ဖေဖေ စိတ်ဓါတ်… မေမေ့စိတ်ဓါတ်တွေကို ပါသူ ကွက်တိနီးပါးပြောနိုင်ပါတယ်ဆရာ……………နောက် သမီးက အရမ်းအာူးငယ်တတ်ပါတယ်………… သူ့ ကိုလဲအရမ်းအားကိုးတယ်ဆိုတာ သူသိပါတယ်…………
သမီး ရင်ထဲခံစားနေတာတွေ ထုတ်မပြောရင်တောင် သူက သမီး စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ဘယ်ပုံဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ် ဆရာ………………သူက စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားပါတယ်….. နောက် အမေမကြိုက်တာ ကိုသူမလုပ်ဘူး……. သမီးကိုလဲ အရမ်းကိုချစ်တယ်…….. ဒါပေမယ့် ဆရာရယ်…..
သမီးကြောက်တာက သူရှုပ်မှာကိုကြောက်တာပါ……… တစ်ခြားကိစ္စတွေကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် မိန်းမ နဲ့ပါတ်သတ်လာရင်တော့ သမီးခံနိူင်ရည်မရှိပါဘူး………………..သူအခုမရှုပ်ပါဘူးဆရာ…. သူက သမီးကိုလဲအရမ်း ဂရုစိုက်လာပါတယ်… အရင်ကထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်လာပါတယ်………
သမီး သူ့အကြောင်း…သူ့ စိတ်ဓါတ် ဘာလို့ ထဲ့ပြောလဲဆိုတော့ ဆရာ့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့ထဲ့ပြောမိတာပါ…ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ..ဆရာတို့ က ယောကျာင်္းလေး ခြင်းဘဲ… သူ့စိတ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတော့ မှန်းလို့ ရမှာပါနော်……………. သူ့ ကို လက်ထပ်ပြီးလဲ ခုလိုမရှုပ်စေဘဲ..
ဒီတိုင်းလေး ဖြစ်စေချင်လို့ ပါ…..သမီး ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြံပေးပါနော်………………….
နောက် ယောကျာင်္းလေး တွေက မိန်းမ ဘယ်လိုဆိုရင်ရှုပ်တတ်လဲဆိုတာလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ………
သမီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ရင်ဖွင့်တာလေးကို ဆရာကလဲ သေချာပေါက် အကြောင်းပြန်ပေးပါနော်……………………………… သမီးရဲ့စာလေးက ဆရာ့အတွက် minor ဖြစ်ပေမယ့်.
သမီးအတွက်တော့ အသက်တစ်မျှ အရေးကြီးလို့ ပါ……………………………………….သမီး email account ကိုတော့ ကျေးဇူးပြုပြီးမဖော်ပြပါနဲ့နော်……………………
Reply	Phuu Ngone permalink	10/02/2012 00:47	ဆရာရှင့်
ရိုသေလေးစားစွာနဲ့မေးပါရစေရှင်။သမီးအသက် ၂၄ရှိပါပြီ။သမီးကို့ဘာသာကိုယ်ပြီးတတ်နေတာနှစ်လလောက်ရှိပါပြီ erotic videosကြည့်ပြီးပွတ်နေလိုက်ရင်၁နာရီလောက်နေရင်ပြီးသွားပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကို၁၅မိနစ်လောက်နားနားပြီးလုပ်တိုင်းပြီးတာကြီးပါပဲ။သမီးချစ်သူနဲ့ကြတော့တကြိမ်၁၀မိနစ်လောက်သူပြီးသွားတာနဲ့သမီးထပ်မခံနိုင်တော့ပါဘူး.သူforeplay လုပ်တာကိုပဲသမီးသာယာပြီး ကျန်တာကိုသမီးစိတ်မပါပါဘူး။တခါမှလဲမပြီးဖူးပါဘူး.သမီးကို့ဟာကိုလုပ်တာကိုပဲပိုသဘောကျနေပါတတယ်သမီးတို့လက်ထပ်တော့မှာပါ သမီးအဖြစ်ကသာမန်လား တခုခုမှားယွင်းနေလားဆိုတာသိပါရစေဆရာ။အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ.
Reply	Ye Khaung permalink	19/02/2012 21:37	ဆရာခင်ဗျားအင်တာနက်မှာရေးထားတဲ့jelqအကြောင်းလေးနဲ့positive and negative effects များကိုဖြေကြားပေးပါခင်ဗျားthank you more than i can say.p.s with e-mail.
Reply	asw permalink	25/02/2012 21:35	အရမ်းကို ဗဟုသုတ ရခဲ့ပါတယ် ကျေးဇူးပါ ဆရာ
Reply	ကောင်ကြီး permalink	25/02/2012 21:51	ဆရာ ရိုသေစွာဖြင့် သိချင်တာလေးမေးပါရစေ ကျွန်တော့် လိင်တန်က ၁၅ ၁၆ မှာ ၆ လက်မရှိပါတယ် ပေတန်နဲ့တိုင်းကြည့်ဖူးပါတယ် အခု ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ .၅ လက်မခွဲ လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်လုံးပတ်လဲ နည်းနည်းသေးသွားပါတယ် ကိုယ်ခံအားနဲ့ဆိုင်လားဆရာ လက်နဲ့အာသာပြေတာကတော့၃ ၄ ရက်ကို ၂ ခါ လောက် လုပ်ပါတယ် ..
Reply	kyawthura.shwebo permalink	27/02/2012 01:33	ကောင်းတယ်
Reply	သိချင်သူ permalink	29/02/2012 20:07	ကျနော်…မေးစရာလေးရှိလို့ပါ…..
ဒါပေမဲ့..ကျနော်တို့က child မလိုချင်သေးဖူးဗျ…….
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ ရာသီလာပြီး တဲ့7 ရက်အတွင်းဆက်ဆံကြပါတယ်…..
Reply	lettwebaw permalink*	01/03/2012 00:23	သည်ဘလော့(ဂ်)ထဲမှာပဲ “ရက်တွက်တာ စိတ်ချရသလား”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှာဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
Reply	သိချင်သူ permalink	01/03/2012 15:49	ဆရာ့ဒီလိုပြောပြပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ကျနော်ရှာမတွေ့လို့ပါ…
Reply	Moe Sweet permalink	02/03/2012 08:54	ဒီမှာ
Reply	lettwebaw permalink*	02/03/2012 11:06	ကျေးဇူးပါ ကိုမိုးချို။ ကျွန်တော် အသာလွှတ်ပေးထားတာ။ အရေးကြီးတယ်လည်း ဆိုသေးရဲ့… ၀မ်းနှုတ်ဆေးချည်း အားကိုးနေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင် ညှစ်ဖို့ စိတ်ကူးလေးများ ပေါ်လာလို ပေါ်လာငြားဆိုပြီး… သိချင်သူ permalink	02/03/2012 11:12	ကိုယ်ဝန်မရအောင်တားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိချင်လို့ပါဗျာ..ပြောပြပေးပါလားဗျာ…..
Reply	သိချင်သူ permalink	02/03/2012 13:32	အာ.မသိလို့အားကိုးပီးမေးတာကို….ဈေးကိုင်တယ်ဗျာ..မမိုက်ပါဖူး Reply	သိချင်သူ permalink	03/03/2012 09:48	ဆရာရယ်….ကိုယ်တိုင်မညှစ်ချင်တာတာ့မဟုတ်ပါဖူးဗျာ….
ဆရာ……… ကိုယ်ဝန်မရအောင်နဲ့ ရောဂါပိုးမ၀င်အောင် ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ချလက်ချဆက်ဆံလို့ရလဲဟန်…..
Reply	lettwebaw permalink*	04/03/2012 17:10	ကိုယ်ဝန်လည်း မရ၊ ရောဂါပိုးလည်း မ၀င်ချင်ရင် ကွန်ဒုံးမှတစ်ပါး အခြားနည်း မရှိပါ။ အဲ… မေ့လို့။ နှစ်နည်း ကျန်သေးတယ်။ တစ်ခုက လုံးဝ လိင်ကိစ္စ မလုပ်ဘဲ နေရင် ကိုယ်ဝန်လည်း မရ၊ ရောဂါပိုးလည်း မ၀င်နိုင်ပါ။ နောက်တစ်နည်းက ကိုယ့်ဘာသာ လက်နဲ့ပဲ အာသာဖြေ ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုလည်း ကိုယ်ဝန်လည်းမရ၊ ရောဂါပိုးလည်း မ၀င်နိုင်ပါ ခင်ဗျား။ Reply	သိချင်သူ permalink	03/03/2012 09:50	ကိုမိုးချိုကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်……..လေးစားပါတယ်…..ကျေးဇူးနော်
Reply	သိချင်သူ permalink	03/03/2012 10:05	ဆရာရေ ..ရစ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာ….ကိုမိုးချိုပေးထားတဲ့ဆိုဒ်ထဲကနေဖတ်လိုက်တော့
`ကျနော့်မိန်းမက လာပီးတော့ ကုန်သွားတယ်ထင်ပီး ၃ရက်အကြာမှာကျနော်တို့ဆက်ဆံကြတယ်…ဆရာ
အဲ့လိုဆက်ဆံနေတုန်းမှာကျနော်က ကျနော့်ငယ်ပါကိုသုတ်ရည်မလွှတ်ခင် အပြင်ထုတ်ပါတယ်
ကျနော်က ကိုဝင်းကြည် ရမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့ပါ…..ဆရာ
Reply	😂😂😂 permalink	04/03/2012 10:02	ကိုဝင်းကြည် မရချင်တာများ လွယ်လွယ်လေး ဆရာ။
ထိပ်ဖူး ကို သားရေကွင်း နဲ့ တင်းနေအောင် စည်းပြိးတော့
မောင်းပေတော့။ လုးံဝ မရစေရ ဘူး။ စိတ်ချ။
ကိုယ့်ဆရာ ကလည်း ပိန်း ချက်က9လောက်ရှိ တယ်။
နောက်တနည်းက မဆက်ဆံခင် ထိပ်က အပေါက်ကို
Super Glue နဲ့သာ ကပ်ထားလိုက်။ အဲဒါဆို 110% sure ပဲ။
Reply	lettwebaw permalink*	04/03/2012 17:15	သည်ဘလော့တစ်ခုလုံးကို အမြီးပြန် ခေါင်းပြန် ကျေညက်အောင် ဖတ်လိုက်ပါ။ အဖြေတွေ အားလုံး ရှိနေပါ၏။ Reply	သစ္စာ permalink	03/03/2012 23:38	ဆရာ..mail နေ မေးချင်လို့ ဆရာ gmail address ပြောပြပါ..လိုက်ရှာဖို့လဲ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ပါ..သိတဲ့လူရှိရင်လံ ပြောကြပါ..
Reply	tko permalink	15/03/2012 19:41	good
Reply	ချစ်ခင်သူ လေးစားနေသူ တယောက် permalink	17/03/2012 16:17	g mail
ကို ပို့လို့ရရင်ပို့ပေးပါ ကျေး၊ဇူုးတင်ပါတယ် ဆရာ
gmail.account ကတော့ kothat0090@gmail.com par
ဘာစာလေးဘဲတင်တင် ပို့ပေးဖို့ မျော်လင့်ပါတယ် ဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	17/03/2012 17:45	ဘာပဲ တင်တင် ချက်ချင်း ဖတ်ရချင်ရင် ညာဘက်ကော်လံမှာ ပေးထားတဲ့ ”ဓာတ်ချောစာက သိချင်ရင်”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ”နှိပ်လိုက်ပြီ”ဆိုသဟာလေးကို မြားကလေးနဲ့ ပြ၊ ကြွက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ပခုံးလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည် ခင်ဗျား။
Reply	phyuphyuhlaing permalink	20/03/2012 01:34	အကို…ညီမခုဖြစ်နေတာက…ညီမလေ…လစဉ်လာတာလတိုင်းအော်ရတယ်
Reply	yan naung soe permalink	22/03/2012 13:55	ဆရာေ၇ ကျွှန်တော် ကောင်မလေးနဲံ့ ကျွှန်တော်နဲ့က အသက်ကခြောက်နှစ်လောက်ကွာနေတယ် သူနဲ့အတူတူ ၉ခါလောက်အိပ်ဘူးတယ် ပြီးသွားတိုင်း အမြဲလိုလို ပြသနာရှာနေတယ် နောက်တစ်ခုမလုပ်ဖို့ ဂတိတွေလည်းတောင်းတယ် အဲံဒါဘာလိုလဲထင်ပါသလဲ့ခင်ဗျာ
Reply	သူသူ permalink	22/03/2012 20:24	ဆရာရေ….ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းရဲ့.ကောင်မလေးကကိုယ်ဝန်ရသွားတယ်။တစ်လလောက်ရှိပြီပြောနေပါတယ်။မလိုချင်လို့ပါ။မရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။အဲဒါကိုabortionလုပ်ချင်လို့တဲ့ဆရာ။ ဘယ်လိုပြောပြောမရဘူးဆရာ။အကြံပေးပါဦး။ ဘယ်လိုပြောပေးရမယ်။ ဘယ်လိုအကြံပေးရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ပါ။
Reply	lettwebaw permalink*	23/03/2012 08:11	ကျွန်တော့်ရဲ့ “မီးငယ်တို့ အသိကြွယ်ဖို့” စာအုပ်ထဲမှာ ဒါအတွက် ရွေးစရာ လမ်းသုံးသွယ်ကို အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကာယကံရှင်ကို ဖတ်ခိုင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	30/03/2012 13:11	ဆရာရေ…မသိတာလေးမေးချင်လို့ပါ…
Reply	lettwebaw permalink*	31/03/2012 22:08	လင်မယား အရင်းခေါက်ခေါက်လည်း မှန်တယ်၊ နှစ်ဦးစလုံးမှာလည်း လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါ ကင်းနေတယ်ဆိုရင် ဓမ္မတာပေါ်နေချိန်မှာ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။
ဒါထက်ဗျာ… ရာသီလာတယ်ဆိုတာ သွေးဆင်းတာလေ ဦးလေးရဲ့… ဦးလေးရဲ့ ငယ်ပါမှာ သွေးတွေမှ မပေရင် ဘာတွေများ ပေစေချင်လို့လဲဟင်င်င်င်… Reply	Shumawa permalink	13/05/2012 02:36	hahaaaaaaaaaaa that was the funniest one ever..!
ကြောက်နေသူ permalink	01/04/2012 14:15	အာ….ဆရာကလဲ…..
ကျနော့်ဝေးစီက ၁ လုံးကြီး ၁လုံးငယ်နေတယ်ဆရာ…..
Reply	lettwebaw permalink*	01/04/2012 14:20	တောင်ပြိုတာပဲ ကြားဖူးတယ်။ သွေးပြိုတယ်လို့တော့ ကြားဖူးဘူးဗျ။ ခက်တာပဲနော်… အကြီးတစ်လုံး အသေးတစ်လုံးကတော့ စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ၀တဲ့သူက ပိန်ချင်တယ်၊ ပိန်တဲ့သူက ၀ချင်တယ်၊ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ပုဒ်လည်း ကြားဖူးတယ်။ ကိုယ့်လူဟာက အလကားနေရင်း ပူနေတာတွေ အများကြီးပဲနော်။ နောက်ကော ဘာပြုသေးလဲဟင်… Reply	zawkoko permalink	01/04/2012 14:41	ဆရာခင် ဗျာ ကျွှန်တော် က လုပ်ရင်အရမ်းမြန်ပါတယ် အဲဒါ ဘာကြောင့် ပါလဲ ကျေးဇူပြု ဖြေကြားပေးပါ။
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	04/04/2012 19:46	ကျနော်က ဘာအသိပညာမှမရှိတော့…အလကားနေရင်းပူနေမိတာပါဗျာ…
ဟိုဟာ ကို လဲစိတ်ကမထိန်းနိုင်လို့ပါဗျာ…
အော်…ဒါနဲ့ ပေါ်မှာဆရာဖြေပေးတာက လေ ကျနော်နားမလည်လို့ထပ်မေးမယ်နော်…
လင်မယားဖြစ်မှ၇မှာလားဟန်……ကျနော်က ဒါကိုပြောတာပါ……အောက်ကဟာကိုလေ…. (လင်မယား အရင်းခေါက်ခေါက်လည်း မှန်တယ်၊ နှစ်ဦးစလုံးမှာလည်း လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါ ကင်းနေတယ်ဆိုရင် ဓမ္မတာပေါ်နေချိန်မှာ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။)
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	11/04/2012 16:11	ဆရာရေ ကျနော်မေးထားတာကြာပီ…ဘာလို့ပြန်မဖြေတာလဲဟန်….ကျနော်သိချင်နေပီဗျာ…..
Reply	Aungtint permalink	11/04/2012 20:48	ကောင်းတယ်ဆရာ
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	13/04/2012 14:54	??????
Reply	lettwebaw permalink*	19/04/2012 20:44	ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်နဲ့ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ကိစ္စမို့ အဖြေမပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပါတော့ဗျာ။ Reply	အောင်မိုး permalink	15/04/2012 13:22	ဆရာခင်ဗျာ အဲဒါဆိုမိန်းမတွေကပြီးတာနည်းတာတောင်မှ တချို့မိန်းမတွေကဘာလို့ဖောက်ပြန်ကြတာလဲ မသိဘူး ဥပမာ သဘောသားမယားအများစုတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာ
Reply	myogyi permalink	19/04/2012 22:54	ဆရာကျွန်တော်သိချင်လို့ ပါ သူငယ်တွေပြောတာကြားဖူးတာ ရေချိုးရင်းကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါကို ဆွဲဆွဲပေးရင်ရှည်လာတယ် ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါ့မလား
Reply	lettwebaw permalink*	21/04/2012 11:24	ရေချိုးရင်း ကိုယ့်နှာခေါင်းကိုယ် ဆွဲဆွဲကြည့်ပေါ့။ ရှည်လာတယ်ဆို ဟုတ်လို့ပေါ့။ ဆွဲကြည့်လိုက်လေ… Reply	Si thu permalink	19/11/2012 00:33	Lmfao, my respect finally goes to u, Sir… XD XD
သားကြီး permalink	24/04/2012 00:34	ဆ၇ာေ၇းကျွန်တော်သိချင်တာက လိင်အင်္ဂါမှာဂေါ်လီထည်တာ.အန္တ၇ယ်၇ှီပါသလား..ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့.ေ၇းပေးလို့၇မလားခင်ဗျား..ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာ..ခေတ်စားနေလို့ပါခင်ဗျာ..
Reply	mgmg permalink	22/06/2012 10:28	သူများတွေပြောနေကြတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ လဲပြောနေတယ် ကောင်းတယ်လို့ လဲပြောနေကြတယ် ဘယ်ဟာကို ယုံရမှာလဲတော့မသိဘူး
Reply	mannaing permalink	25/04/2012 17:04	ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	Moe oo permalink	26/04/2012 00:19	အထီးကြံသူ
Reply	lettwebaw permalink*	26/04/2012 16:18	တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ အပြည်စုံဆုံး ဖော်ပြထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာဆို ဘာမှ မပြောတော့ဘူးလို့လည်း အတိအလင်း ရေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Reply	devil permalink	26/04/2012 15:17	ဆရာ…..ယောက်ကျားတစ်ယောက်ဟာ…တစ်ရက်ကို နှစ်ကြိမ်လောက်အာသာဖြေတယ်ဆိုရင်….ဘယ်လို အကျိုးဆက်များဖြစ်လာနိုင်သလဲ….ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်မလား ဆ၇ာ… သိချင်ပါတယ်..အမြန်ဆုံးဖြေပေးပါနော်…
Reply	lettwebaw permalink*	26/04/2012 16:18	တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ အပြည်စုံဆုံး ဖော်ပြထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး သိချင်ရင် အမြန်ဆုံးသာ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာဆို ဘာမှ မပြောတော့ဘူးလို့လည်း အတိအလင်း ရေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Reply	သားကြီး permalink	02/05/2012 09:56	ဆ၇ာစာအုပ်တွေကို PDF နဲ့ဒေါင်းလို့မ၇ဘူးလားဆ၇ာ..ပီးတော့ပီမိုးနင်း၇ဲ့စာအုပ်တွေလုပ်ဖက်ချင်ပါတယ်…ဒေါင်းလုပ်က လင့်မတွေ့လို့ပါဆ၇ာ..
Reply	San permalink	05/05/2012 16:38	Dear Sayar, I would like to get your email address. I was searched at myanmar shop from Pinezula plaza but I could not find. I live at Singapore. May I know where can I get your book in SG and if you don’t mind, may i get your email
Reply	ပြည့်ဖြိုး permalink	05/05/2012 19:53	ဆရာမိန်းကလေးတွေအပျိုစစ်မစစ် ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ sex မလုပ်ဘဲနဲ့
Reply	ကျော် permalink	14/05/2012 16:25	ဆရာ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်သိချင်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေ လိင်ထဲ ထည့်တဲ့ အဖြူရောင်အချောင်းလေး ကြိူးတွဲလန်းလေးပါတာ ဘာကြီးလဲမသိလို.ပါ
Reply	lettwebaw permalink*	14/05/2012 18:01	အား… တယ်လည်း သိချင်လှပါလား… ဒွတ်ခ… အဲဒါ သိရင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရမှာလဲဟင်င်င်… ဒါမှမဟုတ် စာမေးပွဲမှာ အမှတ်တွေ ကောင်းလာမှာလားဟင်င်င်… Reply	ကျော် permalink	14/05/2012 20:32	မဟုတ်ပါဘူး ဆရာကလဲ ဗဟုသုတအနေနဲ.သိချင်တာပါဗျာ ဘာလို.သုံးလဲဆိုတာကို…..
coldiac permalink	14/05/2012 21:52	http://en.wikipedia.org/wiki/Tampon
Reply	lettwebaw permalink*	14/05/2012 23:46	Thank you, Ko Moe Sweet. You are extremely kind whereas I’m sometimes quite naughty. coldiac permalink	15/05/2012 07:48	My pleasure sir. Emi Mao permalink	16/05/2012 09:27	အဲ.တာက နာ လား ဟင်
Reply	win permalink	16/05/2012 13:38	win
ဆရာခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်က သုတ်ထွက်မြန်ပါတယ်၊ အဲဒါကို သူငယ်ချင်းတွေက တရုတ်က ၀င်တဲံ့ ကြာဆေး သုံးခိုင်းပါတယ်၊ အဲဒိဆေးသုံးရင် လူကို ထိခိုက်နိုင်သလားသိပါရစေ။ ရရင်လဲ ဘယ်လိုဆေးမျိုးသုံးရမလဲ ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။
Reply	YaWaNa permalink	16/05/2012 14:13	ဆရာခင်ဗျ . . .
ကျနော့်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး စိတ်ထဲဘဝင်မကျတာလေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။။
မနေခင် အစပျိုးတဲ့အချိန်ကော နေစဉ်အတွင်းမှာပါ တစ်ဘက်မိန်းခလေးအပေါ်မှာ တော်တော်လေးကို စိတ်ပါ ပါတယ် ။ အချိန်ပြည့် ကာမစိတ်နဲ့ သာဖုန်းလွှမ်းနေပါတယ်။ အဲ . . . အတူနေလို့ ကျနော့်ဘက်ကပြီးသွားတဲ့ အခါကျတော့ ချက်ချင်း အဲဒီစိတ်က လုံးဝ (လုံးဝ) တစ်စက်မှကို မရှိတော့တာ ဆရာရေ. . . ။
သူ့ပါးပေါ်ရောက်နေတဲ့ ကျနော့်နှခေါင်းကိုတောင် ချက်ချင်းဖယ်လိုက်မိတယ်ဗျာ . . . ။ အဲဒီလိုဖြစ်တာ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာတယ်ဆရာ။ မိန်းကလေးကိုလည်း ပြီးသွားအောင် ကျနော်လုပ်ပေးပါတယ်ဆရာ ဒါပေမယ့် သူကျတော့ ကျနော့်လိုမျိုး ဖြစ်ပုံမရဘူးဗျ . . .။ အဲဒါပါပဲ ဆရာ။ အဲဒီလိုဖြစ်တာ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ပုံမှန်ပဲလားဆရာ။ ကျနော်အတူနေတယ်လို့ပြောတဲ့မိန်းခလေးက ကျနော့်အချစ်ဆုံးကောင်မလေးပါ။ ကျနော့်အသက်က ၂၅ ပါဆရာ။
Reply	coldiac permalink	19/05/2012 23:04	Ko YaWaNa, Everybody’s like that. You should be thankful it takes you only 30 minutes.
Reply	YaWaNa permalink	22/05/2012 17:05	Thank for your answer. I think so. but I am not sure. now I know exactly. Everybody’s like me. Thank you.
sai permalink	19/05/2012 14:54	စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ခေတ်ကာလကြောင့်လို့ ပြောရမလားတော့ မသိဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် ယောက်ျားတွေ ဖောက်ပြန်တာက စီးပွားရေး ပြေလည်တဲ့အခါ သွေးသား အာသာ သဘောကြောင့် ဖြစ်တတ်ပြီး မိန်းမတွေ ဖောက်ပြန်တာက စီးပွားရေး မပြေလည်တဲ့အခါ အားကိုးရှာရင်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အခု ကိုဇာနည်မောင့် ကိစ္စကတော့ အဲဒီ့ ယေဘုယျထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကျတော့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းနဲ့ အနေဝေးတဲ့အတွက်လို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သွေးသားကြောင့်လို့တော့ ကံသေ ကမ္မမ အပြောရခက်ပါတယ်။ အထီးကျန်မှုကို ဖြေဖျောက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို သွေးသားကြောင့်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။
ခေတ်ကာလကလည်း သွေးသားဆူပွက်ချင်စရာ ရုပ်သေ ရုပ်ရှင်တွေ အလျှံပယ်ဖြစ်နေတာလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူ့မိဘ (အထူးသဖြင့် သူ့မိခင်)ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တတ်ပြန်တယ်။ ဆိုလိုတက အဖေ အမေက အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို လုပ်ဖူးတယ်ဆိုရင် သူတို့က မွေးတဲ့ သားသမီးတွေလည်း အဲလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
I am so sorry for Ko Zar Ni and understand how he feel.I had experience that my wife cheated on me.Not only with one guy.one after another.We had to stay in different towns cos of our jobs.I went and see her onceaweek and fetch her to our home town.But later I found out that she fell in love withamarried guy from her work in that town only when we stay together again.That guy kept calling to my wife everyday.But I keep quieted and I planed to go away from her.But I can’t and when I came back to her,afterafew days I get,I found out again that she slept withaguy who are doctor and supervisor of her.I found out his letter for my wife and my wife trow away it and couldn’t find back for evidence.I wanted to sue him but I am afraid that this case will make spoil the Image and dignity of their Organization. I am shocked thatadoctor also do like it and silly things.He also wrote in his letter that he jealous her husband(me) who stay together with her.Stupid???Later he called sometimes and SMS.Till now we haven’t divorced but I will never forgive her although I don’t torture her.I only think about our only daughter and don’t want her feel.My wife is come from broken family.I don’t want my daughter be like her.I pray to GOD and I assume that all the things happened to me is punishing by GOD to me.I faced to that doctor and told him that I can sue to him.But very lately and didn’t let know the others till now cos I still love my wife and if her mother and relatives know it,she will have no place to live on earth.Only here I share it and open my chest cos I don’t want to keep in heart till the end of my life.I’ve got chest pain whenever I think about that.Guys I would like to suggest you that try to stay together with your wives and family if possible.They can feel easily lonely and can’t stay alone.When she meet the kyarkuli guys who are good at pursuing lonely wives.Nowadays more and more and they aren’t afraid the Hell.
Reply	Chit Taw Maung permalink	23/05/2012 18:58	အခုလိုအဖေတစ်ယောက်လို ဆုံးမလမ်းညွှန်ပေးပြီး အကိုတစ်ယောက်လို သိသင့်သိထိုက်တာတွေပြောပြပေးတဲ့ အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
ဆရာကို ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြောပြော အားပေးနေပါတယ်
Reply	Pyit phyo permalink	27/05/2012 13:39	ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဆရာ ကျော်။
Reply	power permalink	05/06/2012 16:10	ဆရာ ကျနော်သားတစ်ယောက်ဖခင်ပါ။ကျနော်အသက်က 29နှစ်ပါ။ကျနော့်သားကအခုဆိုရင် 1-နှစ်နဲ့ 2-လနီးပါးရှိပါပြီး။တခါကကျနော် ဆရာ့စာအုပ်ထဲမှာ”ယောကျာင်္းလေးတွေ 1-နှစ်ကျော်ရင် ထိုးလို့ရတဲ့ဆေးအကြောင်း၊အရပ်အမောင်း၊ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကအစ၊ယောင်္ကျားတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တာအကုန်လုံး သူ့နေရာနဲ့သူ အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်၀၀ရှိတယ်”လို့ဆရာရှင်းပြထားတာဖတ်ဖူးလို့ ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ? ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ? ဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲ? ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလား။ ကျနော်ကအရပ်5′ ပေ2 လက္မ ပါ။ကျနော့်သားကျနော့်လို အရပ်ပုမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ကူညီပေးပါအုံး ဆရာရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	lettwebaw permalink*	06/06/2012 02:15	တစ်နှစ်ကျော်ရင် ထိုးလို့ရတဲ့ ဆေး မဟုတ်ပါ။ ၁၃ နှစ်ကျော်မှ ထိုးရတဲ့ ဆေးပါ။ အဲဒီ့ဆေးဟာ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာက ထွက်တဲ့ ဟိုမုန်းတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဖော်စပ်တဲ့ ဆေးဖြစ်တာမို့ ထုတ်လုပ်ခွင့် မပေးတော့တာမို့ ၀ယ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ကလေး အရပ်ရှည်ခြင်း၊ ပုခြင်းဟာ မျိုးရိုးနဲ့ထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မိခင်ရဲ့ အာဟာရနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စ ပထမ သုံးလမှာ မိခင်က အာဟာရ ပြည့်ဝစွာ စားသုံးထားရင် အဲဒီ့ကလေးဟာ အရပ်ရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့ ၆ လမှာ အာဟာရပြည့်ဝရင် ကလေးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွား (၀)ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ အာဟာရပညာရှင်များ အတည်ပြုထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအများစု ပုနေတာက မိခင်အတော်များများဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိစမှာ အစားအသောက် ပျက်နေကြလို့ပါ။ ကလေးက အခု တစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ဒါကို အဖတ်ဆည်ဖို့ မလွယ်လှတော့ဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ သူ့ကို အာဟာရ ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ ကျွေးဖို့သာ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Reply	aung ko permalink	17/06/2012 13:10	အကယ်လိုယောကျာင်္းလေး၇ဲသုတ်ကိုမိန်းကလေးမျိုချမိရင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လားဆရာ……..
Reply	ကိုရဲ permalink	20/06/2012 15:30	ဆရာ gmail ကိုသိချင်ပါတယ်
Reply	name permalink	21/06/2012 05:27	မင်္ဂလာပါ ဆရာ…
ဆရာ့စာအုပ်တွေကို အကုန်မဖတ်ဘူးသေးတဲ့လူဆိုတာတော့ အရင်ဝန်ခံပါတယ်။
ဆရာ့စာအုပ် တအုပ်အုပ်မှာပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာအချိန်ကုန်ခံပြီးမဖြေနေပဲ ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်တွေကိုသာ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ ထဲထဲဝင်ဝင်မရေးထားပါဘူးခမျာ…
ဆရာ့ကိုအားနာလို့ လိုတိုရှင်းပဲရေးပါ့မယ်။ စာချောမရေးရလို့ အသုံးအနှုန်းရင့်မိရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ
ကျွန်တော့အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ပြောပါရစေ ( ဆရာအနီးစပ်ဆုံးတွေးပေးလို့ရအောင်ပါ )
ကျွန်တော့အသက်က ၂၇ နှစ် ရှိပါပြီ
……………………( ဒီအရွယ်မှာ ဒီလိုဖြစ်တတ်လား )
ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးတခုမှာလုပ်ပါတယ်ဆရာ ( ဒါက ကျွန်တော့ပတ်ဝင်းကျင်ပါ )
…………………..( စိတ်ဖိစီးမှု့များပါတယ် ၊ ပင်ပမ်းပါတယ်ဆရာ )
ကျွန်တော့ လိင်အင်္ဂါက ခြောက်လက်မလောက်ရှိပါတယ် အဖျားက အရင်းထက်၂ဆလောက်ကြီးပါတယ် လက်ကိုင်များလို့ပါ အိပ်ရင်တောင်ကိုင်အိပ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။
……………………( ဆက်ဆံဖေါ်မရှိရင် လက်နဲ့ အာသာဖြေတာလဲ များပါတယ် )
ကျွန်တော်က sex ကိစ္စကိုခုံမင်သူပါ ကြေးစားမဟုတ်တဲ့ မိန်းခလေးများစွာနဲ့နေဘူးပါတယ်
…………………..( သုံးလွန်းတဲ့ အင်ဂျင်ပဲ ကွာလတီကျသွားတာလား )
သုတ်အချိန်ကြာကြာ ထိန်းနှိုင်အောင် ကျွန်တော် တခြားကိုစိတ်လွဲတဲ့နည်းသုံးပါတယ်
…………………..( စိတ်ဖိစီးမှု့ကပဲ ဖြစ်တာလား )
ကျွန်တော် ဆေးခြောက်ကို နေ့စဉ်စွဲပြီး ၁နှစ်နီးပါးလောက်သုံးခဲ့ဘူးပါတယ်
…………………..( အာရုံကြောပဲအားနည်းသွားတာလား )
ကျွန်တော် ဆီးခဏခဏသွားတဲ့ ဆီးကျင်တဲ့ ရောဂါရှိပါတယ်
…………………..( ဆီးကျင် ဆီးကိုက် ရောဂါကြာင့်လား။ ရောဂါကြောင့် ဆီးကျင်ဆီးကိုက်တာလား )
ကျွန်တော် ဂနို / ရှန်ကာ ကာလသားရောဂါမဖြစ်ဘူးပါ လိင်အင်္ဂါမှာတော့ ကြွက်နို့တခါပေါက်ဘူးပါတယ်
…………………..(ရောဂါလက်ကျန်ရှိလို့လား ရောဂါငုပ်နေတာလား )
ကျွန်တော် ဂေါ်လီထည့်ဘူးပါတယ် ခုတော့ ထုပ်လိုက်ပါပြီ။ ဘာပြသနာကြောင့်မှမရှိပါဘူး ထုပ်ချင်လို့ပါ
…………………..( ဂေါ်လီထည့်မိလို့ အကြောထိခိုက်မှု့ရှိသွားတာများလား )
ကာလသားရောဂါ HIV စစ်ဘူးပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က တီဗီရောဂါ ဆေးမသောက်ပဲ သဘာဝအလျှောက် အလိုလိုပျောက်သွားဘူးပါတယ်
ပျောက်ပြီးမှသာ ချောင်းဆိုးအရမ်းတယ်ဆိုပြီးဆေးစစ်ကြည့်မှ ရောဂါဖြစ်ခဲ့တာသိရပါတယ် ။
………………….( တီဗီရောဂါကြောင့်ပဲ လူထိသွားတာလား အားရုပ်သွားတာလား )
ကျွန်တော် ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာက ဒီလိုပါဆရာ
(သုတ်လွှတ်မြန်နေတာ) နဲ့ ( သုတ်လွှတ်နှေးနေတာ) ပါ
ကျွန်တော့ ချစ်သူအပေါ်သစ္စာရှိနေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီဆရာ တခြားမည်သူနဲ့မှမဆက်ဆံပါ
ပထမ အဆင်ပြေပေမယ့် ၂နှစ်လောက်ရှိလာတော့ ကျွန်တော် မပြီးနှိုင်တော့ဘူး ဆရာ
ပြီးဖို့ အချိန်အရမ်းယူရပါတယ်…။တရက်မှလဲ တကြောင်း အလွန်ဆုံး နှစ်ကြောင်းလောက်ပဲ သွားနှိုင်တော့တယ်ဆရာ ။တခါပြီးသွားရင်လဲ နောက်တခါတွက် ကျွန်တော်နလန်ပြန်ထူဖို့ အချိန်တော်တော်ကြာကြာပေးရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကြွနေတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ တိုက်ဆိုင်ရင်
( ဥပမာ; ; Outdoor sex , ၂ ယောက်သားရန်ဖြစ်ပြီးမှ ပြန်တည့်ချိန် ဆက်ဆံတဲ့ အချိန် )
ဒါဆိုရင်တော့ ဆရာ ၂ ကြောင်းလောက်ကို မနားတမ်းသွားနှိုင်ပါတယ် ။
ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူးဆရာ….. ရူးနေပြီလားတောင် ထင်မိပါတယ် ။
တလုံး၂၀၀၀တန် ကာမထကြွဆေးတွေ ၁ ခါ ၂ ခါသောက်မိပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးကြောက်လို့
ထပ်မသုံးရဲပါဘူးဆရာ ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော့ ကာမစိတ်ကို နှိုးဖို့ သစ္စာဖောက်မိပါတယ် ပြသနာက
ထပ်တွေ့ပါတယ် ဆရာ…။ တခြားကောင်မလေးတွေ နဲ့ ဆက်ဆံတော့ ပြီးတာအရမ်းမြန်နေပါတယ် ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် နဲ့ကို
ထိမ်းမရ သိမ်းမရ ပြီးပြီးသွားပါတယ် ။
( ခပ်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ဆို ၅မိနစ်ကျော်ကျော်ပဲတင်းနှိုင်ပါတယ် )
အဲ့တာ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ လား သိချင်ပါတယ်ဆရာ
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းရှိရင် ဆေးကောင်းဝါးကောင်းရှိရင် မှီဝဲရမယ့် အစားအစာရှိရင်
ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ ဆက်ဆံခါနီး အားယူရတာသူငယ်ချင်းထဲမှာလဲ ၂ ယောက်ရှိပါတယ် တိုက်ဆိုင်လို့ တင်ပြခွင့်ပြုပါဆရာ။ တယောက်က သူ့ ချစ်သူ Oralsex လုပ်ပေးမှ ထူနှိုင်ပါတယ်။
တယောက်က ဒီဇိုင်နာပါ အညောင်းထိုင်ရလို့လို့ သူကပြောပါတယ် ။ သူဘယ်လို နည်းနဲ့ အဆင်ပြေတယ်တော့ မမေးကြည့်မိပါဘူး။ အားလုံးကိုယ်စား ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ ။
ခုလောလောဆယ် ကျွန်တော် GNC က ထုပ်တဲ့ MEGA MEN ကိုသုံးပါတယ်ဆရာ
Dietary Supplement ပါဆရာ။ ၁၈၀၀၀ ပေးရပြီး US made လို့ပြောပါတယ်
Wynn Land International Co.,Ltd က သွင်းတာပါ
ဆရာထင်မြင်ချက်ကို ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဆရာ
အစဉ်လေးစားလျှက် ။ XXXXXX
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	22/06/2012 21:03	ဆရာ…..
ဆရာ့ကို ကျနော် မမေးတာကြာပါပီ ….. ခု နဲနဲမေးမယ်နော် ဆရာ….
ဆရာ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် မိန်းမ နဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဟာ ကို နေ့တိုင်းနီးပါ ပြုလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဆရာ…
ဒါပေမဲ့ ကျနော် ခရီး တခုထွက်သွားတာ ၂ လ လောက်ကြာတယ်ဆရာ….
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ… .ကျနော် ပြန်လာတော့ ….ဆရာရယ် အလွမ်းဖြေကြတယ်ပေါ့ဆရာ…. ဒါပင်မဲ့ အရမ်းကြမ်းကြမ်းတော့မဟုတ်ပါဖူး အရင်လို နေ့တိုင်းနီးပါ တနေ့ တခါနှစ်ခါလောက်ပေါ့ဆရာ
ဒါပင်မဲ့….. သူ က သုံးရက် လေး ရက်လောက်လဲကြာရော်….. သူ့ အင်္ဂါ ဝေမှာရော် အထဲလောက်နားလေးမှာပါ
နဲနဲစီလောက်နာလာတယ်ပြောပါတယ်ဆရာ… သူ ခုတလော ခါးလဲတခါခါ နာတယ်ပြောပါတယ်ဆရာ
မရိုမသေဆရာရယ်….. စအို အ၀ က ပါ နဲနဲနာတယ်ပြောပါတယ်…..
ပီးတော့လမ်းလျှောက်ရင် လဲ ဆီးခုံ က အပြင်ကော အတွင်းကပါနာတယ်ပြောပါတယ်ဆရာ…
ပီးတော့ လမ်းလျှောက်ရင် အောက်ပိုင်းတခုလုံး ကို အောက်ကို ဆွဲချထားခံရသလိုနဲနဲစီနာပါတယ်တဲ့ဆရာ…
ကျနော်လဲမှီသလောက် စာတွေဖတ် စဉ်းစားပါတယ်ဆရာ…..
အဲ့ဒါလေးကို ဆရာ ကျေးဇူးပြုပီးတော့ဖြေပေးပါလား ဆရာ…တောင်းပန်ပါတယ်…..
ကျနော် က သားအိမ် တခုခု ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေလို့ပါဆရာ………
Reply	တောင်.တသူ permalink	23/06/2012 15:56	ဆရာကြီးးးးးဆရာနဲ..ကျွန်တော်ဆါးနွေးချင်လိုပါ….ဒီအကြောင်းကအရမ်းအရေြးီ့းလို.ပါဆရာ….ဆရာမေးလ်ကိုကျွန်တော.မေးလ်ထဲပို.ပေးပါနော်….ဆရာကိုမေးချင်လို.ပါ…
Reply	lettwebaw permalink*	24/06/2012 00:20	သည်မှာပဲ မေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
lettwebaw permalink*	24/06/2012 00:17	ခါးနဲ့ စအိုပါ နာတယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။ တခြား ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နားလည် တတ်ကျွမ်းသူ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်သင့်တယ်လို့သာ ဖြေပေးလိုက်ပါရစေ။
Reply	သေနေလို permalink	24/06/2012 00:11	ဆရာကျွန်တောဟကသေနေတယ်ဆရာဘယ်လိုလပ်ရမလဲဆ၇ာချစ်သူကပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်လဲ ဆရာကိုအကူညီတောင်တာပါဆရာ ဖြစ်နိုင်မယိဆိုရင် gmail ဖြေးပေပါဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	24/06/2012 00:19	အမ်… သေနေတယ် ဟုတ်လား။ ဘာလဲဗျာ… ပန်းသေတာလား။ မေးခွန်းတွေ ရေးတဲ့အခါ စာတွေ ခြားပြီး ရေးပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ သေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားတွေ အကြောက်ဆုံး ရောဂါနဲ့ စပ်လျဉ်း၍ ဆိုပြီး ရေးပေးထားတာကို ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ သေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကြီးအောင် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရပါဘူးလို့ ဖြေပါရစေ။
Reply	မင်းမင်း permalink	25/06/2012 15:01	ဆရာ ကျွှန်တောက်က 20ပြည့်ပါပြီ ခုထိငယ်ပါက ပျော့နေရင် ၁လက္မလောက်`ရှိပြီး။မာနေရင် ၃လက္မ ကျော်ရှိပါတယ်။အဲဒါပြဒနာရှိနိုင်လားသိချင်ပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ဆရာဝန်လဲမပြရဲဘူးရှက်လို့ပါ။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မေးလ်ထဲစာချန်ခဲ့ပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply	Thu Yazaw permalink	26/06/2012 16:32	ဘာဆိုဒ်လဲဗျ
Reply	ကြောက်နေသူ permalink	27/06/2012 19:21	ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….. ဒီလိုမသိတာကိုဖြေပေးလို့ ပါ ဆရာ
Reply	moe lay permalink	09/07/2012 10:32	ကျေးဇူးပါ…
Reply	မိုး permalink	14/07/2012 15:33	ဒီစာတွေဖတ်မှပဲ …မကြားဘူးတာ….မသိသေးတာတွေသိရတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Reply	မင်းမင်း permalink	16/07/2012 20:55	ဆရာခင်ဗျာ. 2cထိုးပိးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခွဲစိပ်ရမှာလားသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply	တာယာ permalink	17/07/2012 23:59	ယောက်ျားလေးများ မိန်းကလေးများနဲ့ ဆက်ဆံပြီးလျှင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်စွာ မည်သို့ အားဖြည့်ရမည် မသိပါသဖြင့် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်….။
Reply	lettwebaw permalink*	20/07/2012 15:09	လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်၊ အားအင်ပြည့်ဖြိုးအောင် လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ဘာခက်တာလိုက်လို့… Reply	winnaingoo permalink	18/07/2012 08:52	လေ့လာချင်ပါသည်
Reply	winnaingoo permalink	18/07/2012 09:07	like
Reply	winnaingoo permalink	18/07/2012 09:26	သိချင်တာနဲ့အတော်ပဲဗျို့
Reply	jamekopho permalink	18/07/2012 12:54	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
Reply	မင်းမင်း permalink	19/07/2012 21:28	ဆရာခင်ဗျာ. လိင်တံထဲကိုဆေးထိုးတာဆိုးကျိူးရှိနိုင်ပါသလားထိုးပိးပုံ. မှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခွဲစိပ်ရမှာလား တခြား. နည်းရှိသေးလား ကျွှန်တော်တို့နယ်မှာဆရာဝန်ကနည်း လို့ဆရာရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ ကိုယ်ဘာသာကိုလုပ်လို့ရနိုင်မလား
Reply	lettwebaw permalink*	20/07/2012 15:06	ထိပ်ဆုံးက “ဒါဖတ်ပြီးမှ မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းကြတော်မူ” ဆိုတာလေးကို သဘောပေါက်အောင်သာ ဖတ်လိုက်ပါတော့ ခင်ဗျား။ သည်အကြောင်းက ရေးပြီးသား တင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Reply	Ko Aung permalink	22/07/2012 13:44	ဆရာခင်ဗျား
Reply	lettwebaw permalink*	22/07/2012 14:40	ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်… http://nookycontent.wordpress.com/2012/04/26/request/
Reply	Zin permalink	05/10/2012 04:36	ဟီးဟီ..ရီရတယ်..ဆရာသနားပါတယ်။။
စိုင်းစိုင်း permalink	25/07/2012 20:43	အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် သိပ်နားမရှင်းသလိုဖြစ်နေလို့ဗျ ဟို လေ ကျွန်တော့်မှာချစ်သူရှိပါတယ် သူ့ကိုလဲ သိပ်ချစ်ပါတယ် တစ်ဘ၀လုံးအတွက်ကိုချစ်တာပါ သူကလဲကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပါပဲ ကျွန်တော်သိချင်တာက သူများတွေကပြောတယ်ဗျ ခုခတ်မှာ အတွဲဖြစ်ပြီဆိုရင် ဟိုလို လိင်မှုကိစ္စလုပ်ပေးသင့်တယ်တဲ့ အဲ့ဒါမှ မြဲမြံမှာတဲ့ မဟုတ်ရင် သူများနောက်ပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့ ကျွန်တော်သူ့ကိုသိပ်မြတ်နိုးပါတယ် အဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်လဲမရှိပါဘူး ပြီးတော့ မလုပ်ရက်သလိုပဲ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ရှိတော့ရှိတာပေ့ါ ဒါပေမယ့်ထိန်းချင်တယ်ဗျ စည်းစောင့်ချင်တာပေါ့ဗျာ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်သေးတယ်ဗျ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်တယ် အနာဂတ်အတွက်ပေါ့ အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကလဲ အချိန်တွေကြာဦးမှာလေ အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးနေတာက သူငယ်ချင်းတွေပြောသလိုများမလုပ်ရင် သူကများထားမသွားလို့ပါ ဒါပေမယ့်ယုံကြည်ပါတယ် ဘယ်တော့မှမကွဲဘူးလို့ပေါ့ အခုကလဲ နဲနဲစိုးရိမ်ရုံသက်သက်ပါ အဲ့ဒါလေးကျွန်တော့ကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်
Reply	thiritun permalink	26/07/2012 00:32	ဆရာရဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကို download လုပ်လို့ရလားဆရာ၊ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် download link လေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
Reply	lettwebaw permalink*	26/07/2012 12:26	ကျွန်တော် တင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ဘာသာ ရှိနှင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်စာအုပ်တွေရဲ့ ebooks စာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သည်စာရင်းကို ရှာဖွေပေးတဲ့ ကိုစည်သူအောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက်က ရှေ့ပိုင်းမှာ ebooks များ လုပ်ဖို့ foreverspace.com ကို ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့က အခကြေးငွေနဲ့ ရောင်းခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း royalty ပြန်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှေးတုန်းကပေါ့။ အဲဒီ့ကနေ အခု ebooks တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပုံရပါတယ်။ ၀ယ်ယူထားသူများ၊ ဒါမှမဟုတ် hack လုပ်ပြီး ရယူထားသူများက စေတနာ ဗရပွနဲ့ အလကား ဖြန့်လိုက်ပုံပါပဲ။ အခုတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲတောင် အလိုလို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ IT ခေတ်ရဲ့ လူတကာ ထင်သလို လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို လေးစားရင်းက “နှမျောတသ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့ပြီး” ကျွန်တော်ကလည်း နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတု လိုက်ရပြန်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံး ကြားကြားသမျှ အမျှ… အမျှ… အမျှ… ယူတော်မူကြပါကုန်လော့… (သာဓု… သာဓု… သာဓု…)
နေပျော်တဲ့ဘ၀၊ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င်၊ ရွှင်လန်းတဲ့စိတ်
ဟစ်သာငိုတော့ ချစ်တိုင်းပြည် (တောင်အာဖရိက ဂန္ထ၀င်ဇာတ်လမ်း)
Reply	jamima permalink	02/08/2012 09:52	အသက်ငါးဆယ်ကျော် သွေးဆံ့ုးပြီး ကျန်းမာ နုပျိုဆဲ မိန်းမက ယောက်ကျားနဲ့ အရင်လို ဖိုမကိစ္စ စိတ်မပါတော့တာ ဓမ္မတာပါလား။အရင်လို ပြန်ပြီးဖြစ်အောင် ဆေးသောက်လို့ ရပါသလား။ ရရင် ဆေးညွှန်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြရန် ရှက်နေလို့ပါ။
Reply	lettwebaw permalink*	04/08/2012 09:45	ကျန်းမာရေး ကောင်းနေရင်၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ဆီးချိုအပါအ၀င် ရောဂါ ဖိစီးမှု မရှိရင် ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ အရင်လို စိတ်မပါတော့တာဟာ ရင်ခုန် လှုပ်ရှားမှု နည်းသွားလို့၊ တစ်နည်း ပြောရရင် ရိုးအီသွားလို့သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးဝါး မလိုပါဘူး။ မြင်ဖန်များတော့ ပြယ်၊ နမ်းပါများတော့ လည်သွားတဲ့ သဘောသာ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခု ရသွားအောင် ခရီးထွက်တာမျိုး၊ ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့ အခင်းအကျင်း၊ အဆင်အပြင်တွေ ပြောင်းလဲတာမျိုးက (ဥပမာ – လင်ကိုယ်မယား နှစ်ယောက်တည်း ဖယောင်းတိုင် မီးလေးနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ နေရာလေး တစ်နေရာမှာ စကားလေးတပြောပြောနဲ့ ညစာစားတာ၊ ကမ်းခြေမှာ လက်ချင်းတွဲပြီး လမ်းလျှောက်တာ၊ ညှို့ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ည၀တ် အင်္ကျီလေးနဲ့၊ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရေမွှေးနံ့လေးနဲ့ မီးရောင် မှိန်မှန် အခန်းလေးထဲကို ၀င်သွားတာတွေက) စိတ်ကို အများကြီး ပြောင်းလဲလာစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လိင်စိတ်ဟာ “စိတ်”ကိစ္စပါ။ စိတ်ဆိုတာ အတင်း လုပ်ယူလို့ မရသလို အတင်း ဖျောက်ဖျက်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဆေးဆိုတာတွေကတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဆေးကို အားမပေးတတ်တဲ့သူမို့ သိလည်း မသိသလို ညွှန်းလည်း မညွန်းလိုပါဘူး။ စိတ်ကို စိတ်နဲ့သာ ပြုပြင်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဒါမျိုးက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကြိုးစားနေလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ့်လင်သား ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်အပေါ် ကြင်ကြင်နာနာ၊ မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ကယုကယင်နေတတ်သူ ဖြစ်မှလည်း ရပါလိမ့်မယ်။ “မင်းကလည်း သည်အရွယ်ကြီးကျမှ ဘာအရူးထတာလဲ”ဆိုတဲ့ ကိုယ့်မယားကိုယ် တန်ဖိုး မထားတတ်သူ ယောက်ျားနဲ့ဆိုရင်တော့လည်း မမရဲ့ ကံအကြောင်းတရားလို့သာ အောက်မေ့လိုက်ပါတော့ဗျာ… Reply	jamima permalink	04/08/2012 20:41	ဆရာပြောသလို အချိန်ယူုပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ နှစ်ဦးစလုံး ၀န်ထမ်းဖြစ်နေတော့ အလုပ်တာဝန်တွေပိနေပြီ့း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မောမောနဲ့ ဘာမှကို မလုပ်ချင်ဘဲ အနားယူဘို့ဘဲ စိတ်ကူးတော့တယ်။ ၅၀ ကျော် ရွှေရတု ဟန်းနီးမွန်းခရီးကအပြန် OK ရင် စာရေးပါအုန်းမယ်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
Reply	ုလေ့လာသူတစ်ဦး permalink	11/08/2012 16:55	ဗဟုသုတ အရမ်းရပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။
Reply	ုလေ့လာသူတစ်ဦး permalink	11/08/2012 16:58	မသိတာရှိရင် မေးလို့ ရတာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
Reply	aung moung permalink	13/08/2012 14:15	Dear Sir,
I would like to ask youafew question. Me and my girlfriend made love three days ago and she took Ecee2 that day. We do it again today with using condoms. I would like to know, is there serious side effects if she take Ecee2 again only after three days she took2pills. Please kindly answer me.
Reply	lettwebaw permalink*	14/08/2012 11:34	ဒါဖတ်ပြီးမှ မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းကြတော်မူ…
သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ ပို့(စ်)များများစားစား သိပ်မရှိပါဘူး။ စုစုပေါင်းမှ ၄၇ ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ စုံအောင် ဖတ်ပြီးမှ မေးခွန်းတွေ မေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ရေးပြီးသား ပြောပြီးသားတွေ ပြန်ပြန်မေးနေတာကို မဖြေတဲ့အတွက် မျက်မာန်ရှတော်မမူကြပါနဲ့ခင်ဗျား။ တချို့ဟာတွေ (ဥပမာ – အဖြူဆင်းတာလိုဟာမျိုး) ကို ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ဖြေထားပြီးသား ဖြစ်တာမို့ ကွန်မန့်တွေကိုပါ စုံအောင် ဖတ်ပြီးမှ မေးမြန်းတော်မူကြစေချင်ပါတယ်။ ဖြေပြီးသားတွေကို ထပ်ဖြေတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် အဲလို မေးလာတဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုပါ moderate လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါခင်ဗျား။
Reply	aungkhantkokhant permalink	14/08/2012 16:07	စာသားတွေက အရမ်း စိတ်ဝင်စားလို့
Reply	theinzawoo permalink	15/08/2012 16:11	အားပေးလျက်ပါ
Reply	မိုးညို permalink	15/08/2012 19:45	ဆရာကျွန်တော်လဲတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ မိန်းကလေးတွေ ကလေးမွေးမှ ဗိုက်ကြောပြတ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ဗိုက်ကြောပြတ်တတ်လဲဆိုတာလေး ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဗိုက်ကြောပြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ လူအတော်များများက ကလေးမွေးဖူးတယ်ကြီးပဲ ပြောနေကျလို့ပါခင်ဗျ၊ ဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့သိချင်လို့ပါခင်ဗျ၊ ဆရာဖြေပြီးသားမေခွန်းဖြစ်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဖြေထားပြီးသားဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်ကို လင့်လေးပေးပါခင်ဗျ၊ အဲ့မှာသွားဖတ်ကြည့်မလို့ပါ၊ကျွန်တော် ဆရာ့ ဒီဘလော့မှာ ရှာတာ အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဖြေထားတာမတွေ့လို့ပါခင်ဗျ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ့။
Reply	ရဲနိုင်ဝင်း permalink	23/08/2012 22:14	ဆ၇ာခင်ဗျားကျွန်တော်ကြားဖှုးတာလေးဟုတ်မဟုတ်မေးချင်လို့ပါ။ယောကျာ်းလေးတွေကွန်ပြှုတာသုံးတဲ့အချိန်များ၇င်သားသမီးမ၇နိုင်တော့ဘှုးဆိုတာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာ…?အဲ့ဒါအမှန်ဆို၇င်ဘာကြောင့်ဆိုတာလေးကျေးဇှုးပြု၍ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆ၇ာ၇ဲ့commet တော်တော်များများဖတ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ၇ှာမတွေ့လို့မေးကြည့်တာပါ
Reply	lettwebaw permalink*	24/08/2012 11:42	စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ… Reply	mg D permalink	24/08/2012 03:04	ကျနော့်ကောင်မလေးပာာ..တစ်ခါတစ်ရံဆက်ဆံနေစဉ်(သို့)ဆက်ဆံပြီးတဲ့အချိန်မှာ..ဗိုက်မခံမရပ်နိုင်အောင်အောင့်ပါတယ်..လမ်းတောင်ထမလျှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပါတယ်…။ ကျနော့်အသိအတွဲတစ်တွဲလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်..။တချို့တွေအပြောအရတော့ဆီးထဲမှာပိုးရှိလို့…လို့တော့ပြောကြပါတယ်ခဗျ…အဲဒါကမှန်ပသလား…ကြာရင်ဘာရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါခဗျ..
Reply	ayekyaw permalink	17/10/2012 22:10	မင်းကစွတ်ထောင်းနေတာကို့၊ဖြေးဖြေးလုပ်ပေါ့ကွာ။မသေမချင်းစားရမဲ့ဟာကို။မစားရတဲ့ကလေးအရမ်းငတ်တယ်ဆိုတာ၊ဒါမျိုးနေမှာပေါ့။
Reply	mg D permalink	24/08/2012 03:18	ူသားအိမ်ကိုထိခိုက်မိတာမျိုးလဲမရှိပါဘူး။တစ်ခါဆိုသူ့ အလိုလိုနေရင်းအောင့်လာပါတယ်..ကျနော်သတိထားမိသလောက်ဓမတာမလခင်ရက်ပိုင်းမျိုးမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ သာမာန်မိန်းကလေးတွေဗိုက်အောင့်သလိုမပာုတ်ဘဲ..ဗိုက်ကိုလက်နဲ့ထိလို့မရတဲ့အထိအောင့်ပါတယ်။။ ဆရာရယ်အားကိုးပါတယ်ဗျာ.။ အတတ်နိုင်ဆုံးမြန်မြန်လေးတော့ဖြေပေးပါ…
Reply	lettwebaw permalink*	24/08/2012 11:34	Menstrual cramps (ဓမ္မတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု) ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို သောက်ရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးတွေမှာလည်း အဲဒါမျိုးကို ကုစားနိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အမှန်ကတော့ အဘွားတွေ၊ အမေတွေ အစဉ်အဆက် သုံးခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေ ရှိတတ်တယ်။ အဲဒါတွေက ထိရောက်တတ်ပါတယ်။
Reply	aye myat mon permalink	28/08/2012 23:26	ဆရာ……ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
Reply	ပူစီဖောင်း permalink	29/08/2012 03:23	ဆ၇ာ….အ၇က်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်လို့ ၇လားမသိဘူး
Reply	lettwebaw permalink*	01/09/2012 16:15	တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး။ မီးတောက်အရက်ဆိုတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးလောင်းပြီး မီးရှို့လိုက်ရင်တော့ ရမလား မသိဘူးနော်… Reply	AUNG AUNG permalink	30/08/2012 17:34	မေးစရာရှိလို့ပါ..ဆရာသုတ်ရည်ထွက်တာကိုမမြန်အောင်..ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကျင့်လို့ရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်..အဲလိုမျိုးကျင့်ရင်.ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသလား…လေးစားစွာဖြင့်
Reply	lettwebaw permalink*	01/09/2012 16:12	ဟုတ်ကဲ့… ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ အဲသလို တောင်တွေး မြောက်တွေး အတွေးလွန်ပြီး စိတ်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ Reply	ayemin permalink	09/09/2012 11:00	ကျွန်တော့ရည်းစားကသူများနဲ့မတူဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူ့အစိလေးကအပေါ်မှာသေးသေးလေးပဲတော်တော်လေးကိုကြည့်မှမြင်ရတာသူ.ကိုဖီလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုဆရာတွေ့ကြုံဖူးရင်ရှင်းပြပေးပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
Reply	lettwebaw permalink*	09/09/2012 13:14	အပျိုးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဖတ်လိုက်ပါ။ အစိက အရေးမကြီးပါဘူး။ အပျိုးက အရေးကြီးပါတယ်။ Reply	Zin permalink	05/10/2012 04:39	hehehe…Really laughed!
phyo permalink	11/09/2012 22:13	ဆရာ 1ရက်နေ့က သမီးချစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံမိပါတယ်။ သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ ဆက်ဆံတာပါ။ ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း စိတ်မချရမှာ စိုးလို့ Ecee2 ကို၂လုံးလုံး တခါထဲသောက်ပါတယ်။ နောက်၂ ရက်အကြာ ၃ရက်နေ့မနက်မှာ ဘာမှမစားဘဲ ကားစီးမိလို့ အပြင်ကပြန်လာတော့ ကားမူးပြီးအန်သလို ခါးခါးအရည်တွေ အန်ပါတယ်။ ဘာမှမစားရသေးလို့ အရည်တွေဘဲအန်တာလား???ဆေးတွေပါသွားတာလား???သမီးရာသီလာရမယ့်ရက်က ၁၀ ရက်နေ့လောက်ကျပါတယ်။ခါတိုင်းလဲ ရာသီလာခါနီးရင် ခါးကိုက်တတ်ပေမယ့် ခုတော့ ခါးတွေလဲ အရမ်းနာပြီး ဆီးသွားရင်လဲနဲနဲ ကျင်ပါတယ်။ ရာသီလဲမလာသေးပါဘူး။ ခေါင်းမူးတာအန်တာတော့ မရှိပါဘူး။ သူ့ဆီမှာလဲ ဘာရောဂါမှ မရှိပါဘူး။ဆီးပူညောင်းကျ ဆိုတာလဲကြာုဘူးတော့ စိုးရိမ်လို့ပါ။ကိုယ်ဝန်ကော ရနိုင်ပါသလား???
Reply	lettwebaw permalink*	12/09/2012 13:27	ထင်တာတွေ အကုန် လုပ်ပြီးပြီမို့လား… ခုမှ ဘာစိုးရိမ်နေတာလဲ… ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံပေါ့အေ… ဒါပဲ ပြောစရာ ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ နေစမ်းပါဦး။ သူ့ဆီမှာ ဘာရောဂါမှ မရှိပါဘူးလို့ ညည်းက အပိုင်ပြောနိုင်အောင် ညည်းက ဆရာဝန်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းမှူးလား။ ဖာသည်ဆီသွားတာ အလွန်ဆုံးမှ နာရီဝက်ပဲ ကြာတယ်ဟေ့။ ဖာသည်နဲ့ အိပ်တာလည်း ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာ ညည်း အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပေါ့အေ။ ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိတ်တိတ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာ ရွှေဦးနှောက်ကြီးနဲ့ မြဲမြဲ မှတ်ထားလိုက်ပါ။ Reply	Zin permalink	05/10/2012 04:40	Good!
nay permalink	18/10/2012 13:19	ဆေးညွှန်းလေတော့ သေသေချချဖတ်ကြည့် ပါဦးဗျာ
Reply	တာယာ permalink	17/09/2012 19:13	ဆရာ ကျနော့် ကောင်မလေး တစ်လထဲမှာ ဓမ္မတာ နှစ်ကြိမ်လာတယ်လို့ ပြောမယ် ဆရာ အဲဒါမျိုး ဖြစ်တတ်လား ကျနော် ဆရာရဲ့ မီးငယ်တို့ အသိကြွယ်ဖို့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်တယ် ဆရာ အဲလို မပါဘူး သန္ဓေတားဆေးသောက်ရင်သာ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ် ဆရာ ကျနော်တို့က ဘာမှ လွန်ကျူးထားတာ မရှိပါဘူး ဆရာ အဲဒါ ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေလို့ ဆရာဆီကို အကူညီတောင်းကြည့်တာပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါနော် ဆရာ
Reply	myothantkyaw permalink	17/09/2012 21:47	good
Reply	myothantkyaw permalink	17/09/2012 21:50	go ahead brother
Reply	thar nge permalink	19/09/2012 18:24	ဆရာရေ…
ကျွန်တော်မိန်းမရတာ (၂) လ လောက်ပဲရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်အသက်က ၂၆ နှစ် မိန်းမအသက်က ၁၉ နှစ် ပါကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလိုလို လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ပါတယ် နေ့တိုင်း
လိင်ဆက်ဆံရင်ပြသာနာရှိမရှိ နောက်ပြီး တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှကြိမ်လောက် လိင်ဆက်ဆံသင့်ပါသလဲ ဆရာ့ရဲ့အကြံပြုစကားကိုသိပါရစေခင်ဗျား။
Reply	မိန်းမသား permalink	08/10/2012 01:26	ဆရာ..
သမီးအသက် (၂၆) နှစ်ပါ။ သမီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကစပြီး ချစ်သူတစ်ယောက်ထားမိပါတယ်။ သူက (၂၇) နှစ်ပါ။ ချစ်နေကြတာတော့ကြာပါပြီ။ အဖြေပေးတာကတော့ ၂ လလောက်ပဲရှိသေးတာပါ။ ချစ်သူဖြစ်သွားပေမယ့်လည်း သိပ်မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်လောက်က ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် သူနဲ့တွေ့ဖြစ်တော့ သူကလူအသွားအလာနည်းတဲ့နေရာကို သမီးကိုခေါ်သွားပြီး နမ်းတယ်ဆရာ။
နှုတ်ခမ်းကို နမ်းပြီး သူ့လျှာကြီးကိုလည်း ဇွတ်ထည့်ပါတယ်ဆရာ။ သမီး ရုန်းပေမယ့်လည်း သူ့အားကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူးဆရာ။ ပြီးတော့သမီးကိုတအားဖက်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ဇွတ်ကပ်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးတင်ပါးနားကိုလည်းကိုင်ပါတယ်ဆရာ။
သမီးအရမ်းရှက်ပါတယ်ဆရာ။ သူက သမီးကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ အခုတော့ သမီးအလိုမတူဘဲ အကြမ်းနည်းနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်ဆရာ။
သမီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆရာ။ သူ သမီးကို တကယ်မချစ်လို့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလို့ပဲ ထင်ပါတယ်ဆရာ။
သမီးကိုယ်သမီး မသန့်ရှင်းတော့ဘူးလို့ ထင်မိနေပါတယ်။ သမီးအတွက် ပထမဆုံးပါဆရာ။
သမီးကို ကိုယ့်သမီးလေးလို သဘောထားပြီး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါနော် ဆရာ။
Reply	loveowner1994@gmail.com permalink	10/10/2012 01:47	အဲ့ဒါက အစ်မ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ထင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တ်ေတို့ယောကျာင်္းလေးတွေက အဲ့လိုလုပ်ရတာ ၀ါသနာကိုပါတာ အစ်မရဲ့ အပြစ်ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့ ကျွန်တော့် စော် ကလဲ အစ်မ လိုပဲ ဒါပေ မဲ့ ကျွန်ော်က သူ့ကိုချစ်လို့ လုပ်တာလေ အစ်မ ဘြ ကလဲ အဲ့ လို ပဲ ဖြစ်မှာပါ လိုက်လျော ကြည့်ပေါ့ အဆုံးစွန်ထိတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ အစ်မဘက်ကပေးရင်သူ အစ်မကို ပိုချစ်လာပါလိမ့်မယ်
Reply	lettwebaw permalink*	21/10/2012 16:03	အင်း… မဖြေဘဲနေမိတော့ ကြားက တစ်ယောက်က ၀င်ဖြေသွားတယ်ပေါ့။ ဘယ်လို ဖြေရမှန်း မသိလို့ မဖြေတာပါ။ အခုတော့ သိပါပြီ။ သမီးအနေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ “မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုသာ ရှာပြီး လုံးစေ့ ပတ်စေ့ သေချာ ဖတ်ရင် လိပ်ပတ်လည်သွားမယ်လို့သာ ဖြေလိုက်ပါရစေ။
Reply	မိန်းမသား permalink	23/10/2012 22:05	ဟုတ်ကဲ့…
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ဆရာပြန်ဖြေတာကို မသိဘဲ သမီး ထပ်ခါထပ်ခါ မေးမိတာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်…
သမီးရှာပြီးဖတ်လိုက်ပါမယ်နော်…အခုလို ဂရုတစိုက်ပြန်ဖြေပေးလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
အမည်မသိ permalink	15/10/2012 14:46	ဆရာ မသိတာတွေ သိသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
Reply	kowai permalink	21/10/2012 01:38	ဆရာခင်ဗျား
ကျွန်တော့်အသက်က ၂၂ ရှိပါပြီ..ဒါပေမယ့်လူကောင်က မထွားဘူးဖြစ်နေပါတယ်
အရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မပါ ။ အလေးချိန်က ပေါင် ၁၀၀ ပဲရှိပါတယ်
ခါးဆိုရင် ဘောင်းဘီ ၂၈ ဆိုဒ်တောင်ချောင်နေပါတယ်..
လက်မောင်းသေးသေး ပေါင်တံသေးသေးနဲ့ အ၀တ်အစား ၀တ်ရတာတောင်အဆင်မပြေပါဘူး..
ကျွန်တော် ၁၉ နှစ်လောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ အလေးမဖူးပါတယ်
်သူတို့က အဲဒိအချိန်မှာပဲ သိသိသာသာ ထွားတက်လာပြီး ကျွန်တော်က ကျန်ခဲ့ပါတယ်..ခုတော့မဆော့ဖြစ်တော့ပါဘူး..ရေပဲကူးပါတော့တယ်
ကျွန်တော်သိချင်တာက အဲဒါက ငယ်ငယ်တုန်းက လိင်တံအရေပြား မဖြတ်ခဲ့လိုလားဆိုတာပါ..ကျွန်တော့် အစ်ကို ကိုငယ်ငယ်တုန်းက မိဘတွေက ဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်..ခုတစ်လောတော့ မိဘတွေနဲ့အဲဒိကိစ္စကို ပြောကြည့်ပါတယ်..သူတို့ကလဲအဲလိုထင်ပါတယ်..ကုလားတွေလိုရှင်ပြုတာပေါ့ဗျာ
ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးတွေကော ရှိနိုင်လား ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ လုပ်လိုရမလဲသိချင်ပါတယ် ။
အရပ်က ၅ ပေ ၃ လက်မပါ ။ အလေးချိန်က ပေါင် ၁၀၀ စွန်းစွန်းပဲရှိပါတယ်
ခါးဆိုရင် ဘောင်းဘီ ၂၈ ဆိုဒ်တောင်ချောင်ချင်နေပါတယ်..
Reply	lettwebaw permalink*	21/10/2012 06:01	လူကောင်ထွားတာနဲ့ အရေပြားနဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါ။ အာဟာရ ပညာရှင်တွေရဲ့ အလိုအရတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်ရဲ့ အာဟာရဟာ မွေးလာမယ့် ကလေး အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အလုံးအဖန်ကို ပျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ပထမ သုံးလမှာ မိခင် စားတဲ့ အာဟာရက အဲဒီ့ကလေး လူလားမြောက်ချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အရပ်အတွက် အာဟာရ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ သုံးလမှာ မြန်မာ မိခင်အတော်များများဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ အစားအသောက်ပျက်နေကြတာကြောင့် အာဟာရ ချို့တဲ့ ကုန်ကြတာမို့ မြန်မာ အတော်များများမှာ အရပ်နိမ့်နေကြတာလို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ နောက်ပိုင်း မမွေးခင် အချိန်အထိ စားသမျှကတော့ နောင်ဖြစ်လာမယ့် အလုံးအဖန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ သူများနဲ့ မယှဉ်ပါနဲ့။ အရပ် မမြင့်သူ၊ ပိန်လှီသူတွေထဲမှာလည်း လူတော်တွေ၊ ထက်မြက်သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အရပ် ဘယ်လောက် မြင့်ပြီး လူကောင် ဘယ်လောက်ထွားနေနေ အသိဉာဏ် နိမ့်ပါး ပိန်လှီရင် အလကား လူပါပဲ။
Reply	kowai permalink	21/10/2012 21:12	ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ..ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါမယ်
မိန်းမသား permalink	21/10/2012 11:57	သမီးမေးတာလေး ဖြေပေးပါဦးနော် ဆရာ။
အခြား သူငယ်ချင်းများလည်း အကြံဥာဏ်လေး ပေးကြပါဦး
Reply	မိန်းမသား permalink	21/10/2012 12:02	loveowner1994@gmail.com >>ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြောသွားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူ အစ်မကို တန်ဖိုးမထားလို့လုပ်တာလို့ အစ်မခံစားနေရလို့ပါ။
ကြာလာရင် အစ်မရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုတောင် အစ်မစိုးရိမ်လာတယ်။
ဒါကြောင့် ခုသူ့ကို ဖြတ်လိုက်တယ်။
Reply	thanzawoo permalink	21/10/2012 13:35	want to know
Reply	mon mon permalink	23/10/2012 09:47	ဆရာther nge မေးတာသမီးလည်းသိချင်ပါတယ်။လက်မထပ်ရသေးဘဲအဲ.လိုလုပ်ရင်ရောကြာရင်ယောက်ကျားလေးဘက်ကရိုးသွားမှာလားဆရာ။
Reply	toe permalink	31/10/2012 18:23	thank ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူး
Reply	black smoker permalink	03/11/2012 16:22	လိင်တူဆိုဒ်က ၀င်လို့မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ် ကျွန်တော်သိချင်တာက မိန်းကလေးချင်းဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကို အတွင်းကျကျသိချင်တာပါ မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ အတွင်းသိအဆင်းသိတွေလေ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် တော်တော်ဗဟုသုတ ရမယ်ထင်လို့ပါ
Reply	lettwebaw permalink*	03/11/2012 16:34	ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲဟန်… လိင်တူဆိုက်နဲ့ ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်နေလို့ပါလဲ
Reply	ရှမ်းလေး permalink	08/11/2012 18:54	သိချင်ရင်ကိုယ်တိုင်လိင်တူနေကြည့်ပေါ့….
Reply	မင်းမင်း permalink	10/11/2012 01:04	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	အိုက်ပန် permalink	15/11/2012 16:19	ကျွန်တော်လိင်ဆက်ဆံရင် သုတ်လွှတ်တအားမြန်ပါတယ်…တက်ထွက်..လို့ပြောလဲရပါတယ်..ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးနဲ့အတူနေဖို့ ပျိုးနေတဲ့အချိန်ပဲကြာလို့လားဆရာ..တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအားကိုးရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်…အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်ရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါထိပ်ဖူးနဲ့ အရစ်နားကို ပွတ်တိုက်ရင် ခဏလေးကြာအောင်တောင် တောင့်မထားနိုင်တော့ပဲ…လွှတ်မိပါတော့တယ်…
အချိန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ၁ မိနစ် ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်….ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးလုပ်ရင် ခပ်သွက်သွက်လုပ်လိုက်ရင် တစ်မိနစ်တောင် မကြာဘူး လေးငါးချက်လောက်ဆို ထွက်သွားပါတော့တယ်..နောက်တစ်ခုက အတူနေကြတဲ့အခါ ကိုယ်က သမာရိုးကျအတိုင်း အပေါ်ကနေ မှောက်ရင် ပိုမြန်ပါတယ်ဆရာ….
အဲဒါကြောင့် ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကလည်း အများဆုံးသုံးကြတဲ့ပုံစံမှာ error ဖြစ်နေတယ်။မထိရင် မရတဲ့နေရာကလည်း error ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ စိုးရိမ်နေပါတယ်….. အဲဒါဘယ်လိုပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မလဲ..ဆရာ..အိမ်ထောင်ရေးကို ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်လို့ပါ…..
စိတ်ကြောင့်လား..ကျန်းမာရေးကြောင့်လား…ဆရာ့စာတွေရော ..comments တွေမှာ ရှာကြည့်တာ မတွေ့မိလို့ပါ…သင်ပြပေးပါအုံး…..ဆရာ…
Reply	minnthitlwin permalink	17/11/2012 16:43	နှစ်ခုစလုံး ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်…။ တစ်ကယ်လို့ စိတ်ကြောင့်လို့ ထင်ရင်တော့ ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာ သိပ်ပြီး စိတ်မနစ်သွားဖို့ (ဖီလ်းအရမ်းမတက်ဖို့) ကြိုးစားကြည့်ပေါ့..။ အဲဒါတွေက စာအုပ်တွေမှာလည်း ပါပါတယ်။ တစ်နေရာရာကို စိတ်လွှတ်လိုက်တာတို့.. ဘာမှ မဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခု တွေးလိုက်တာတို့ပေါ့။ သုတ်လွှတ်ချင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဥပမာ.. ကြည့်ဖူးတဲ့ သရဲကားတစ်ခုခု စဉ်းစားလိုက်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့ဗျာ။
သိသလောက်လေး share တာပါ..။ တစ်ကယ်လို့ ကျန်းမာရေးကြောင့်ထင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပေါ့။ ဆေးတွေလည်း ရှိတယ်လို့တော့ကြားဖူးပါတယ်..။ သုံးလို့ ကောင်းလား မကောင်းလားတော့ မသိဘူး..။ အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးရင်လည်း ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။
Reply	zayyar permalink	21/11/2012 00:28	ဆရာသိချင်တာကတော့ရာသီသွေးလာခြင်းဆိုတာကိုenglish လိုသိချင်ပါတယ်ဆရာ ကူညီပါနော်………thank
Reply	lettwebaw permalink*	21/11/2012 11:06	menstruation (n)
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က သည်မေးခွန်းကို မေးထားတာတော့ နည်းနည်း ဆန်းတယ်နော်။ Reply	Moe Sweet permalink	21/11/2012 11:10	နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။
အရပ်စကားနဲ့ ဆို period
ယဉ်ယဉ်ပေကျးကျေးပြောရင် time of the month လို့လည်းခေါ်ကြသေးသဗျ။
Reply	မျိုးစည်သူ permalink	23/11/2012 16:36	တော်တော်လေးကိုဗဟုသုတရသွားပါတယ်
Reply	wailinsoe permalink	23/11/2012 19:07	ဆရာ ကျွန်တော်မသိလို့မေးပါရစေ။အမျိုးသမီး ရာသီလာချိန်မှာဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရတက်ပါသလား
Reply	Mg Mg Soe permalink	27/11/2012 21:27	ဆရာစီမှာလဲ ဒုက္ခသယ် ပေါင်းသောင်းခြေက်ထောင်နော်…ကွန်မန့်တွေက တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုး
ရဘူး..တော်တော် လဲ အဆန်းပဲနော် ….သြော် လူတွေ လူတွေ…….
Reply	naymin permalink	28/11/2012 06:04	ကျေးဇူး
Reply	mgmyanmar permalink	03/12/2012 02:31	ရယ်လို့လည်းကောင်း၊ စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း ညီအကို မောင်နှမတွေ ၀ိုင်းဖွဲ့ စကားပြောနေကြရသလိုပဲ။ အားလုံး ကိုယ်စိတ်၂ပါး ချမ်းသာကြပါစေ။
Reply	leyaungdo permalink	04/12/2012 13:59	အဖွဲ.ဘယ်လိုဝင်လည်း
Reply	Minzy permalink	23/12/2012 19:37	ဆရာရေဖြေဖြစ်အောင်ဖြေပေးပါနော်။ကျွန်တော်လိင်မခံစားဘူးလို့ဘယ်သွားလုပ်ရမလဲ။
Reply	lettwebaw permalink*	23/12/2012 20:16	ရေချိုးခန်းထဲ သွားလုပ်ပေါ့ဗျာ Reply	မောင်လမင်းအောင် permalink	26/12/2012 12:40	မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်က ဒီဆိုဒ်လေးကို ကျွန်တော်ဘလော့လေးကတစ်ဆင့်ရောက်လာတာပါ အဲဒီမှာ အပျိုစစ်မစစ်ဆိုတာကို ၀င်ဖတ်သူအများစုဖြစ်ပါတယ် ထူးဆန်းတာနဲ့ဝင်ကြည့်တော့ လိင်ဆက်ဆံရေးပညာပေး တွေတွေ့ ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဗျာ ….ကိုယ်ကပေးသူဆိုတော့ ကိုယ်အနေနဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်မူကို ရပေမဲ့ယူသူကလဲံ သုံးတတ်မှသာ အဲဒီအရာ ပေးသူရောယူသူပါ အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် တန်းဖိုးထားမသုံးတတ်သူနဲ့ တွေရင် မကောင်းတဲ့ ဖက်ကို ဦးတည်သွားနိုင်တာမို့မိတ်ဆွေရဲ့စာတွေကို အသက်ပြည့်သူတွေကို သာ ဖတ်စေချင်ပါတယ် ဒါဟာ လိမ်လည်လို့ ရတာကလဲ ပြဿနာဖြစ်နေပြန်တယ်လေ အဲဒါကြောင့် ချင့်ချိန်ပြီးမှသာ ပညာတွေကို ပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါ အကြံပေးတာပါ http://www.mglaminaung.tk
Reply	linlinnay permalink	30/12/2012 00:57	ပဲကလည်းများပါ့
Reply	photoke permalink	01/01/2013 21:08	ဒါကလောကီမှာနေရင်မကင်းနိုင်လို့ဖိုမကိစ္စကိုသိချင်တယ်ဖော်ပြပေးတာကျေးဇူးပါ
Reply	တောသားလေး permalink	06/01/2013 21:06	ဆရာရေ ကျွန်တော်မှာ မေးစရာတွေရှိနေတယ်ဒါပေမယ့် ဆရာဆီကိုဘယ်လိုမေးရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ပါ ဆရာအီးမေလ်ကိုလဲ ကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေလို့….ဒီနေရာကနေပဲကျွန်တော်မေးလိုက်တော့မယ်ဆရာရေ
…………ဖြစ်တာကဒီလိုဆရာရေ ကျွန်တော် ၈တန်းနှစ်လောက်မှာ ဘောလုံးကန်ရာကနေ ဖြစ်လာတာပါ
ဘောလုံးကန်ရာကနေ ကျွန်တော်ဝှေးစေ့မှာထိသွားလို့ အဲဒါဘယ်ဘက်ဖြစ်နေလို့လေ အဲဒီတုန်းက ဖြစ်
သွားတော့ ရောင်တယ်..ဒါပေမယ့် နယ်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်မှာ ရွာကကျန်းမာရေးမှူဆီသွားပြီးတော့ ပြလိုက်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဘယ်ဖက်က ဝှေးစေ့ကပုံမှန်ဖြစ်မလာတော့ပါဘူး…ကြီးနေတယ်ပေါ့ဆရာရေ
ဒါမေယ့် သတိမထားမိပါဘူး ပြီးတော့ စာမဖတ်တာလဲပါတာပေါ့ဆရာရေ ဗဟုသုတလဲမရှိဘူးပေါ့….ကျွန်တော်အခု အသက် 25 နှစ်ရောက်လာပေမယ့် နာတယ်ဆိုတာတော့မရှိခဲ့ဘူး အခုမှနာလာတယ်ဆရာ အဲဒါဆေးခန်းသွားပြလဲ ဆေးပဲပေးလိုက်တယ် အခုတော့ မနာတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကြောက်တာက အိမ်ထောင်ပြုရင် ကလေးရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ…..ပြီးတော့ ဆရာရေ တစ်ခါတစ်လေ အောင့်အောင့်နေတယ်
……..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်မှာ ချစ်သူရှိပါတယ်ဆရာ တကယ်လို့ ကျွန်တော်ကလေးမရနိုင်ဘူး
ဆိုရင် လူ့ဘ၀ကြီးမှာတစ်ယောက်တည်းနေပါတော့မယ် ….ကလေးမရနိုင်တော့ အိမ်ထောင်ရေးထိခိုက်
နိုင်တယ်လေ ..ကျွန်တော်ကအတွေးတော့ခေါင်တယ်ဆရာ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်လဲ
Reply	lettwebaw permalink*	06/01/2013 22:35	ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်မှ အဖြေမှန် သိရမှာပါ။
Reply	Mar Lar permalink	13/01/2013 17:37	ဆရာ့ကို ကျွန်တော် တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဆရာ……..ကလေးအမွှာရှိတယ်ဆိုတာ ယောက်ျားပေါ်မှာ မူတည်တာလား?မိန်မပေါ်မှာမူတည်တာလား?ဆိုတာကိုပါ………
Reply	lettwebaw permalink*	16/01/2013 05:07	သိဘူးဗျ။
Reply	Ko Aung permalink	22/01/2013 18:16	ဆရာခင်ဗျား
သားငယ် သမီးငယ်များ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းခြင်း အနုပညာစာအုပ်မှာ
Reply	lettwebaw permalink*	23/01/2013 06:53	မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကာလမှာ အဲဒီ့နည်းကို ကန့်ကွက်ကုန်ကြပါပြီ။ အခန့်မသင့်ရင် ကလေး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ ခင်ဗျ။
Reply	moemoe permalink	27/01/2013 23:13	ဆရာ…ကျွန်တော့ ကောင်မလေးက သူ့ယောနိကို ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ခိုင်ပါတယ်… ယောကျာ်းလေး တစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်မသင့် သိချင်ပါတယ်
Reply	lettwebaw permalink*	01/02/2013 18:17	ဟုတ်… ကျွန်တော် တရားသူကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ Reply	KGK permalink	06/02/2013 10:35	ဆရာခင်ဗျ။ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့အကြိမ် တော်တော်များများမှာ တော်တော်လေးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင် ထုံကျဉ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်သွားတာတောင် မသိလိုက်တဲ့ အခါမျိုးတွေရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ဆရာ။
Reply	minn myat permalink	06/02/2013 21:10	ဆရာရေ.. ကျွန်တော် ဆရာ့ email ကိုရှာလို့မရလို့ပါဗျို့ .. ဆရာ့စာအုပ် ၃ အုပ်ရှိပါတယ်… “ဘဝအမောပြေဖို့ အဖြေရှာစို့” ရယ် “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့” ရယ် “ယောက်ျားသားချင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း” ရယ်ပါ… ဘယ်စာအုပ်မှာမှ ဆရာ့ email ရှာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ.. ကျွန်တော် ဆရာ့ကို မေးစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါ.. ကျွန်တော့်ကို ဆရာ့ email လေးပြောပြနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ…
Reply	lettwebaw permalink*	07/02/2013 02:19	Reply	minn myat permalink	07/02/2013 18:28	ဘာလို့လဲဟင်?
Reply	lettwebaw permalink*	11/02/2013 13:42	ခက်ပါ့… အိုက်စာအုပ်တွေထဲက email က ကျွန်တော့် email ပါပဲ ခင်ဗျ…:(
Reply	minn myat permalink	11/02/2013 22:24	အော်… သိပါဝူး.. စာအုပ်တိုက်ရောက်သွားမှာစိုးလို့ Reply	khantnaing permalink	19/02/2013 20:06	ဆ၇ာ
ကျနော် အသက် ၂၆ ပါ
ဆေးထိုးတာထက်စာ၇င် ဒီ လေစုပ်တဲ့ဟာကပို ဘေးကင်းမယ်လို့လဲထင်လို့ပါ
Reply	lettwebaw permalink*	02/03/2013 14:34	အင်း… သည်ရောဂါကလည်း မသေးဘူး Reply	moemoe permalink	19/02/2013 23:54	ဆရာ..ကျွန်တော့မိန်းမနဲ့ဆက်ဆံတာ သုတ်လွတ်အရမ်းမြန်နေပါတယ်… ဆရာ့နည်းလေးတွေတိုင်းကျင့်ပါတယ် အဆင်မပြေပါ ကြာဆေးသုံးဖို့လိုသလား လိုရင် ရင်သွေးနဲ့ကျွန်တော့ ဇန်ီး..မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်လားဆရာ ဒါလေးသိချင်ပါ..ကြာဆေးသုံးရင်လည်း ဘယ်လိုဆေးမျိုးမှီဝဲသင်လဲဆရာ..
Reply	nautralism permalink	20/02/2013 16:58	အသစ်တွေပေးးးပါ……….
Reply	morph permalink	02/03/2013 23:20	ဆရာ။ကျနော့်အသက်၁၈နှစ်ပါ။ ကျနော့်မှာချစ်သူရှိပါတယ်။ကျနော်ကိုယ့်ချစ်သူကို တာဝန်မယူနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ မကျူးးလွန်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်တချို့ပြောကြတာက မိန်းကလေးတွေကဘယ်လောက်ပဲချစ်တယ်ပြောပြော ကိုယ်ကဟိုဟာမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဟိုဟာလုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ပါသွားမှာပဲ တဲ့။အဲဒါဟုတ်လားဆရာ။မိန်းကလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုသေချာသိချင်ပါတယ်။
Reply	lettwebaw permalink*	02/03/2013 23:43	ဟိုဟာလုပ်တဲ့သူနောက် ပါသွားရိုးသာမှန်ရင် ကိုယ့်လူရယ်… သူက ချစ်တာမှ မဟုတ်တာပဲ… ဟိုဟာပဲဟာ… ပါပစေပေါ့။ ဘာ လွမ်းစရာ ရှိမှာလဲ။ ချစ်သူနဲ့ ဟိုဟာနဲ့မှ မကွဲရင် လွဲတာပေါ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင်းလာတဲ့ လင်မယားပေမယ့် လင်ငယ်နောက် လိုက်သွားတဲ့ မိန်းမတွေကရော… ဟိုဟာလုပ်လို့ ပါသွားတာလားငှင်င်င်… ဦးနှောက်သုံးပါ ကိုယ့်လူရာာာာာာာ Reply	roshan permalink	04/03/2013 22:01	ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆေးထိုးထားတာ..ခုခနခနပြန်ပိးဆီးခုံကနေေ၇ာင်နေပီး..အ၇င်းမှာပါေ၇ာင်နေတယ်..ခနခနဖြစ်နေတယ်..ဆေးခန်းသွားပြတော့အပူဆိုပီးတစ်ပါတ်လောက်နေ၇င်ပျောက်ပါတယ်..အဒါဆ၇ာဖြစ်လာလာ၇င်ဘယ်လိုဆေးသောက်၇တယ်ဆိုတာလေး၇ယ်..ဘယ်လိုလုပ်၇င်ပျောက်မလဲဆိုတာလေးပြောပြလို့၇၇င်ကူညိပါအုန်းနော်
Reply	koko permalink	06/03/2013 19:13	ဆရာ.. ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား…
အပျိုအမှေးပါး မပေါက်သေးဘဲနဲ့ရော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား…
သုတ်မထွက်ဘဲ.. အင်္ဂါ၂ခု တစ်ခဏ ထိရုံနဲ့.. အပျိုမှေးလည်း မပေါက်သေးဘဲနဲ့.. ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်… အဲ့လိုခဏထိရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားဆရာ…???
Reply	koko permalink	07/03/2013 17:39	ဆရာရေ… မဖြေပေးဘူးလားဟမ်??? သိချင်လို့ပါဆရာ.. အရေးကြီးလို့ပါ..
Reply	lettwebaw permalink*	07/03/2013 17:50	http://nookycontent.wordpress.com/2012/04/26/request/
Reply	koko permalink	07/03/2013 18:36	တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ… ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်ကိစ္စပဲကိုယ် အရေးကြီးတယ်ထင်မိလို့ပါ…
Reply	mg permalink	11/03/2013 20:03	လုပ်တာနဲ့ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား ဘယ်အချိန်တွေမှာလုပ်မိရင် ကိုယ်ဝန်ရမလဲ ဘယ်အချိန်တွေမှာလုပ်မိရင် ကိုယ်ဝန်မရဘူးဆိုတာဖြေကြားပေးပါ အပျိုမှေးပေါက်သွားရင်ရော ဘယ်လိုနေလဲ(မိန်းကလေးကကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်လို့ပါဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	20/03/2013 02:59	ဖြေထားတာတွေ သည်ထဲမှာတင်ရှိတယ်။ တစ်ဆိတ် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှာဖတ်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျ။
Reply	ကိုမောင်ဇော် permalink	14/03/2013 12:09	ဆရာခင်ဗျား …ဆရာ.ရဲ.စာဖတ်ပရိတ်သတ်တဦးအပြင်ဆရာ.ရဲ.facebookအကောင်.မှာlikeလုပ်ထားတဲ.ပရိသတ်တဦးပါ။ကျွန်တော်.ရဲ.အတွင်းရေးပြသနာလေးကိုတင်ပြချင်လို.ပါ။ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာ……
Reply	lettwebaw permalink*	20/03/2013 02:57	ပြောကြည့်ပါခင်ဗျ။
Reply	tharginwe09@gmail.com permalink	20/03/2013 02:25	သိချင်းတာလေး တစ်ခုမေးပါစေဆရာ
ကျွန်တော်ဟာ အသက်၁၆နှစ် ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ
မဆက်ဆံဖူးသေးပါဘူး အဲဒါကြောင့်လား မသိဘူး
ထင်ပါတယ် စိတ်ကိုသိပ်မတိမ်း နိုင်ပါဘူး အဲဒါ
စိတ်ကို ဘယ်လို ထိမ်းရမလဲ သိမ်းရမလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗှာ။
Reply	lettwebaw permalink*	20/03/2013 02:55	အားကစား တစ်ခုခု ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုက်စားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြား ၀ါသနာ ပါရာ အနုပညာတစ်ခုခု (ဥပမာ – ပန်းချီ၊ တူရိယာတစ်ခုခု တီးမှုတ်တာ)ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သင်ယူလေ့ကျင့်တာမျိုးလည်း ထပ်ဆောင်းပြီး လုပ်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
Reply	tharginwe09 permalink	28/03/2013 06:42	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…ဒါပေမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ် တော်တော်များများကို
ကျွန်တော် ဖတ်သင့်သလောက်ဖတ်ဖူးပါတယ် အဲဒီထဲမှာပါ ယောက်ကျားတွေရဲ့
အနေနဲ့တော့ မိန်းမလည်းမရှိဘူးဆိုရင် အဲဒါတစ်ခုဘဲရှိတယ် ဆရာ ကျန်တဲ့ဟာတွေ
သွားရင်လည်း ရောဂါတွေက ရှိသေးတယ်၊ ဒါဆိုလူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်း
က အဲဒီဟတ္ထမေထုန်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့် ပါလာခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆရာ အဲဒါ
လေးကိုပြောပေးပါဆရာ အဲလိုလက်နဲ့ဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုလို့ဘဲ ပြောချင်ပါ်
တယ် အဲလိုအကျင့်ရှိနေတဲ့ယောက်ကျားတွေ အိမ်ထောင်ကျရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ
ဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ…။ သုက်သွေးမှာရော သန်စွမ်းတဲ့ သုက်ပိုးတွေပါနိုင်သေးလားဆရာ
ြီပီးတော့ သူတို့တွေဟာ ကိုယ့်မိန်းမကိုကိုယ် စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်း
ရှိးသေးလားဆရာ မေးခွန်းတွေများတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ဆရာရေ ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးချင်နေတာကြာပါပြီ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးလို့မရလို့ပါ အခုကံတ
တရားကြောင့်ဆရာနဲ့တွေတာကို ကျွန်တော့်ကို မငြိုငြင်ဖြေပေးပါနော် ဆရာ….။
lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:55	ဖတ် ဖတ် ဖတ်
wa tote permalink	24/03/2013 23:16	ဆရာ..ကျွန်တော့် ဖွားဖက်တော်ရဲ့ ထိပ်ကို မဖြတ်ရသေးပါဘူးဆရာ..အဲ့ဒါမဖြတ်ဘဲနဲ့ကောဆက်ဆံလို့ရလားဆရာ…
Reply	lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:55	ထိပ်ကို ဘယ်လောက် ဖြတ်မှာလဲဟင်… သုံးလက်မကနေ ငါးလက်မ အထိ ဖြတ်လိုက်ပါလား။ တစ်ခါတည်း ကိစ္စတုံးသွားအောင်…
ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ မသိဘူး။
Reply	pratise နည်းသူ permalink	29/03/2013 16:59	ကျွန်တော်အသက် ၂၆နှစ် ရှိပါပြီ မိန်းမနှင့် အတွေ့အကြုံ နည်းပါတယ် ကိုးလေးကိုးသုံး ဘဲများပါတယ်
အဲလိုလက်နှင့်မိန်းမ ရရင်အခက်ခဲတွေ ကြုံနီုင်ပါသလား၊ ကလေးမရနိုင်တာမျိုးကော ဖြစ်နိုင်ပါသလား
တစ်ခါတစ်လေ လက်နဲ့ဖြေဖျောက်ပြီး လိင်တံထဲမှာ သုက်ရည်တွေကျန်နေတတ်ပါတယ် အဲဒါကိုဘယ်
Reply	lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:51	ဖတ် ဖတ် ဖတ်
Reply	မောင်လက်တွေ့ permalink	29/03/2013 17:59	လေးစားရပါသော ဆရာခင်ဗျာ
အခုကျနော်မေးမဲ့မေးခွန်းကို ကျေးဇူးပြုပြီးမဖြေဘဲမနေပါနဲ့ခင်ဗျား ကျနော်သည်ဆရာရေးထားတာတွေ
ကိုစုံအောင်တော့မဖတ်ရသေးပါဘူး၊ အလုပ်တွေများလို့ပါ အဲဒါကြောင့်လည်းဒီနေရာမှာဘဲ ဖြေပေးစေချင်ပါ
တယ်ခင်ဗျာ။ကျနော်ဟာ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကလေးချောချောလေးတွေတွေ့ရင်
စွဲလမ်းတာမျိုးလားတော့မသိပါဘူးသူတို့ကို အလိုလိုခင်တွယ်နေမိတယ် ဆရာ အဲဒါဟာ အခြောက်စိတ်လို့ပြောလို့ရလားဆရာ…။ ကျနော်အခြောက်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဆရာနည်းလမ်းပေးပါအုန်းနော်
ကျနော် တစ်ခါမှ မဆက်ဆံလို့လားလို့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်မိတယ်ဆရာ။ အဲဒါကြောင့်
Reply	lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:57	ဒူးရင်းသီး မကြိုက်တဲ့သူကို ကြိုက်လာအောင် တုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး ကြိုက်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စံထားမှုဟာ ကိုယ်နဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ချင်မှ သက်ဆိုင်မှာပါ။ အရေးကြီးတာက လူ့ဘ၀မှာ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရဲတဲ့ သတ္တိနဲ့ စွမ်းရည်တွေ ရှိဖို့ပဲ လိုပါလိမ့်မယ်။
Reply	john permalink	30/03/2013 21:31	want to read all.
Reply	နေသန့်ဇော် permalink	31/03/2013 04:03	ကျနော်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်နဲ့ ဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့်စွဲနေသူပါခင်ဗျာ
အဲဒီအကျင့်ကြောင့်ကော မိန်းမရရင် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ
အဲဒါကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ
Reply	lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:50	ဖတ် ဖတ် ဖတ်
Reply	သူရ permalink	31/03/2013 04:13	လက်နဲ့ဖြေဖျောက်ပြီးတိုင်း လိင်တံထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ သုက်ရည်တွေကို ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲခင်ဗျာ
အဲဒါကို မထုတ်ရင်ကော ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ မဆက်ဆံမီနဲ့
ဆက်ဆံပြီးတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါသလား…?။
Reply	သူရ permalink	02/04/2013 02:24	မင်္ဂအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေဆရာ
ကျနော်ဟာ အခုအသက်၂၆နှစ်ပါပြီ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျနော်ဟာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်နဲ့အာသာဖြေတဲံ့အကျင့်ဟာ စွဲလာခဲ့သူပါ အဲဒါဟာ
မိန်းမယူရင် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ တစ်ချို့ကာမ ပညာရှင်တွေ
က လက်နဲ့ ဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့်ဟာ တော်တော်ဆိုးကျိုးတွေက ဖြစ်နိုင်
တယ်လို့ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆရာအမြင်ဘယ်လိုမျိုးလဲ သိချင်
ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြီးတော့ ကျနော်အဲဒီငယ်ငယ်ကတည်းက စွဲလာတဲ့ ဒီလက်
နဲ့ဖြေဖျောက်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လိုထိမ်းချုပ်ရင် ဖျောက်နိုင်မလဲခင်ဗျာ
ပြီးတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မဆက်ဆံမှီ နှင့် ဆက်ဆံပြီးတဲ့ အချိန်တွေ
မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ
Reply	lettwebaw permalink*	20/04/2013 00:49	ဖတ် ဖတ် ဖတ်
Reply	ကလေးမ permalink	08/04/2013 20:34	ဆရာ
ရာသီသွေးပေါ်ချိန်မှာချစ်တင်းနှောတာနဲ့ သွေးပေါ်ပြိးမှချစ်တင်းနှောတာ ဘယ်အချိန်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေများလဲသိချင်ပါတယ်
Reply	yethihalwin permalink	13/04/2013 20:23	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
Reply	su008443 permalink	28/04/2013 14:21	ဆရာ
သမီးမေးချင်တာက သမီးက အိမ်ထောင်သည်ပါဆရာ။လိင်ဆက်ဆံဖို့ အမျိုးသားက နှိုးဆွရင် နာကျင်တဲ့ ကြောင်းပြောမှ စိတ်ပါတယ်ဆရာ။ဥပမာ ဆေးထိုးတာမျိုးပေါ့။ကန်တော့ပါဆရာ။အရမ်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်တာမျိုးမကြိုက်ပါဘူးဆရာ။ဆေးထိုးတာကြောက်တယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာမျိုးပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးရတယ် ၊ဘာညာ အဲလိုမျိုးပေါ့။သူနဲ့ဆေးသွားစစ်တာမျိုး။အဲဒါကောင်းလားဆရာ။သမီးအမျိုးသားကကျတော့ အဲဒါမျိုးတွေ မပြောချင်ဘူးဆရာ
Reply	lettwebaw permalink*	02/05/2013 03:18	ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပဲလေ။
Reply	AyeTZLwin permalink	02/05/2013 01:19	ဆရာနဲ့ Biker ဆွေးနွေးတာ ဆရာ့ဘက်က အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် သမီးက အသက်ချင်း ၁၂ နှစ် ကွာတဲ့မိဘနှစ်ဦးက မွေးခဲ့တာဖြစ်လို့ပါ အမေကကြီးတာပါ အဖေက ၄၀ကျော်လောက်မှာ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာ လူသိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့လို့ ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမက အိမ်ထောင်ရှိတဲ့အတွက် ပိုရှက်ရပါတယ်။ နောက် ကြုံသလို ကြောင်သူတ်ာလည်း လုပ်လို့ ရှက်ရွံမုန်းကြီး ခံစားရတာ ခဏခဏပါ။ ခု အဖေက ၅၆ နှစ်၊ အမေက ၆၇ ပါ။ အမေ့ကို ရန်ရှာ ကြိမ်းမောင်း ပေါက်ခွဲ ငွေတောင်းပါတယ် အမေက အသက်ကြီးတော့ အတူလည်း မအိပ်စေချင်တော့ အမေ့ကို ငွေပေးလိုက် နောက်မိန်းမယူလည်း ယူပလေ့စေ။ အမေတို့ အဖေတို့ အစက ဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်း မတွေးကြဘဲ မွှန်ပြီး ဘယ်လိုယူခဲ့ကြသလဲလို့ အမေ့ကို ပြောမိပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရန်ရှာလို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောမိတာပါ အဖေက ဆရာပြောသလို စိတ်တွေ သန်နေပုံပါ။ TVက ဘီကီနီဝတ် ကောင်မလေးတွေ သိပ်ကြည့်တာပါ စိတ်ပျက်စွာ ရှက်ရပါတယ်။
ဆရာပြောတာလက်မခံတဲ့သူတွေ အသက်ကွာတဲ့ မိန်းမယူကြည့်ပါ။ မဖောက်ပြန်ရင်၊ ကြောင်သူတော် မလုပ်ရင် ထိုင်ရှိခိုးမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
COMMENT မပို့တတ်ပဲ ပြောချင်လွန်းလို့ ပို့တါပါ။ ဆရာ့ကို မမြင်ဖူးပေမယ့် ဆရာ့စာတွေက လူတွေအကြောင်း မကွယ်မဝှက် ရေးတတ်တာတွေ၊ နားလည်ပေးမှုတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ဟန်ဆောင်မှုလောကကြီးထဲမှာ အမှန်မြင်တဲ့ ခေတ်မီ Idea တွေ ရှိတဲ့ ဆရာ့ကို အစဉ်လေးစားလျက်…
Reply	ကိုကျော်မြင့် permalink	14/05/2013 21:15	ဆရာအတ္တကျော်ကို လုံးဝလေးစားပြီး ဆရာ့စကားတွေကို အပြည်.အဝထောက်ခံပါသည် facebook တွင်လည်း Like လုပ်ပါသည်။
Reply	ဦးကျော်မြင့် permalink	15/05/2013 14:12	ဆရာတင်ထားသော Post များကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ဖတ်ပြီး comment များကိုလည်း တစ်လုံးမကျန် ဖတ်ပြီး ဆရာ့ကို ဆရာရွှေဥဒေါင်း၊ ဆရာသော်တာဆွေ၊ ဆရာမင်းသိင်္ခတိုနှင့် တစ်ဂိုဏ်းတည်းထား ကိုးကွယ်ပါသည်။
Reply	lettwebaw permalink*	15/05/2013 17:49	ဘုရား ဘုရားးးးး မိုးကြိုးတွေတော့ ပစ်ကုန်တော့မှာပဲ… ဦးကျော်မြင့် permalink	15/05/2013 18:48	ဟားဟားဟား
Reply	ဦးကျော်မြင့် permalink	15/05/2013 19:22	ဒီ site က အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ် ပညာမတတ် ဥာဏ်ရည်နိမ့်သော စုန်းပြူးတစ်ချို.လွဲရင်ပေါ့ ဆရာအတွက်ပါ အကျိုးရှိပါသည် ဆရာ့အတွက်ကတော့ ဆရာ စာဖတ်ပရိတ်သတ် တိုးလာနိုင်သည် ကျုပ်တို.ရွာသားတောင် ဒီ site ကို စဖတ်ပြီး နောက်တရက် ဆရာ့စာအုပ်တွေကို လက်လှမ်းမီသလောက် အကုန်ဝယ်ပါသည်၊
Reply	သူရ permalink	19/05/2013 00:56	ဆရာ ကျွန်တော့်ဇနီးဖြင့်ချစ်တင်းနှောပြီးရင်
သူကတော့ပြောတရ်လေခိုတာတဲ့ လေကဘာကြောင့်ခိုတာလည်း ရောဂါကြောင့်လား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
Reply	lettwebaw permalink*	19/05/2013 07:44	ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အပယ်ကြောက်လို့ ဖြစ်တာပါ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။
Reply	ကီယာ permalink	19/05/2013 16:02	အပယ်ကြောက်တော့ကလေးမွေးရလွယ်တာပေါ့
မကြာခင်က တင်ထားတာ	လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါများ
ဘယ်လိုဟာတွေနဲ့ တွေ့နေမှန်းကို မသိဘူး
လအလိုက် မော်ကွန်း	Select Month January 2013 April 2012 March 2012 January 2012 December 2011 November 2011 August 2011 July 2011 March 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 ဓာတ်ချောစာက သိချင်ရင်
အားပေးကြတဲ့ အကြိမ်ရေ	1,047,937 hits
WordPress.com	Facebook စာမျက်နှာက ဟောဒီမှာ	Blog at WordPress.com.
Follow “ATK's Explicit Blog”